မထငျမှတျဘူး ( စ / ဆုံး )
မွောကျဥက်ကလာကိုပွနျသော မီနီဘကျဈလေးထိုးရပျလာတော့ လူအုပျကွီးနဲ့အတူ မသီတာလဲကားပျေါတိုးတကျလိုကျရသညျ။ အရမျးကွီးမကပျြသျောလညျး လူအပွညျ့နှငျ့ပငျ။ ဒါတောငျ စနနေနေ့လေ့ညျခငျးပဲရှိသေးသညျ၊ ရုံးဆငျးခြိနျဆိုလြှငျကားပျေါတကျဖို့တောငျမန ညျး။ သီတာက ရနျကုနျမှာ အလုပျလာလုပျတာ ၃နှဈရှိပွီဆိုတော့ ရနျကုနျပါးဝနပွေီဆိုပါတော့။ သူတို့နားက ကုနျစုံဆိုငျမှလုပျရငျးတဖကျက ပှဲစားတောငျလုပျနပွေီး သူတို့မွောကျဥက်က လာ အဝိုငျးကွီးထိပျနားမှာတငျ သူပှဲစားလုပျပေးထားတာ တျောတျောမြားပွီ။ ဒီနလေ့ညျး မွို့ထဲမှာ အိမျရောငျးမယျ့သူရှိလို့စကားပွောပွီး ပွနျလာတာ။ ရခေဲ ဆိုငျနားရောကျတော့ လူတဈအုပျတကျလာပီး အတျောကပျြသှားသညျ။ မတျတပျရပျသူတှနှေဈတနျးကနေ သုံးတနျးဖွဈသှားသညျ။ သူ့နောကျမှာတော့ ခုနက သူ့ကိုကှတျကွညျ့ကှကျကွညျ့လုပျနသေညျ့ကောငျလေးတဈယောကျ၊ အမူးသမားတှေ ကုလားတှနေဲ့စာရငျတော့ တျောသေးတာပေါ့ဟုတှေးသညျ။ ရနျကုနျ မှာဘကျဈကားစီးရငျဒီလိုပဲ မသီတာလိုအိုးကောငျးကောငျးမြိုးဆိုလြှငျ အထောကျခံဖို့သာပွငျထားပတေော့ပဲ၊ ကံကောငျးတာတဈခုက သူကလဲကွိုကျတယျ လေ။
ယောကြာင်္းနဲ့အနဝေေးနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒီလိုကိစ်စဖွဈလာရငျသူမအတှကျ ဖွရှေငျးစရာနှဈနညျးပဲရှိတယျ။ တဈနညျးက သူနှငျ့ငှကွေေးကိစ်စတှနေဲ့ငွိထားသော သူ့ကုနျစုံဆိုငျသူဌေး ဦးအောငျမိုး၊ သူကတော့ သူမကိုတှလြေှ့ငျငနျးငနျးတကျ ပွောတာတော့ သူ့သမီးအကွီးမကွီးနဲ့တူလို့သူ့စိတျထရပါသတဲ့ ကဲ။ အဖိုးကွီး ဖွဈလို့သိပျဆန်ဒမပွညျ့ဝသလို သူလဲသိပျဖီလျးမလာ၊ သူအဖိုးကွီးဆီမသှားကွာပွီ။ နောကျတဈခုက ခုလိုကားပျေါကရသစေိ့တျဖွလေေးတှေ၊သူတို့က ကား စီးနရေငျး ကားပျေါမှာထောကျရငျးဖီလျးခံ၊ သူမက သူ့ဖငျကွားထဲလာထောကျနတေဲ့ လူရဲ့ဆိုဒျကိုမှနျးပွီးဖီလျးတကျ၊ မှတျတိုငျရောကျတော့ သူ့လမျးသူသှး ကိုယျ့လမျးကိုသှားပဲ ရှငျးတယျ၊ ဘယျသူမှမသိဘူး။ ဟိုတခေါကျကတော့ သူ့ဖငျကွားထဲ နှေးနှေးထှားထှားကွီးလာ ထောကျထားတော့ ရငျခုနျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတာ စတီးထမငျးခြိုငျ့လေးဖွဈနလေို့ ရီရသေး တယျ၊ တဈခါတလေ ကုလားတှလောထောကျရငျတော့ သူမကွိုကျပေ။ မသီတာမှ အခြောအလှကွီးတော့မဟုတျ ရိုးရိုးသာမနျမိနျးမ အသကျ၃၆ အိမျထောငျရှိ ရှတေောငျသူ အကိတျတဈယောကျ။ အသကျ ၃၆ကလေးတဈယောကျအမဆေိုတော့ ဗိုကျခေါကျလေးမဆိုစလောကျရှိတာကလှဲပွီး ကနျြတာ ကတော့သရယေိုစရာ ဆိုတော့ကာ ကားပျေါရောကျလြှငျ အထောကျခံရသမွဲ။
ရုတျတရကျ လူတှပွေနျဆငျးသှားတော့နဲနဲပွနျခြောငျသှားသညျ၊ သို့သျော သူ့နောကျက ကောငျလေးကမခှာသေး။ လူက နှဈဆယျလောကျပဲရှိဦးမယျ၊ အောကျကပူပူနှေးနှေးလေးကလဲ ထာကျထားတာက ကလေးလိုပဲ။ အငျး ခလေးတှအေတကျကောငျးတှတေကျနတော။ သူ စခငျြနောကျခငျြစိတျနှငျ့ သူ့ဖငျ ကိုမသိမသာ အနောကျနဲနဲတိုးပှတျပေးလိုကျတယျ။ ကောငျလေး မကျြလုံးပွူးသှားတယျထငျတယျ တခွားလူတှဆေို ပိုကပျလာမယျဖွဈသျောလညျး ကောငျ လေးကတော့အနောကျလဲနဲနဲပွနျဆုတျသှားတယျ။ ခနနတေော့ ပွနျလာကပျသညျ၊ လကျကိုလဲ အပျေါတနျးကိုငျလိုကျ ပွနျခလြိုကျနဲ့ သူဖငျနဲ့မထိ ထိအောငျ လုပျနတော စိတျမရှညျခငျြစရာဖွဈသညျ။ သူ့ရှထေို့ငျခုံက လူဆငျးသှားပွီး မသီတာထိုငျလိုကျတော့ ကောငျလေးကဘေးမှာလာရပျသညျ။ မော့မကွညျ့ သျောလညျးသခြောတာကတော့ သူမအကြီလညျဟိုကျထဲမှ တစှနျးတစပျေါနသေောသူမရငျသားတှကေိုငုံကွညျ့ပီး စိတျလှုပျရှားနပွေီထငျ၏၊ လကျမောငျး ကိုလာကပျသောသူ့ပေါငျကွားမှာ နှေးနှေးကွီးကမာလာသညျ။
မှတျတိုငျမှာလူတှထေပျတကျရျြ ခါးပိုကျနှိုကျရနျကွောကျသလို သူ့ကြောပိုးအိတျကိုအရှမှေ့ာပွောငျးလှယျပီးကိုငျထားလတေော့ လူတိုးရငျ သူ့လကျလေးက မသီတာနို့အုံနားရောကျရောကျလာသညျ။ ဒီကောငျလေးအကွံဉာဏျမြားပွီထငျသညျ။ မော့ကွညျ့လိုကျတော့ တကယျကလေးခြောလေး အသားဖွူဖွူမှာ မကျြနှာနဲနဲနီနသေညျ။ မသီတာကလေးကိုစခငျြလာသဖွငျ့ မသိမသာ ရငျကိုပိုမောကျလိုကျပွီး သူ့ဘကျနဲနဲကပျပေးလိုကျတော့ သူ့လကျလေးနဲ့ထိမိသှား တယျ၊ သူကကိုယျ့ကိုလာထိတာမဟုတျ သူလကျကိုကိုယျ့နို့နဲ့သှားထိတာဆိုတော့ ကောငျလေး လနျ့သှားသညျထငျသညျ။ ခြှေးတှဘောတှထှေကျလာတာမွငျ ရတော့ မသီတာရီခငျြလာသညျ။ သူနိုငျလို့ရလောကျသညျ့အရှယျမို့ရော၊ သူထိကွညျ့ခငျြတာ ထိကွညျ့ပါစဆေိုတဲ့စတေနာနဲ့ရော မသိခငျြယောငျဆောငျ ပေးလိုကျတယျ။ (ကောငျလေးက အတှအေ့ကွုံမရှိအသဈလေးဖွဈသျောလညျး အတောငျ့စားအမကွီးတဈယောကျက ပေးတာကိုကွောကျကွောကျနဲ့ယူရ တဲ့ပုံစံမြိုးဖွဈနသေညျ။ သူ့မှာ ဒီနို့ကွီးတှကေို ထိလဲထိကွညျ့ခငျြ အျောလိုကျမှာလဲကွောကျနှငျ့ ခြှေးတှပေငျထှကျလာရသညျ။ အထိအတှကေ့တော့ ဘာ ကောငျးသလဲမမေးနှငျ့ သူဖွတေကျမှာမဟုတျ။)
လူတှတေိုးတော့ အရှကေို့ငျးသလိုလိုဘာလိုလိုနှငျ့ မသီတာရငျအုံတဈခုလုံးကိုလာထိသညျ။ အဲ့လောကျမရဲဟုထငျထားသော မသီတာမှာ အံ့သွရသညျ၊ ကိုယျဟနျ့ဖို့ပွနျလုပျရမညျဖွဈသျောလညျး ကောငျလေးရှကျသှားမှာ ကောငျလေး မကျြနှာညှိုးသှားမှာ စိုးသဖွငျ့ရော မသိသလိုသာနပေေးလိုကျတော့သညျ။ သူ့ယောကငြ်္ားကိုငျသလို တဈအုံလုံးကိုငျတာမှဟုတျတာ နို့ဘေးသားလေးကိုလကျနဲ့ထိရုံပဲဥစ်စာ ဘာဖွဈလဲ၊ ဒီကောငျခြောလေးကနြေပျတာကို သူပြျောနေ သလိုခံစားရသညျ။ ဒီအသကျအရှယျရောကျမှ ကောငျလေးစိတျဝငျစားခံရရျြ စိတျလှုပျရှားတာလဲဖွဈနိုငျသညျ။ ဒီကောငျလေးကလဲ အတျောရောငျ့ရဲသညျ ဒီ ထကျဘာမှပိုမတကျ ခုနအတိုငျး ထိထားရုံလေးနဲ့ငွိမျနသေညျ။ ခဏကွာတော့ လူတှခြေောငျသှားပီး သူ့ဘေးကလူလဲဆငျးသှားတော့ သူဘေးရှလေို့ကျပီး ကောငျလေးကိုပွုံးပွပွီး ဝငျထိုငျရနျဖိတျချေါမိသညျ။ လာ မောငျလေး ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးပါ ဘယျပွနျမှာလဲ အဲ ဟို မွောကျဥက်ကလာပါ (ကောငျ လေးမကျြနှာခြှေးပွနျနပေီ) ဟငျးဟငျး မောငျလေးက မွောကျဥက်ကလာမှာနတောလား မှုတျဝူးဗြ အဒျေါလူတယောကျရှာခိုငျးလို့ပါ သွျော … ကြောငျး တကျနတောလား အမှနျတော့ ကောငျလေးကိုသူစကားပွောခငျြရျသြာစကားတှဆေကျမြားနခွေငျးဖွဈသညျ။ ကောငျလေးက ဆကျကနျးရီးယားကှနျပွူတာ ဖွဈကွောငျးပွနျဖွပေီး သူတို့စကားတှဆေကျသှားသညျ။ ဒီလိုကောငျအထကျတနျးစားကောငျခြောခြောလေးနဲ့ စကားဖောငျဖှဲ့နရေတာမသီတာပြျောသလို ဖွဈနသေညျ။
အဝိုငျးကွီးထိပျပါလား အငျး ပါတယျ အမဆငျးတော့မယျနျော မငျးရော ကနြျောလဲဆငျးမှာ မသီတာအရှထှေ့ကျသှားသညျ၊ စိတျထဲတော့သိပျမသင်ျကာ ခုနကတော့ မရမေရာပွောပွီး ခုဆငျးတော့ သူနဲ့တဈမှတျတိုငျတညျး။ တိုးဆငျးကွတော့ သူ့နောကျကခပျနှေးနှေးတဈခြောငျးက ကောငျလေးဖွဈဖို့မြားတယျ လို့သူတှေးလိုကျသညျ။ ကားအောကျရောကျတော့ မောငျလေးရှာမယျလိပျစာပေးလေး အမကူရှာပေးမယျ အဲ . . . လိပျစာကပြောကျသှားပီအမရဲ့ အဒျေါ ပွောတာက မှတျတိုငျနားမှာပဲတဲ့ အဲ့ဒါဘယျလိုရှာမလဲ နာမညျကော နာမညျက အဲ ဒျေါမွခငျတဲ့ ကှမျးယာဆိုငျဖှငျ့ထားတယျပွောတာပဲ၊ ကြှနျတျောလဲ အနီးအနားလိုကျကွညျ့ပီး မတှရေ့ငျပွနျမှာပါ အငျး . . . . အကူအညီလိုရငျပွောနျော အမက ဒီမကျြနှာခွငျးဆိုငျနားကတိုကျမှာနတော ဝငျလညျပေါ့ ကြေးဇူး နျောအမ . . . ဟို ရလေေးတခှကျလောကျသောကျပီးမှ သှားရှာမလားလို့ ဒီကောငျလေး သူ့ကိုတော့စိတျဝငျစားနတောသခြောပီ ဒီအရှယျကွီးကို၊ သူကလဲဒီ ကောငျလေးကိုစိတျဝငျစားမိပွီမဟုတျလား။ ဒီကောငျလေးနှငျ့ထပျပတျသတျခငျြသေးရျြ အိမျသို့အလညျချေါသှားလိုကျသညျ။ အငျးလေ . . . အမအိမျမှာရေ လိုကျသောကျ ပီးမှရှာပေါ့ ဟာ ကြေးဇူးဗြာ အမကသိပျလှသလို သဘောလဲသိပျကောငျးတာပဲနျော အမယျ မောငျလေးက မွှောကျတကျသားပဲ ဟငျးဟငျး ပွောဇမျးဘာစားခငျြလို့လဲ အာ အမကလဲ တကယျပွောတာပါ ကဲ အမကဘယျမှာလှလို့လဲ တောသူကွီးကို အာ အဲလိုမပွောပါနဲ့ဗြာ ကြှနျတော့မကျြလုံး ထဲမှာတော့ အမကသိပျကိုလှပါတယျ အတညျကွီးပွနေတော၊ မသီတာတောငျရှကျသှားတယျ။ ဖွူဖွူနုနုကောငျလေးက သူ့ကိုလှတယျဆိုတော့ သူမသိပျ ကနြေပျသှားသညျ။
ကဲ အပွောလေးတှလြှေော့ ဒီတိုကျပဲ အပျေါရောကျမှမငျးစားခငျြတာကြှေးမယျ ဗြာ တ ကယျ နျော ဟဲ့ . . . . သွျော ဒီကလေး ရှကျရှကျနဲ့မသီတာပွေးတကျ သှားသညျ၊ အနောကျကကောငျလေးကတော့ သူ့ဖငျတုနျးတှလှေုပျသှားတာကိုကွညျ့နတေော့မညျ။ မသီတာအခနျးက ဒုတိယထပျမှာ တံခါးဝရောကျတော့ ဖွူဖွူနုနုနဲ့ပိုးဟတျဖွူလေးကို စခငျြစိတျဖွငျ့ ကဲ ရပေဲရမယျနျော ဒါနဲ့ ရှငျလေးက ဘာစားခငျြလို့တုနျး ဟှနျး ဟှနျး (ကောငျလေးမှာ ရှကျသှားပွီး မကျြနှာကွီး ရဲလာသညျ) အာ ဟို ရပေါပဲဗြာ တခွားဟာမဟုတျပါဘူး အမကိုနောကျတာပါ ဆိုသျောလညျး သူ့အကွညျ့တှကေ မသီတာရငျသားတှမှေမခှါ၊ ခကျပါပွီခ လေးရယျ။ အပြိူလေးတဈယောကျလို သူမရငျတှဘောတှခေုနျလို့။ ကဲ ထိုငျဦးမောငျလေး အမရသှေားယူပေးမယျ ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးပါနျော ဒါနဲ့ မောငျ လေး နာမညျက ကြှနျတျောနာမညျ အာကာပါ အမကရော အမနာမညျ သီတာ တဲ့ ရော့ရသေောကျလိုကျဦး သူ့ဘဝမှာသူ့အမြိုး သူ့မောငျလေးတှကေလှဲပွီး ဒီအရှယျခြာတိတျလေးတှနေဲ့မဆကျဆံဖူး၊ ဒီဖွူဖွူသနျ့သနျ့ကောငျလေးကို သူစိတျဝငျစားသှားသညျ ပွီးတော့ ဒီကောငျလေးကလဲ သူ့ကိုစိတျဝငျစားလို့ဒီ အထိရောကျလာတာမဟုတျလား။
ကောငျလေးကတော့ ရှကျနတောနဲ့ စမှာမဟုတျ သူကပဲ ကဲ ခနနားဦး နဲနဲအိုကျတယျ အမအကြီင်ျလဲလိုကျဦးမယျ ပွီးမှ အမပါထှကျကူရှာပေးတာပေါ့ မသီတာအခနျးထဲဝငျသှားပွီး ကောငျလေးခြောငျးခငျြခြောငျးလို့ရအောငျ တံခါးမပိတျ လိုကျကာကွားမှမွငျနိုငျသညျလေ။ အပျေါအကငြ်္ီကိုခြှတျလိုကျတော့ သူ့ရငျသားနှဈဆိုငျဟာသိပျမကွာခငျကွုံတှမေ့ယျ့အရေးအတှကျကွှားကွှားကွီးစောငျ့မြှျောနကွေတယျ။ ဘရာဇီယာကို ခြှတျလိုကျတော့ အို နို့သီးခေါငျးလေးတှပေါထောငျလို့ပါလား။ ထမီတဈထညျကောကျလဲလိုကျပွီး မှနျထဲကကွညျ့လိုကျတော့ ကောငျလေးခမြာမကျြလုံးကွီး ကိုပွူးလို့၊ သူကနြေပျသှားသညျ။ အကြီတဈထညျကောကျဝတျမယျလုပျတော့ ဘရာဇီယာမဝတျတော့ပဲ ဒီအတိုငျးအကြီတထပျတညျးဝတျပွီးပွနျထှကျခဲ့ လိုကျတယျ။ ဒါနဲ့ ငါ့မောငျက လူခြောပဲ၊ ကြောငျးမှာဆို စျောတှဝေိုငျးနမှော အာ . . အမကလဲ စျောမရှိပါဘူး အမယျ ဟုတျလို့လား ဒီလောကျခြောတဲ့ လူခြောလေးကို အမကတော့လုပျ ပီ နဲနဲပါ အဟဲ အမ မသီတာကမှ တကယျ့မိနျးမလှ အမယျ တောသူကွီးကို ဘယျမှလှလို့လဲ မငျးကြောငျးမှာမှ ဆျောလှလှလေးတှေ ကတြျောတို့မကွိုကျပါ ဘူး ပိနျတာရိုးတှေ အမသီတာတို့လို အလုံးအထညျမြိုးမှ တကယျလှတာ ပွောပွောဆိုဆို မကျြလုံးက မသီတာရငျသားဆီကမခှာတော့ ကွညျ့ရငျး နို့သီ ခေါငျးကလေးမှာလူကွညျ့တော့ထောငျလာသဖွငျ့ အကြီပျေါမှမွငျနရေသညျ။
ဒါဆိုဒို့က ရုပျလှတာမဟုတျဘူးပေါ့ ဘျောဒီကောကျကွောငျးကလှတာပေါ့ ဟုတျလား အဲ့လိုမဟုတျဘူးလေ ဒီမကျြနှာနဲ့ ဒီဘျောဒီလိုကျတယျ လှတယျပွော တာ အဲ့လို့ကောကျကွောငျးလှလို့ မငျးကားပျေါမှာကပျနတောမဟုတျလား ဟှနျ့ (မကျြစောငျးလေးနဲ့ညုလိုကျတယျ) အာ အမကလဲ လူတိုးလို့ပါဗြ ကောငျ လေးမကျြနှာတျောတျောရဲသှားသညျ၊ နောကျတဆငျ့ထပျတငျမှဖွဈမယျ။ အာကာထိုငျနတေဲ့နားသှားထိုငျပွီး အမယျ ဘာလူတိုးလို့လဲ အောကျကလဲ တောငျ နပေီးတော့ အဲ အဲဒါက ဟို ကပျနလေို့ပါ ပီးတော့ အမဖငျကွားထဲကိုလဲ လာထောကျတယျလေ ဟုတျတယျမို့လား မသီတာစကားကွမျးကွမျးပွောလမေ့ရှိ ပါ၊ ရှကျနတေဲ့ကောငျလေးကို ပိုရှကျစခေငျြလို့ပွောရငျး သူစိတျပိုပါလာသညျ။ ဘာအခုမှခေါငျးငုံ့ထားတာလဲ ပွောလေ ဘာလို့ဒို့ဖငျကိုလာထောကျတာလဲ လို့ ဟို ဟို မပွောတကျဘူး ပွနျတော့မယျ အမယျ လူကိုကားပျေါမှာထောကျတုနျးကထောကျပီး ခုမှဘာပွနျမယျလဲ မရဘူး ပွော ဘာလို့အမကိုလာထောကျ တာလဲ ဟို ဟို အမစိတျမဆိုးနဲ့နျော အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ အမ အဲ ဖငျက သူမြားတှထေကျလှလို့ ကွီးလဲကွီးလို့ ကြှနျတျောထောကျမိသှားတာပါဗြာ စိတျမ ဆိုးပါနဲ့ ဘာပဲပွောပွောသူ့ဖငျကိုလှတယျလို့ပွောတာ မသီတာကနြေပျသှားပွီး ရှကျလဲရှကျသှားသညျ။
စိတျမဆိုးပါဘူးအာကာလေးရယျ၊ တကယျလား ဒို့ဖငျလှတယျဆိုတာ ဘယျလိုလှတာလဲ ကတြျောမပွောတကျဘူးဗြ သူမြားထကျတော့လှတယျ လုံးတငျး ပွီး ဘောလုံးကွီးလိုပဲ ဆိုတော့ မောငျလေးက ထိခငျြ ကိုငျခငျြနတောလား ဟုတျ ဟုတျကဲ့ အမစိတျမဆိုးပါနဲ့နျော မကျြနှာငယျလေးနဲ့ကောငျလေးကို သနား ပွီးပါးလေးကိုနမျးလိုကျတယျ ဟငျ့အငျး အမှနျတိုငျးပွောရငျစိတျမဆိုးတဲ့အပွငျ မငျးကိုဆုတောငျခြဦးမှာ ကဲပွောပါဦး အာကာကိုငျခငျြနတောဖငျတဈခု တညျးလား အမှနျအတိုငျးပွောရရငျတော့ တကိုယျလုံးပဲအမရယျ ဟယျ . . ဒို့နို့တှရေောပေါ့ ပွီးရငျဘာလုပျမှာလဲ ကတြျော မပွောတကျဘူး၊ ဟို အမကိုကိုငျ ခငျြ နမျးခငျြနတောပဲသိတယျ ကဲ ရှကျမနနေဲ့တော့အာကာ မငျးကတကယျ ရညျးစားမရှိ မိနျးမမလုပျဖူးတာလား ဟုတျကဲ့ တကယျဟုတျပုံရပါသညျ။ လူပြို လေးကိုရှငျပွုပေးရမညျဆိုတော့ သီတာစိတျကွှလာပွီး သီတာကပဲစနမျးလိုကျသညျထငျသညျ၊ နှုတျခမျးနှဈခုဆကျသှားတော့ အာကာလကျတှကေ မ သီတာရငျသားတှဆေီမရဲတရဲရောကျလာသညျ။ ခုထိရှကျမနသေေးတာ တျောသေးတာပေါ့။ ဒါတောငျ မကိုငျရဲသလိုကိုငျနသေဖွငျ့ သူမကိုယျတိုငျကိုငျပွ လိုကျရသေးတယျ။ ခွတေုနျလကျတုနျနဲ့ကောငျလေးနှငျ့နမျးနရေတာ မထငျမှတျလောကျအောငျ ရငျခုနျနရေသညျ။ သူ့နို့တှကေိုညှဈရဲလာပွီး ပေါငျတှကေို ပှတျပေးသညျ။ သီတာလဲ သူ့ပုဆိုးအောကျမှထောငျနတေဲ့သူ့ဂြိုးလေးကိုပှတျပေးလိုကျတယျ၊ ဟော့တော့ နမျးနတောကိုခှါပွီး သခြောပွနျကွညျံလိုကျတယျ၊ သူကိုငျလိုကျမိတာဒီကောငျလေးဟာမှဟုတျရဲ့လား။
သူထငျတာကဖွူဖွူဖြော့ဖြော့ကောငျးလေးမှာ သေးသေးလေးပဲရှိမယျပေါ့ လကျတှတှေ့လေို့ကျရတာက ဦးအောငျမိုးထကျကွီးပွီး သူ့ယောကြာင်္းနီးပါး လောကျ တောငျမတျနတောနတေဲ့သူ့အရှယျအစားကိုသဘောကသြှားတယျ။ ဂှငျးတျောတျောဆော့တယျထငျတယျ။ သူကနြေပျသှားပွီး ပုဆိုးဆှဲခြှတျလိုကျ တယျ၊ သူ့အကြီကိုလဲခြှတျပေးလိုကျတော့ အာကာမှာ သူ့နို့ကွီးတှကေို ကိုငျကွညျ့ညှဈကွညျ့လုပျနသေေးရျြ စို့ခိုငျးလိုကျရသေးသညျ။ သူကတော့ ကောငျ လေးလီးကိုမွတျမွတျနိုးနိုးဆုပျကိုငျပွီး ကှငျးတိုကျပေးနလေိုကျတယျ၊ ခနနတေော့ အာကာ မောငျလေး ဒီမှာကွညျ့ဇမျး မတျတကျရပျပွီး ကနျြနသေေးတဲ့သူ့ ထမီပါခြှတျပွလိုကျတယျ၊ အာကာ့မှာ ပါးစပျအဟောငျးသား လှသေးရဲ့လား အာကာ သိပျလှတာပဲ မသီတာရယျ ဒါလေးကော မလိုခငျြဘူးလားခလေးရယျ (သူ့စောကျမှေးတှကေိုထိုးဖှဆော့ပီးမေးလိုကျတာ) ပွနျမဖွနေိငျဖွဈနတေဲ့ အာကာမကျြနှာနဲ့ပှတျပေးလိုကျတယျ အာကာမှာဘာမှမလုပျတကျ ရုပျရှငျ တှထေဲကိုလြှကျကွညျ့ဖို့လြှာထုတျလိုကျပမေဲ့ အမှေးတှေ ကိုပဲယကျမိတယျ။ သူသငျပေးမှရတော့မယျ့ပုံပဲ။
အခနျးထဲသှားကွရအောငျ ခလေးရယျ ဖငျပွောငျကွီးနဲ့လမျးလြှောကျသှားတဲ့ မသီတာဖငျကွီးကိုကွညျ့ပွီး အနောကျကအမွနျလိုကျသှားတယျ။ အခနျးထဲ ရောကျတော့ ဘာမှမပွောနိုငျဘူး ကုတငျပျေါတငျပါးလှဲထိုငျနတေဲ့မသီတာကို နမျးတယျ၊ သူသဘောကနြတေဲ့ နို့ကွီးတှကေိုလဲ အားရပါးရပငျ့ကိုငျတယျ။ မသီတာကလဲ အာကာ့လီးကိုပိုမာတောငျလာအောငျရှတေို့းနောကျငငျဂှငျးတိုကျပေးပီး ပိုမာတောငျလာတော့ မသီတာလဲဂှငျးတိုကျတာရပျလိုကျတယျ၊ ပို့ မယျ့ပို့ကုတို့ရောကျအောငျပို့ဆိုတဲ့စကားအတိုငျး ကောငျလေးကိုနတျပွညျပို့ဖို့ သူစတေနာအပွညျ့နဲ့ ကုနျးစုပျပေးလိုကျတယျ။ မသီတာရဲ့လကျနဲ့ ဂှငျးဆှဲပေး နတေုနျးကခံကောငျးကောငျးနဲ့ခံနတေဲ့အာကာဟာ နှေးထှေးစိုစှတျတဲ့မသီတာရဲ့နှုတျခမျးအရသာနဲ့တှတေ့ောငျ့ အား ခနဲတဈခကျြအျောလိုကျတယျ၊ နာလို့ မဟုတျဘူး သိပျကနြေပျသှားလို့။ ရုပျရှငျတှေ စာတှထေဲမှာဖတျဖူးတှဖေူ့းပမေဲ့ မသီတာက သူ့ကိုစုပျပေးလိမျ့မယျလို့မထငျထားဘူးလေ။ မသီတာလဲ တခါမှ ဒီလောကျမထနျဖူးပမေဲ့ ဘာမှမသိတဲ့ကောငျလေးကို ဆရာလုပျခငျြဇောနဲ့ သူသိသူတကျတာတှအေကုနျလုပျပေးရငျး သူစိတျပိုကွှလာတယျ။ သူ့ယော ကငြ်္ားနဲ့သူတောငျအမွဲမစုတျပေးဘူး ဒီကောငျလေးနဲ့မှ သူထနျနတောကိုလဲ သူအံသွတယျ။
အမကိုလဲ ကြှနျတျောပွနျနမျးပေးမယျလေ မငျးကဘာကိုနမျးမှာလဲ (ပွုံးစိစိနဲ့ သိသိကွီး၊ ဒီကောငျလေးပွောတာကွားခငျြလို့တမငျမေးတာ) အမ ဒီဟာလေ အာကာရှကျမနနေဲ့ကှာ ခနကပဲသူ့လီးကိုစုပျပေးပီးပီ သူတောငျဒို့ပါးစပျထဲ လရညျတှပေနျးပီးတော့ အခုဘာပွနျနမျးမှာလဲ (မကျြနှာရဲခနဲဖွဈသှားပေးမဲ့) အမ အဖုတျကိုလေ ယကျတကျလို့လား အမသငျပေးလေ ခဈခဈ အငျးသငျပေးမယျ ပွနျမေးလေ အာကာ အမအဖုတျကိုနမျးပေးမယျလေ မနမျးနဲ့ . . . . . ဒို့စောကျဖုတျကို ယကျပေး (သီတာလဲအဲ့လိုပွောရတာ အရသာတှလေ့ာတယျ) ပွောပီးတာနဲ့ သူ့ပေါငျတှကေိုကားပေးလိုကျတယျ၊ အာကာလဲတကျ သလောကျမှတျသလောကျ ယကျတော့တာပဲ၊ ပေါငျခွံတှကေိုနမျးတယျ ဆီးခုံအမှေးတှကေိုယကျတယျ ပီးတော့ အကှဲကွောငျးကွီးကိုအပျေါကနယေကျနေ တယျ။ သီတာအသညျးတယားယားဖွဈနပေမေဲ့ မထိရောကျတော့ အမှနျကိုသငျပေးရဦးမယျ။ အာကာ့ခေါငျးကို ဆှဲမလိုကျပွီး အကှဲကွောငျးလေးကို လကျခြောငျးနှဈခြောငျးနဲ့ဆှဲဟလိုကျပီး ဒါလေးကိုယကျရတယျ ခလေးရဲ့၊ (အာကာ့ခေါငျးလေးကိုဆှဲကပျပွီးနရောခပြေးလိုကျတယျ) ဒီအဖုလေးကို စုပျပေး အား ဟုတျတယျ အဲ့လိုမြိုး အားဈ အာကာကလဲသူသငျပေးသမြှလိုကျလုပျတယျ၊ အကှဲကွောငျးကွီးကလဲလြှာနဲ့ယကျတာအောကျကခရညေိုကွီးအထိပဲ။ သီတာသငျသာသငျပေးရတယျ တခါမှအယကျမခံဖူးပေ၊ လကျတဖကျကကောငျလေးခေါငျးကိုကိုငျ နောကျတဖကျက နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုခရြေငျး ကောငျးကောငျးခံစားပဈလိုကျတယျ။ ဒီကောငျလေးကိုသငျရငျး သူလိုခငျြတာတှကေိုပါလုပျခိုငျးလို့ရတယျ၊ ကောငျလေးက ခရညေိုကွီးပါယကျတော့ သူ့မှာ တှနျ့ခနဲပဲ။ သူဖျီလျးပိုတကျလာတော့ အာကာ့ခေါငျးလေးကိုထိမျးကိုငျရငျး သူ့အဖုတျအုံကွီးနဲ့ပှတျပေးလိုကျတယျ၊ ကောငျလေးမကျြနှာရှဲသှားတော့ သူပိုလို ခငျြတာပီ။ ခုနက တခြီပီးထားပမေဲ့ ကောငျလေးဟာကမကသြေးဘူး။
အား ကောငျးလိုကျတာ အာကာရယျ . . . ဟုတျတယျ အဲ့လို . . . ရပီမောငျလေး ဒို့လိုခငျြပီ (ယကျနတောကိုရပျပီး သူ့ပေါငျကွားဝငျတာတယျ) ကတြျော . . လိုးရတော့မှာလားအငျး ဟုတျတယျ လိုးရတော့မှာ မငျးလီးကွီးကိုလိုခငျြပီ မငျးလီးကိုဒို့ထဲထညျ့လိုကျတော့ အား ဖွေးဖွေးမောငျလေး အငျး အပေါကျ သခြောခြိနျပီး အားနဲ့ထိုးထညျ့လိုကျတာ ရုပျတရပျဆိုတော့နာသှားတယျ၊ ကောငျလေးလဲ သူ့ဟာကွီးလို့ဆိုပီးကနြေပျနသေညျ။ ကောငျလေးအတှကျပထမ ဆုံးအတှအေ့ကွုံဆိုတော့ အငမျးမရဖွဈတော့သညျ။ အထနှေးပေးမဲ့ စကျကသှကျတယျ၊ ကောငျလေးနှားငတျရကေဖြွဈလေ သူသဘောကလြမေဟုတျ လား။ အရှိနျအထိနျးပဲခပျသှကျသှကျဆောငျ့တယျ ပထမအခြီပီးထားလို့နဲနဲကွာတာ၊ နောကျအခြီကရြငျတော့ပွောပွမှဖွဈမယျ။ အာကာအတငျးဆောငျ့လေ အစိကိုပှတျမိတာမြားပီး သူကောငျးလာတယျ အရညျတှလေဲရှဲနပေီ။ အားဈ . . . ကောငျးတယျ လိုးလိုး ကောငျးလားမောငျလေး ကောငျးတယျ အရမျးပဲ ဟား . . . မနာတော့ဘူး မဟုတျလား ဟငျ့အငျး . . . ဒို့ကိုအားမနာနဲ့ဆောငျ့ အား ကောငျးတယျခလေးရယျ အငျ ကောငျလေးမကွာခငျပီးတော့မယျထငျ တယျ၊ ဆောငျ့ခကျြတှသှေကျလာသညျ။ သူလဲအမွနျလိုကျပီးမှဖွဈမယျ အာကာ့ကိုအောကျကနပွေနျပငျ့ဆောငျ့ပေးလိုကျပီး ခါးကိုစကောဝိုငျးသလိုလုပျ ပေးလိုကျတော့ အဝငျအထှကျပိုထိသလို နှဈယောကျလုံးအတှကျခံစားမှုဆနျးသဈစသေညျ။ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး တုနျတုနျသှားသောနို့အုံကွီးကိုဆှဲပွီး ဆောငျ့သညျ။
အား ကောငျးလိုကျတာအမသီတာရယျ ရီုး ထှကျတော့မယျ လိုးမောငျလေး လိုး ဒို့လဲကောငျးတယျ ပီးခငျြပီ အားဈ သူတို့နှဈယောကျလုံးပွိုငျတူပီးသှား သညျ၊ မသီတာ ပီးနတေုနျး အာကာ့ဖငျ့ကိုကိုငျပီး ကပျညှောငျ့ပေးလိုကျတော့ အရမျးကောငျးသှားတယျ။ ပူနှေးနတေဲ့ယောနီလမျးကွောငျးထဲ အာကာ့လရညျ တှအေားနဲ့ပနျးဝငျလာတော့တယျ။ အာကာပွနျသှားတော့ သီတာမှနျထဲမှာကိုယျ့ဘာသာပွနျကွညျ့ရငျးသဘောကနြသေညျ။ အသကျ ၃၆နှဈဆိုသျောလညျး ခုခြိနျထိယောကငြ်္ားတှကွေိုကျကွသေးသညျ မဟုတျလား။ ရှတေောငျမှာ အသကျသုံးဆယျကြျောနခေဲ့တုနျးက သူ့ဘဝမှာ ယောကျြားတဈယောကျသာ အတှအေ့ကွုံရှိဖူးတာ ယောကငြ်္ားတဈယောကျနဲ့ကွိုကျ အဲ့တဈယောကျနဲ့အိမျထောငျကြ အဲ့တဈယောကျပဲအထိအတှရှေိ့ဖူးသညျ။ ခုရနျကုနျရောကျမှသုံး နှဈအတှငျး နှဈယောကျ၊ ပှဲစားထဲမှာလဲ သူ့ကိုကွံစညျခငျြတဲ့သူ တှရှေိတယျ ဒါတောငျသူ ခပျတညျတညျ ခပျတနျးတနျးနတေကျတဲ့သူမို့လို့။ သူနဲ့ဖွဈတဲ့ ပထမ တဈယောကျက ဦးအောငျမိုး၊ သူအလုပျလုပျတဲ့ကုနျစုံဆိုငျသူဌေး မုဆိုးဖိုကွီး သူမငှလေိုလို့ သူ့အိမျမှာပိုကျဆံသှားဆှဲတုနျးက ဖွဈကွတာ၊ အဲ့တုနျးက သူ့လဲ စိတျပါနတေုနျး အခွအေနတေဈခုအရမို့၊ နောကျပိုငျး နှဈခါထကျဖွဈဖူးလဲ သူစိတျသိပျမလာ။ ခုတဈယောကျကတော့ အသကျ ၁၈လောကျပဲရှိဦးမယျ့ကောငျ လေး၊ ဒါကတော့ ဖွူဖွူနုနုကောငျလေးကိုသူခဈြလို့ မထငျမှတျဘဲဖွဈတာ။ သီတာအတှအေ့ကွုံနဲနဲလေးနဲ့ကလေးကိုဆရာလုပျခဲ့ရတယျ၊ သူမရဖူးတာ ခံစားကွညျ့ခငျြတာမှနျသမြှခိုငျးသညျ၊ ကောငျလေးကလဲသူခိုငျးတာအကုနျလုပျသညျ။ ဒီပိုးဟပျဖွူလေးနဲ့ကမြှ သူကိုယျတိုငျလဲအရမျးထနျပွီး တခါမှမပွော ဖူးတဲ့စကားကွမျးကွမျးတှပွေော၊ အရမျးစိတျပါနတောအံသွရသညျ။ အာကာက နောကျတဈခါထပျတောငျးလုပျပွီး မပွနျခငျနောကျထပျလာခှငျ့တောငျး သှားသညျ။ သူကချေါတောငျထားခငျြတာ ခဈဈ။ ဖောကျပွနျမိပွီဆိုတဲ့အတှေးကတော့ လမျးခုလပျတှငျရပျသှားရသညျပေါ့ သူနယျမပွနျတာလဲ တဈနှဈပွညျ့ တော့မယျမဟုတျလား။
နောကျတဈနေ့ ဆိုငျရောကျသှားတော့ စောနသေညျ ဦးအောငျမိုးတဈယောကျတညျး၊ သူနှုတျဆကျပီးဝငျသှားလိုကျတယျ၊ အတူလုပျနတေဲ့ ကောငျမလေး နီလာက စာမေးပှဲရှိလို့ခှငျ့ယူထားသတဲ့၊ သူတဈယောကျတညျးအလုပျတှရှေုပျတော့တာပေါ့။ ခနနတေော့ တယောကျတညျးအလုပျတှရှေုပျနပွေီလား သီတာ ရပါတယျ ဦးရဲ့ ဈေးဝယျမှသိပျမြားတာ ရော့ လကျဖကျရညျဝယျလာတယျ သောကျလိုကျဦး ဟုတျဦး ကြေးဇူးနျော ဘယျသူမှမရှိပါ သီတာရယျ ဖကွေီးလို့ချေါပါအုံး သီတာအဲ့လိုမချေါတာကွာပွီနျော ဖကွေီးသတိရနတေယျသီတာ ဒါကဦးအောငျမိုးရဲ့ဆိုကျကို၊ သူစိတျကွှလာတဲ့အခါတိုငျး သူ့ကိုအဖေ ကွီးလို့ချေါခိုငျးတယျ သီတာကိုလဲသူ့သမီးအကွီးမနဲ့တူလို့သူစိတျထပွီးလုပျခငျြလာရပါသတဲ့ ကဲ ကိုယျ့သမီးကိုမြား။ မနကေ့မှ အာကာနဲ့လုပျခဲ့ကွပီးတာဆို တော့ စိတျသိပျမပါသျောလညျး ငှတှေငျးကွီးမို့အတငျးမငွငျးခငျြပါ။ အှငျ . . . ဦးအောငျကလဲစောစောစီးစီး မတှရေ့တာကွာပီမဟုတျလား သီတာရယျ (ပွောရငျးသူ့အနောကျမှာလာရပျတယျ၊ သူ့ဟာကွီးက မမာတမာဖွဈနပေီ) ထပျတှခေ့ငျြသေးတယျ . . . ဖကွေီးကလဲ လူတှတှေသှေ့ားဦးမယျ သူ့ဖငျကွား ထဲနှေးနှေးကွီး လာထောကျတော့ ရငျတုနျပီးဖကွေီးလို့ချေါလိုကျတာမိတာသီတာ့အမှား၊ ဟိုကသူကွားခငျြတာလဲကွားရရော အဆငျ့ပိုတကျလာတယျ၊ သီ တာ့တငျကွီးကို ထမီပျေါကနပေဲကိုငျလိုကျတာ ရငျတောငျတုနျသှားတယျ။ သူတို့ဆိုငျလေးက လူသှားလူလာသိပျမမြားတဲ့ဒေါငျ့နဲ့ ကောငျတာအကှယျမှမို့ လမျးသှားလမျးလာတှမွေငျမှာတော့မပူရ။
ဒါနဲ့ သမီးလေးသီတာအတှကျလကျဆောငျ၊ သီတာလေးအတှကျဝယျထားတာ အနောကျကနေ ဖငျကိုထောကျပီးရှဗေူးလေးတခုလာပေးတယျ။ သူရုံးမရဘဲ ဖှငျ့ကွညျ့တော့လကျစှတျကလေး၊ သိပျတနျကွေးကွီးပုံမပျေါပမေဲ့ ရှဆေိုတာမိနျးမကွိုကျလေ ဒါလေးတှနေဲ့ပဲသူ့ကိုခြုပျနတောဖွဈသညျ။ ဟိုတခေါကျလဲ နားကပျလေး။ ဒီည ၈နာရီလောကျအလုပျသိမျးပီး ထပျတှရေ့အောငျသီတာရယျ ဖကွေီးလှမျးလှပီ ဖကွေီးကလဲ ဇှတျပဲ လူတှတှေသှေ့ားဦးမယျ လကျဆောငျရတော့ပြျောနသေဖွငျ့ ညုပွောလေးနှငျ့ ဦးအောငျမိုးလီးကွီးကိုပုဆိုးပျေါကနဖေမျးကိုငျလိုကျသေးသညျ။ ခုနကမာနသေောအခြောငျးကွီးက ခကျြခငျြးတောငျတကျလာတယျ။ ဒီလူကွီးဘာဆေးတှစေားထားလဲမသိ သူ့ယောကငြ်္ားနဲ့စာရငျ နဲနဲတိုသလိုရှိပမေဲ့ စိတျထစရာလုံးပတျတုတျတုတျကွီးကို ကိုငျပွီး နောကျပွနျဂှငျးတိုကျပေးလိုကျတယျ။ ဦးအောငျမိုးက လူရှငျးမရှငျးတခကျြကွညျ့ပီး သီတာနို့ကွီးကိုအနောကျကနပေငျ့ကိုငျလိုကျတော့ လှနျ့သှားရ သညျ။ အိုး လူတှမွေငျကုနျမယျ ဖယျ ခနလေးပါကှာ ဘယျသူမှမရှိပါဘူး ရသလောကျညှဈလိုကျသေးသညျ၊ ဦးအောငျမိုးကွညျ့ရတာဖွဈနိုငျရငျခုခကျြခငျြး ဆိုငျပိတျပီး လိုးလိုကျခငျြပုံရသညျ၊ အနောကျကထောကျပီးညှောငျ့တာကလဲထမီတောငျပေါကျလောကျတယျ။ ခနတော့လူသှားလူလာမြားလာသဖွငျ့ လူခှါ လိုကျတယျပမေဲ့ အဖိုးကွီးရဲ့ငမျးငမျးတကျမကျြလုံးတှကေ သီတာကိုစိတျကူးနဲ့လိုးနပေုံပဲ၊ သူ့နို့သီးခေါငျးတှထေောငျလာရပွနျသပေါ့။ တနကေုနျလူလဈရငျ လဈသလို ဖငျလာကိုငျလိုကျနို့လာနှိုကျလိုကျလကျကမွငျးနတော တျောတျောပြျောနတေယျထငျတယျ။
နလေ့ညျထမငျးစားခြိနျကတညျးကအပွငျထှကျသှားပီးတာ ညနလေေးနာရီခှဲလောကျမှပွနျလာပွီး “ ကဲ လူလဲသိပျမလာတော့ဘူး သီတာလဲတဈနကေုနျတ ယောကျထဲပငျပနျးနပေီ ပိတျကွရအောငျ” ပုံမှနျလဲဒီအခြိနျလူမကတြာသိသိကွီးနဲ့ကို၊ သီတာလဲနောကျခငျြလာတာနဲ့ ဟုတျပနျော သီတာလဲပငျပနျးပီး အိပျ ခငျြလာတာနဲ့အတျောပဲ သီတာ အိပျခငျြလို့လား အိမျမပွနျနဲ့တော့ ဖကွေီးဆီမှာအိပျသှားလေ သမီးကွီး အပျေါထပျကသူ့အခနျးထဲရောကျရငျ အိပျလို့ရမှာ မဟုတျဘဲနဲ့မြား ဟှနျ့ သမီးအိပျခငျြရငျ ဖကွေီးဖကျသိပျမှာပေါ့သမီးရယျ တဏှာခိုးတှဝေနေတေဲ့အကွညျ့နဲ့ကွညျ့ပီး ဖငျကိုတခကျြညှဈပီး တဈခကျြနမျး လိုကျသေးတယျ။ ဒီလူကွီးတျောတျောဖွဈနတောပဲ။ တံခါးတှဘောတှပေိတျပီးတာနဲ့ ဆိုငျထဲကနအေပျေါတကျတဲ့လှကေားဆီကိုလကျဆှဲချေါသှားပွီး တကျ သမီးကွီး ဟငျ သီတာအိမျပွနျ ရခြေိုး ရှုး . . . အခြိနျတှမေဖွုနျးပါနဲ့ကှာ အပျေါထပျမှာရခြေိုးခနျးရှိပါတယျ (တလှမျးခငျြတကျသှားတဲ့ သီတာ့တငျ ဆိုငျတှကေို အားမလိုအားမရ ပုတျလိုကျပီး) ကနျြးမာရေးကောငျးလိုကျတဲ့သမီးကွီး ဖကွေီးနျော သူမြားဖငျတှကေို အချေါအဝျေါတှကေိုက သမီးနဲ့ဖကွေီး ဆိုတော့သီတာလဲ တကယျ့သူ့သမီးလိုကလေးဆနျသှားရသညျပေ့ါ။ အပျေါထပျရောကျတာနဲ့ သူ့ကိုဖကျနမျးနတေဲ့အဖိုးကွီးကို ခနတားထားပီးရဝေငျခြိုးရ သညျ။ တနကေုနျပငျပနျးထားတာဆိုတော့ ရခြေိုးလိုကျမှလနျးသှားသညျ။ ဟိုကွားဒီကွားတှလေဲမနံအောငျဆပျပွာသခြောတိုကျ။
သီတာရဝေငျခြိုးနတေုနျး ဦးအောငျမိုး သူဝယျလာတဲ့ဆေးကို သခြောအောငျနောကျတလုံးထပျသောကျလိုကျတယျ၊ မနကျကတဈလုံးသောကျပီး အစှမျးကို ကနြေပျလောကျပမေဲ့ ထပျသောကျတော့ပိုစှမျးတာပေါ့။ သီတာသူ့ဆိုငျမှာလုပျတာနှဈနှဈကြျောပွီ၊ နယျကနအေလုပျလာလုပျတဲ့ ခလေးတဈယောကျအမေ ဖွဈပမေဲ့ သီတာ့ဒငျကွီးကိုသူအရူးအမူးသဘောကတြယျ၊ နိုငျငံခွားမှအိပျထောငျကနြတေဲ့ သူသမီးအကွီးမနဲ့ရုပျကလဲခပျဆငျဆငျဆိုတော့ သမီးပျေါ ကွံစညျမကောငျးတဲ့ဟာတှေ သီတာအပျေါငှပေေးကွံစညျလိုကျတော့တယျ။ အဲ့အခြိနျထမီရငျလြားနဲ့ ရခြေိုးခနျးထဲကထှကျလာတဲ့ သီတာ့ကိုမွငျတော့ တ ဘတျသှားပေးရငျး ရော့ တဘတျ၊ ဖကွေီး သမီးကွီးကအရမျးလှတာပဲ အငျ ဟုတျလို့လား အသကျကွီးနပေါပွီ ဖကွေီးရယျ ဘယျလောကျကွီးကွီး ဖေ ကွီးအတှကျတော့ ဒီသမီးကအလှဆုံးပဲ၊ ရှတျ သှား သှား ဖကွေီးလဲရသှေားခြိုး သူ့လညျတိုငျတှလောနမျးတဲ့ဦးအောငျမိုးကိုရခြေိုးခနျးထဲတှနျးပို့လိုကျ တယျ။ အောကျကမာမာကွီးကလဲ ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့၊ ဒီအဖိုးကွီး နှားငတျရကေဖြွဈဦးမယျလို့တှေးမိတော့ သူ့စိတျတှထေလာရပီး နို့သီးခေါငျးလေးကထောငျ လာတယျ၊ ဒီရကျပိုငျး စိတျတှတေျောတျောထရပါလား။ လူတဈယောကျရခြေိုးပွီးရငျသူ့ကိုလာလိုးဖို့ကုတငျပျေါကစောငျ့နရေတာ ပထမဆုံးဖွဈပွီး ရငျလဲဖို ရသညျ။ ဦးအောငျမိုးရခြေိုးခနျးထဲကထှကျလာလို့လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ တဘတျပါမလာ၊ သူ့လီးကွီးက ရှကေို့ငေါငေါကွီးထှကျနသေညျ။
ဟာ ဖကွေီး ညဈပတျ သီတာရှိတာသိရဲ့သားနဲ့ သမီးက ရှကျလို့လား ပွပါဦးရှကျနတေဲ့မကျြနှာလေး အှငျ. . . ကုတငျပျေါကိုဂမူးရှူးထိုးတကျလာပွီး လာ နမျးတယျ၊ သူ့လကျတှကေလဲ သီတာထမီရငျလြားကိုဖွုတျလိုကျတော့ ပျေါလာတဲ့သီတာရငျအုံထှားထှားကွီးကိုစိုကျကွညျ့ပီး ထောငျနတေဲ့သပွသေီးရောငျ နို့သီးခေါငျးတှကေိုဖမျးစို့တော့တာပဲ၊ အောကျက ဖငျသားတှကေိုလဲဖဈြညှဈနသေေးတာ၊ အာ . . .ာဖကွေီး ဖွေးဖွေး သီတာထှကျမပွေးပါဘူး လှလိုကျ တာ သမီးကွီးရယျ၊ သမီးကွီးကိုဖကွေီးလုပျခငျြနတောကွာဘီ သိလား (သူ့မကျြနှာကိုတညျ့တညျ့ကွီးကွညျ့ပွီးမေးနတေဲ့ လူကွီးကိုနောကျခငျြစိတျအပွငျ သူလဲစိတျပါလာသဖွငျ့) ဘာလုပျခငျြတာလဲ၊ လူကိုလိုးခငျြနတောမဟုတျလား ဖကွေီး (သီတာ့စကားတှကွေောငျ့ ဦးအောငျမိုး စိတျဘရိတျပေါကျသှားပွီ၊ သီတာ့ပေါငျကွားထဲဝငျလာပွီး) ဟုတျတယျသမီး၊ သမီးဖငျကွီးကိုကွညျ့ကွညျ့ပီးဖကွေီးလီးတောငျနတော သမီးကိုလိုးခငျြနတော ပွောပွီး သူ့တုတျတုတျ ကွီးကို သီတာ့အကှဲကွောငျးထဲအတငျးထိုးထညျ့လိုကျတော့တယျ၊ နှဈယောကျလုံးစိတျပါနသေဖွငျ့နာတာကိုမသိလိုကျ၊ တဖွေးဖွေးဝငျသှားတဲ့လီးနဲ့ပွနျ ထုတျလိုကျရငျကပျပါလာတဲ့သီတာအတှငျးသားလေးတှကေိုကွညျ့ပီး အရသာခံနကွေရငျး ရှတေို့းနောကျဆုတျဖွငျ့ ခနမွှငျးလိုးနပေီး အရညျလိုကျတာတော့ ဆိုငျကယျစီးပုံစံနဲ့ ဖကွေီးကွမျးတော့တယျ။
နစေ့ဉျနီးပါးစိတျကူးနရေတဲ့ အကိတျကွီးသီတာ၊ လှယျလှယျကပျမရ သူတောငျငှပေေးလိုကျရှပေေးလိုကျနဲ့မနညျးခြူခြုပျလိုးနရေတဲ့ သီတာကွီး သူဆောငျ့ လိုကျတိုငျး မကျြနှာလေးရှုံမဲ့သှားပုံက သူသမီးကွီးနှယျနီထှနျးနဲ့တူလှနျးသဖွငျ့ ဦးအောငျမိုးစိတျပိုကွှလာရတယျ။ အဖိုးကွီးဆေးတှစေားလာတာသခြောပါ တယျ၊ အရငျကဆိုဒီလောကျမဆောငျ့နိုငျ၊ လီးလဲဒီလောကျမမာဘူး ဘာပဲဖွဈဖွဈ လကျစှပျလဲရ ဆေးသောကျပွီးလဲခတြော့ သီတာကနြေပျရပါသညျ။ ပေါငျ တှကေိုအစှမျးကုနျကားမွှောကျထားပေးပီး အဖုတျအထဲကသူ့လီးကိုညှဈပေးလိုကျ အောကျကနသေူ့ကိုပွနျဆောငျ့ပေးလိုကျနဲ့ကြေးဇူးဆပျလိုကျတယျ။ အာ . . . ကောငျးလိုကျတာ သမီးရယျ၊ ဖကွေီးလိုးတာကောငျးရဲ့လား အငျး ကောငျးတယျဖကွေီး အရငျကထကျပိုကောငျးတယျ အာ ရှီး . . . . သမီးးကို ကောငျးကောငျးလိုးခငျြလို့ဖကွေီးဆေးစားထားတာ အား သမီးကွိုကျလား အငျး . . . အာ . . ကောငျးတယျဖကွေီး ကွိုကျတယျ ဆောငျ့ ဆောငျ့ အား ပီးခငျြ လာပွီ အား နို့သီးခေါငျးတှကေိုခွရေငျး တုနျခါနတေဲ့သူ့နို့အုံနှဈလုံးကိုဆှဲပီးဆကျတိုကျဆောငျ့လိုကျတော့ သူအရမျးကောငျးပွီး ပီးသှားတယျ။ အဆောငျ့မရပျ သေးတဲ့ ဦအောငျမိုးဖငျပွောငျကွီးကိုလကျသညျးတှနေဲ့ကုတျပီး ပီးပလိုကျတာ၊ ဦအောငျမိုးလဲခနငွိမျပီး သီတာပီးတာကိုခံစားနရေပမေဲ့ သူမပီးသေး။ သီတာ ငွိမျသှားတော့ သီတာ့ကိုကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ။ လှလိုကျတဲ့ဖငျကွီးတှကှော ဖနျြး ခနဲသူရိုကျလိုကျသေးသညျ။ သူ့လီးထညျ့မယျလုပျပီးမှ သီတာကိုဒီတခါလုပျ ရငျယကျကွညျ့မယျဆိုတာသတိရတယျ။
ကုနျးထားလို့အနောကျကိုပွူးနတေဲ့ စောကျဖုတျကွီးကို သူအာသာငမျးငမျးကွညျ့ပီးတော့ အကှဲကွောငျးထဲ လြှာနဲ့ထိုးလိုကျတယျ။ လီးဝငျလာမယျထငျထား တဲ့သီတာလဲ ထှကျသကျကိုနှေးခနဲခံစားလိုကျရပွီး စိုစိုစှတျစှတျလြှာကွီးဝငျလာတော့ ရငျထဲ အေးခနဲ၊ “ အာ့ . . စူး အိုး ဘာတှလေုပျနတောလဲဖကွေီးရယျ” စကားပွနျမရတော့၊ သီတာကွိုကျမှနျးသိသှားတာမို့ ဦးအောငျမိုးယကျတာစိတျပါလာပွီး ပကျလကျအိပျပီးသူ့ခေါငျးကို သီတာ့ပေါငျအောကျထိုးသှငျး ပွီး အသာကုနျဂြာတော့တယျ။ တကယျတော့ ဦးအောငျမိုးလဲအခုမှဂြာဖူးတာ၊ ရုပျရှငျတှကွေညျ့ဖူးတာနဲ့တကျသလောကျယကျနတော သီတာကောငျးသှား တယျ။ သီတာကလဲ သူလိုခငျြတဲ့နရောကို အောကျကအဖိုးကွီးလြှာနဲ့တညျ့အောငျ အပျေါကနရှေပေ့ေးတယျ။ အာဈ . . အှငျ ဖကွေီး လိုးတော့ကှာ သမီးကို လိုးတော့ အငျ ဖငျနှဈလုံးကိုကိုငျပီးအောကျကနအေားရပါးရယကျစုပျနတေော့ ခကျြခငျြးရပျမရဘူး၊ ခနနမှေအောကျကပွနျထှကျပွီး နရောယူလိုကျတော့ လီးက စိတျတိုငျးကမြမာတော့သလိုဆိုတော့ သမီး ဖကွေီးကို ဟို ဟို စုတျခိုငျးခငျြတာပွောမထှကျ၊ သီတာလှညျ့ကွညျ့ပီးသဘောပေါကျသှားတယျ၊ ဘာမှမ ပွော နောကျလှညျ့ပီး တခါတညျးဦးအောငျမိုးလီးကွီးကို ကုနျးစုပျလိုကျသညျ။ သီတာပါးစပျထဲသူ့လီးကွီးကိုစုပျပေးနတောကိုကွညျ့ပီး ပီးတောငျပီးခငျြသှား တယျ။ သူ့လီးကိုစုပျပေးနတေဲ့သီတာ့နှုတျခမျးတှရေယျ၊ တှဲရရှဲကနြလေို့သူပငျ့ကိုငျထားရတဲ့ သီတာ့နို့အုံကွီးရယျ ပီးတော့ ကုနျးလကျြလှမျးစုတျရတာမို့ ဖငျ ထောငျသှားတဲ့သီတာ့အိုးကားကားကွီးရယျ မွငျသမြှဟာသူ့အတှကျစိတျကွှစရာတှခေညျြး။
တျောပီသမီး ဖကွေီးလိုးခငျြပီ အငျး ဟုတျပီ ခါးလေးခှကျထား အေး အဲ့လို အား . . . ဖွေးဖွေးဖကွေီး အာ့ဈ . . ဆေးအစှမျးကွောငျ့လားမသိ လီးကပိုပူပွီး ပိုပှလာသလိုပဲ၊ သီတာအဖုတျနှခမျးသားတှကေိုပှတျတိုကျသှားသလိုမြိုးခံစားလိုကျရတယျ။ သီတာကဖငျကိုဦးအောငျမိုးစိတျကွိုကျထောငျပေးထားရငျး သူ ကတော့မှယေ့ာပျေါမကျြနှာအပျပွီးကိုခံစားတာ၊ အသံတောငျမထှကျနိုငျတော့။ ဦးအောငျမိုးလဲ သီတာ့ခါးတုတျတုတျလေးကိုကိုငျပီးတော့ တဖောငျးဖောငျး ကို ဆောငျ့သညျ။ သူ့မိနျးမသသောသှားတယျ ဒါမြိုးမလိုးဖူးလိုကျရတာနာတယျ။ မိနဈ၂၀လောကျကွာတော့ သူဆကျမထိနျးခငျြတော့ ကောငျးလိုကျတာ သမီးလေးရယျ အား . . ဖတျ ဖတျ ဖတျ . . . အားဈ နှေးပွဈနတေဲ့လရညျတှသေီတာသားအိမျခေါငျးထဲပနျးထညျ့လိုကျတယျ။ ဦးအောငျမိုး သိပျကနြေပျသှား တယျ သူ့ဘဝမှာ အကောငျးဆုံးပီးခွငျးပဲ။ သီတာ့အထဲကညှဈပေးနတောလေးကိုမကျြလုံးမှိတျငွိမျခံရငျးနဲ့ပဲ သီတာ့ဘေးမှာကပျလဲပွီး ခဏအားပွနျဖွညျ့ လိုကျသညျ။ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ ဦးအောငျမိုးပွနျနိုးလာပွီးသီတာကတော့ သူ့ဘေးမှာ အိပျပြျောအနားယူနလေရေဲ့။ သူ့ကိုအကောငျးဆုံးပေးဆပျခဲ့ တဲ့သီတာကိုလဲ သနားပွီး သိပျခဈြသှားတယျ နောကျပွီး ကိုယျတုံးလုံးဘေးတဆောငျးကွီးအိပျပြျောနလေတေော့ သူသိပျသဘောကနြတေဲ့ သီတာဖငျကွီးက သူ့ကိုလနျးဆနျးသှားစတေယျလို့သူထငျသညျ။ အခြိနျကွညျ့တော့ ၇နာရီဆိုတော့ သိပျနောကျမကသြေး သူနောကျတခေါကျဆှဲလိုကျခငျြသေးသညျ။
ဒီနသေီ့တာအိပျယာထနောကျကတြယျ၊ မနကေ့ဦးအောငျမိုးနဲ့ အကဲလှနျပွီး နောကျနှဈခြီလောကျဆျောပွီးမှ ပွနျတာဆိုတော့ အိမျပွနျရောကျတာနဲ့ တခါ တညျးထိုးအိပျလိုကျတာ ခုမှနိုးတယျ။ ပငျပနျးတာလဲပါတာပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ကမနျးကတနျးရမေိုးခြိုးပွီးဆိုငျသှားလိုကျတော့ အဘိုးကွီးလဲခုမှထဆိုငျဖှငျ့နတေုနျး ထငျပါရဲ့။ ဆောရီးနျော ဦး သီတာအိပျယာထနောကျကသြှားတယျ ဟား ဟား ဦးလဲခုမှနိုးတာပါသီတာ၊ ဆိုငျခငျးထားဦး ဦးမနကျစာသှားဝယျလိုကျဦးမယျ ဟုတျကဲ့ အားရပါးရပွုံးပွသှားတဲ့ ဦးအောငျမိုးရဲ့အပွုံးကွီးကိုသူနဲနဲတောငျရှကျသှားတယျ၊ နီလာလဲစာမေးပှဲဆိုတော့ တဈပတျလောကျကွာဦးမယျ ထငျသညျ။ ဒီတပတျလုံးဘယျလိုပတျရှောငျရမလဲဟုစဉျးစားရငျး အငျး မနကေ့လို လကျစှပျလဲရ ဆေးလေးသောကျပီးအခခြံရရငျတော့လဲ မဆိုးပါဘူးဟု ခပျ ပွုံးပွုံးစဉျးစားမိနတေုနျးမှာပငျ မသီတာ ဘာတှတေဈယောကျတညျးပွုံးနတောတုနျးဗြ ဟယျ လနျ့လိုကျတာ ကိုညီရယျ ဘာရယျမဟုတျပါဘူး ဘာလာဝယျ တာလဲ စူပါဆယျထုတျဗြို့ ပွီးတော့ မသီတာကိုတှတေ့ာနဲ့တခါတညျးပွောရဦးမယျ
ကနြေျာ့အဒျေါက အိမျလူငှားတငျခငျြလို့တဲ့ အဲ့ဒါ မသီတာဆီမှ ပွောထား တဲ့လူလေးဘာလေးမရှိဘူးလား အငျး….ခန ကမြစဉျးစားလိုကျဦးမယျ ဒါနဲ့ အခနျးကဘယျမှာလဲ စကားလဲပွောရငျး ကျောဖီထုတျလေးတှလှေမျးဖွုတျနေ တဲ့ မသီတာဖငျတုနျးကွီးတှကေိုကွညျ့ရငျး ကိုညီဇတှေးတှမွေိုခနြမေိသညျ အငျး ဒီဆိုငျလာတိုငျး ဒီလိုပဲ ကနျသာယာနားမှာ မသီတာလိုကျကွညျ့မလား လိုကျကွညျ့ခငျြပါတယျ ဒါပမေဲ့ကမြတဈပတျလောကျအားမှာမဟုတျဘူး အငျး . . . . . မသီတာအလုပျဘယျအခြိနျပွီးလဲ ဆိုငျပိတျခြိနျဆိုရငျရော ဆိုငျပိတျ ခြိနျကတော့ ၈နာရီ ၉နာရီလောကျပေါ့ သိပျမသခြောဘူး ဒီလိုလုပျ သော့ကကိုညီ့ဆီမှာဆိုရငျ ကမြဆိုငျပိတျရငျ ကိုညီ့ကိုဖုနျးချေါလိုကျမယျလေ ဘယျလိုလဲ အငျး . . . မဆိုးပါဘူး ဒီညလား မသခြောဘူးနျော ကိုညီ့ဖုနျးနံပါတျရေးသှားလိုကျ အိုကေ အိုကေ ခနနေ ဦးအောငျမိုးပွနျရောကျလာတော့ ဈေးဝယျဖို့ စာရငျးလုပျဘာညာနဲ့ အလုပျနဲနဲရှုပျသှားပွီး ညနစေောငျး အလုပျတှပေါးသှားတော့မှ အအေးနှဈလုံးလှမျးမှာပွီးအအေးသောကျရငျး ပငျပနျးသှားလားသီတာ လုပျနကွေအလုပျတှပေဲဟာ အရမျးမပငျပနျးပါဘူး အခုမေးတာမဟုတျဘူး ညကအတျောပွိနျးသှားလားမေးတာ၊ ဖကွေီးတောငျ ဖလကျပွသှား တယျ ဟီး အဲ့တော့မှ သီတာမကျြစောငျးလေးထိုးပွီး သှားပါ ခုမှ ညကတော့သရဲစီးနသေလိုဘဲ ဆေးကအစှမျးနျော ဟှနျ့ ဟဲဟဲ ဆောရီးပါသီတာရယျ ဦး အရမျးကွမျးသလိုဖွဈသှားရငျ၊ သီတာ့အိုးကွီးမွငျရငျ မနနေိုငျလို့ပါ လကျကလဲ သီတာ့ဖငျကွီးကိုလှမျးညှဈရငျး အသားယူလိုကျသေးသညျ။ မနကေ့ လောကျထထကွှကွှမရှိသျောလညျး လူလဈတာနဲ့လကျနဲ့တော့အသားယူခငျြသေးသညျ။
အိုး ဦးကလဲ ဒီဖငျပဲလိုကျရနျရှာနေ သူဖာသာနတောကို၊ ဒီနလေဲ့ဆေးစားလာပွနျပီလား ဒီနတေ့ော့ ဦးပငျပနျးနလေို့ဆေးမစားထားဘူး အနားယူ အားဖွညျ့ လိုကျဦးမယျ။ ဘာလဲ သီတာက ဆေးစားစခေငျြပွီလား ဟဲ ဟဲ အာကာ့ကွောငျ့စိတျထပွီး သောငျးကနျြးမိတာကို သူ့ကွောငျ့ထငျပွီး မာနျတကျနသေညျ။ အဖိုးကွီးမှာဆန်ဒရှိသျောလညျး ခန်ဓာကမလိုကျတော့ အမလေး တျောပါ ဒီညစောစောအိပျခငျြတယျ ဒါဆို မနကျဖွနျညမှပေါ့ သီတာလေးရယျ . . . ကဲ ဒီနေ့ ဆိုငျစောစောပိတျပွီး သီတာလဲပွနျနားတော့ ရှတျ သှားခါနီး အနောကျကနသေူ့လညျပငျးလေးနမျးရငျး နို့လေးလဲလှမျးဆှဲသှားသေးသညျ။ ဈေးလာဝယျ သော တခွားပှဲစားတှတှေမှေ့ ကိုညီပွောခဲ့တာသတိရတယျ။ အိမျငှားဖို့ပွောထားတဲ့လူတှပွေနျစဉျးစားရငျ ဘာဖွဈဖွဈညနတေော့ အိမျလိုကျကွညျ့ထားရ မညျ။ ကိုညီဆိုမှ သူ့အကွောငျးခေါငျးထဲရောကျလာသညျ။
ကိုညီက သဘောင်ျသား၊ ကလေးတယောကျအဖေ၊ လူဖွောငျ့၊ သူပွနျလာစတုံးက သူ့သူငယျခငျြးတယောကျအတှကျ အိမျငှားပေးဖွဈရငျး ခငျကွတာ ဖွဈသညျ။ ဈေးလာဝယျရငျ သူ့အကွညျ့စူးစူးတှခေံရသျောလညျး ရညျရညျမှနျမှနျစကားပွောတကျသူဖွဈပွီး သူနှငျ့ဆကျဆံရတာအဆငျပွသေညျ။ နဲနဲကွာ တော့ဝယျသူပါးသှားပွီး ဆိုငျစောစောသိမျးကာ ကိုညီ့ကိုဖုနျးချေါပွီး ကားဂိတျမှာခြိနျးလိုကျသညျ။ ညနေ၆ခှဲလောကျရှိသဖွငျ့ ကားကအရမျးမကပျြ သျောလညျးထုံးစံအတိုငျးလူအပွညျ့၊ ကိုညီ ကပထမတော့သူ့ဆိုငျကယျနဲ့သှားဖို့ပငျ၊ ဒီနမှေ့သူ့မိနျးမက သူ့ဘိုးတျောအိမျသှားစရာရှိတယျဆိုပွီးဆိုငျကယျယူ သှားသဖွငျ့ ဘကျဈကားနဲ့သှားရခွငျးဖွဈသညျ။ ကိုညီအနနေဲ့မသီတာဖငျကွီးကိုသဘောကနြပေမေဲ့ ဒီလိုလုပျဖို့တော့ စိတျကူးမရှိပါ။ ပထမဘေးခငျြးယှဉျ လကျြဖွဈသျောလညျး လူမြားလာတော့ ဒျေါသီတာ ကိုညီ့ရငျခှငျထဲဝငျရပွီ၊ အောကျကဖငျကွီးကိုလဲအလှူပေးရပွီ။ မသီတာက နလေ့ညျကအဖိုးကွီး လကျဆော့ထားသောအရှိနျတှနေဲ့စိတျနဲနဲထနပွေီး တစိမျးလညျးမဟုတျတာမို့ ပုဆိုးအောကျကတဖွညျးဖွညျးထကွှလာသာ အခြောငျးကွီးကို မသိခငျြ ယောငျဆောငျထားနိုငျသျောလညျး ကိုညီကတော့အားနာနရေသညျ။
လူနဲနဲခြောငျလို့အနောကျကိုပွနျဆုတျသျောလညျး လူပွနျတိုးရှတေ့ော့ နရောပွောငျးပွီးထောကျသလိုတောငျဖွဈလာသညျမဟုတျပါလား။ တခကျြတခကျြ ဖငျကွားထဲသူ့အမွှောငျးလိုကျကွီးဝငျမှသေလိုဖွဈသှားတော့ အားနာပွီး ရလား မသီတာ၊ လူအရမျးတိုးတာနဲ့ ဒီအတိုငျးက အဆငျပွတေယျ၊ သူအဲ့လို အနားနားတိုးတိုးလေးပွောလိုကျမှ လညျဂုတျနားသူ့ထှကျသကျနဲ့တိုးတော့ သီတာ့မှာ ရှစိရှစိဖွဈရသညျပေါ့၊ အောကျကထောကျထားတဲ့အခြောငျးကလဲ ပေါ့ သေးသေးမှမဟုတျတာ၊ ဒါပမေဲ့ သူအနခေကျမှစိုးလို့ ရတယျ ကိုညီ အေးဆေးပါ သူငုံပွီးကပျပွောတဲ့ဘကျကို မသီတာကလှညျ့ပွီးမော့ပွောတာဆိုတော့ ကိုညီ ဒိနျး ခနဲသှေးတိုးသှားရသညျ။ စူးစူးဝါးဝါးစိုကျကွညျ့ပွီး အောကျခထြားတဲ့လကျတဖကျကလဲ ရှကေ့သီတာ့ခါးကိုမသိမသာလေးဖကျလိုကျမိတယျ။ လူခငျြးကလဲထပျ မကျြနှာနှဈခုကလဲနီးနီးကပျကပျဆိုတော့လူက ဖကျမနမျးမိအောငျထိနျးထားပမေဲ့ သီတာဖငျကွားထဲဝငျနတေဲ့သူ့ညီလေးကတော့ အောကျ သှေးတဒုတျဒုတျတိုးနတေော့တာပဲ။ မသီတာကလဲ ကိုညီ့ထှကျသကျထိမိတဲ့ လညျဂုတျနားကနေ မီးညှောငျ့ရိုးနားအထိ ကွကျသီးတှထေပွီး ဖငျတောငျနဲနဲ ကောကျပေးမိသလို အားနာနတေဲ့ကိုညီကလဲ သူ့လီးကိုလကျနဲ့အုပျဖို့လကျကိုနရောရှပေ့မေဲ့ ကွားခံနတေဲ့ မသီတာဖငျကွီးနဲ့ထိမိတဲ့အခါမတော့ ဘယျလိုမှ ထိနျးမရဘဲ လုံးကဈြထှားအိနတေဲ့ဖငျသားကွီးကိုအုပျကိုငျပွီးအားမလိုအားမရ ဖွဈညှဈလိုကျမိတော့တယျ။
ကနျသာယာပါလား ရုတျတရကျ စပယျယာအျောသံကွောငျ့ နှဈယောကျသားပွနျသတိထိနျးနိုငျလိုကျပွီးမှတျတိုငျမှာဆငျးခဲ့ကွသညျ။ စကားမဆိုမိဘဲ လြှောကျလာရငျး လမျးခြိုးလေးအဝငျအမှောငျရိပျရောကျမှ ကနြျောတောငျးပနျပါတယျ မသီတာ၊ အဲ့ဒီလိုလုပျဖို့မရညျရှယျပါဘူး (သူတောငျးပနျလိုကျမှ နဲနဲ ရှကျသှားသညျ) အား ဘာကိုလဲကိုညီ သီတာနားလညျပါတယျ ကနြျောတမငျလုပျလိုကျတာမဟုတျပါဘူး ဟို ဟို စိတျမထိနျးနိုငျလိုကျလို့ပါ ကနြေျာ့အပွဈပါ သူမြားတှထေောကျမှာစိုးလို့ ကာထားပေးတာမှ ကနြျောက ကိုငျလိုကျမိတဲ့အထိ အိုး ရပါတယျဆိုမှ ဒီမှာကားစီးရငျဒီလိုပဲသညျးခံရတာပဲ ခု တစိမျးလဲ မဟုတျတော့… အှတျ ရုတျတရကျ မသီတာနှုတျခမျးကို ကိုညီဖမျးစုတျလိုကျတယျ။ မသီတာမလှပါ၊ ခုနကရငျခုနျတာတှနေဲ့ ခုလိုမီးမှောငျမှောငျလမျးကွားထဲ မှာ ရှကျနတေဲ့သီတာ့မကျြနှာကို ကိုညီအရမျးဖီလျးဖွဈသှားလို့နမျးလိုကျတာ။ ခဏလေးပဲလမျးကွားထဲက ခလေးနှဈကောငျပွေးထှကျလာလို့ အမွနျရပျ လိုကျပွီး အိမျဆီလမျးဆကျလြှောကျလာရသညျ။ ဟို ဟို ဆောရီးမသီတာ၊ ကနြျောအခှငျ့အရေးယူတကျတဲ့ကောငျမြိုးမဟုတျပါဘူး ခု မသီတာနဲ့တှမှေ့ စိတျတှအေရမျးဖောကျပွနျနလေို့ (တောငျးပနျနသေောကိုညီ့ကိုရီခငျြလာသညျ) တျောသေးတာပေါ့ အခှငျ့အရေးမယူတကျလို့၊ ကားထဲမှာလဲဖငျကိုငျတယျ ခုလဲဖကျနမျးတယျ နျော တုံ့ပွနျတဲ့အသံထဲမှာဒေါသသံမပါလို့ ကိုညီစိတျအေးရသညျ။ မဟုတျလို့ရပျကှကျရုံးတိုငျလြှငျနာမညျပကျြမညျ။
ဆောရီးပါ မသီတာ စိတျမဆိုးပါနဲ့ ကနြျောသဘောင်ျပျေါမှစိတျထိနျးနိုငျခဲ့သလောကျမသီတာနဲ့တှမှေ့ အမလေးကမြကို တရားခံမရှာပါနဲ့နျော ကမြလဲ တစိမျ ယောကြာင်္းတှနေဲ့ တရုံးရုံးမဟုတျပါဘူး ရှငျအဲ့လိုစိတျမထိနျးနိုငျရငျ ကမြရှငျ့အိမျထဲဝငျရမှာတောငျကွောကျလာပွီ… ခဈ နှဈယောကျလုံးအတှေးထဲ အိမျထဲ ဝငျရငျဆိုတဲ့အတှေးလေးပျေါလာတယျ၊ ကိုညီ အောကျသှေးပွနျတိုးလာသလို သီတာလဲ ကားပျေါကခံစားခကျြမြိုးပွနျဖွဈရသညျ။ အိမျထဲရောကျလို့ ကိုညီစ လာရငျ သူဘယျလိုတုံ့ပွနျရမှနျးဝခှေဲလို့မရသေး မကွောကျပါနဲ့ဗြာ ကနြျောကတိပေးပါတယျ ကိုကျမစားပါဘူး ဟား ဟား ကိုကျစားမှာကိုမကွောကျဘူး ခုနကလို စိတျမထိနျးနိုငျဘူးဆိုပီး ဖကျနမျးမှကွောကျတာ ခဈခဈ အာ ဟဲ ဟဲ ရှကေ့အိမျပဲ ခွံတံခါးဖှငျ့ မီးတှဘောတှဖှေငျ့ပွီးအိမျကို လှညျ့ပတျကွညျ့သညျ။ အိပျခနျးနှဈခနျး၊ အိမျသာတဈ၊ ဧညျ့ခနျးမှာလဲ ဆကျတီတှနေဲ့ တီဗီဘာညာတော့မရှိ ဘီဒိုတှေ ကုတငျတှတေော့ရှိသညျ။ အခနျးတှလေိုကျကွညျ့နသေော မ သီတာကိုနောကျကကွညျ့ပွီး ခုနကပွောထားတာတှနေဲ့ စိတျထရသညျ။
လငျးလငျးခငျြးခငျြးဆိုတော့ လူကဘာမှမလုပျရဲပပေုဆိုးထဲက ဆန်ဒပွနသေော ညီလေးကိုမထိနျးနတေော့ ပစ်စညျးတှလေဲပါတော့ တလနှဈသိနျးကတော့တနျ တယျ ကိုညီ (ဖငျကွုံစီးနတေုနျး စကားလှမျးပွောတော့လှနျ့သှားသညျ) ဟုတျ အဒျေါတို့က ဘီးလငျးမှာပဲနကွေတော့မှာမို့ လူငှားတငျတာလေ။ ကွာလေ ကောငျးလပေဲ အခနျးထဲမှာကုတငျတှမှေယေ့ာတှအေဆငျသငျ့ပဲ အဲ ပွောရငျးဆိုရငျကုတငျနားရောကျသှားကွတာမို့ နှဈယောကျသားရငျနဲနဲဖိုသှားသညျ။ ကို ညီက လုပျလိုကျရငျကောငျးမလားဆိုသောအတှေးနဲ့ မသီတာကတော့ သူမြားလာနမျးတော့မလားဆိုပွီးရငျဖိုရသညျ။ မှယေ့ာကိုစမျးကွညျ့ရငျး အနောကျ ကငေးနသေညျ့ သူကိုမကျြလုံးစောငျ ကွညျ့တော့သူလဲကိုယျ့လို ဂှကွားမှာဖောငျးဖောငျးကွီးဖွဈနတောမွငျရသညျ။ ထနျနတောကိုပငျ ထိနျးသိမျးနိုငျသောကို ညီ့ကိုအမှတျပေးမိသညျ။ သူက လိုခငျြနလေို့သူဘကျကဆှဲဆောငျတာမြိုးမဖွဈအောငျလဲထိနျးသိမျးရမညျ။ ထိုစဉျ ကုတငျခေါငျးရငျးကဘီဒိုတဈခုကိုဖှငျ့ ကွညျ့လိုကျတော့ အိုး ပိုဟတျတှေ ဟုတျကဲ့ စာဖတျသူတို့မြှျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ ကိုညီ့ကိုလှညျ့ဖကျလိုကျမိသညျပေါ့။ ခကျြခငျြးပွနျခှာသျောလညျးမ ရတော့ခြေ။ ကိုညီကအားကွီးနဲ့ဖကျထားတာ သီတာ့စနနှေဈခိုငျတောငျ အိထှကျနရေပွီး စူထှကျနတေဲ့နို့သီးခေါငျးလေးတှတေောငျ ကငျြနရေသညျ။ သူ့ နှာခေါငျးကလဲ သီတာနားရှကျနားကပျနတောဆိုတော့ သီတာဟိုနရောမှာ ယားကြိကြိနဲ့ အရညျတှစေိမျ့ထှကျနပွေီ။
အှငျ ရပွီလေ ခှငျ့လှတျတော့ သီတာရယျ ဟငျ! မော့လာသောသီတာ့နှုတျခမျးလေးကိုစုပျနမျးရငျး လကျတှကေလဲ သူသိပျသဘောကတြဲ့ သီတာဖငျကွီးပျေါ ပှတျသပျစုတျနယျရငျး လကျနကျကွီးကလဲခကျြအောကျကိုထိုးခြိနျနတေော့ သီတာလဲ သူ့ကြောပွငျကွီးကို ပွနျပှတျသတျပေးမိတော့သညျ။ သီတာ့ဖကျ ကမီးစိမျးပွလာတော့ ကိုညီ ပြျောသှားပွီး ကုတငျပျေါအသာလေးလှဲခြ သီတာ့နှုတျခမျးတှကေိုမကျမကျမောမောစုပျနမျးရငျး သီတာ့နို့တှကေို စုပျနယျသညျ။ အိုး ကိုညီ မကောငျးဘူးထငျတယျနျော အှတျ အငျး.. အကငြ်္ီတှကွေကေုနျမယျနျော ကိုညီဆီကစကားပွနျမရ၊ ပွဈမှတျဆီဒါရိုကျသှားနသေညျ။ အကငြ်္ီနဲ့ ဘာရာလေးကိုလှနျတငျပွီး သီတာရဲ့ မာတောငျနတေဲ့နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုစို့လိုကျတယျ။ တနကေုနျအလုပျလုပျထားလို့ ခြှေးနံကိုယျနံလေးကိုက သူ့စိတျ တှကေိုပိုထနျစသေညျ။ အိမျထောငျသညျ သဘောင်ျသားကိုညီက မွနျတယျ၊ မီးဆိုတာ ပူတုနျးထုရမှနျး သိသူမို့ သီတာ့ထမီနဲ့ အောကျခံဘောငျးဘီကို အမွနျဆှဲ ခြှတျရငျး ကတငျစောငျးမှာနရောခလြိုကျတယျ။ မသီတာမှ ဘာမှပွောခြိနျမရလိုကျ သူ့အဖုတျကို ကုနျးယကျတော့တာပဲ။
အိုး .. ငရဲတှကွေီးဦးမယျ .. အို့ ဟို့ ပွောသာပွောရတာပါ အာကာ့လိုမနူးမနပျမဟုတျ၊ အဖိုးကွီးလိုလဲဂမူးရှူးထိုးမဟုတျ။ ကမ်ဘာပတျနတေဲ့ သဘောင်ျသား လြှာဖြားမှာ မသီတာလှိုငျးစီးနရေသလိုဖွဈမိသညျ။ တျောသေးတာပေါ့ ဆိုငျကပွနျခါနီး ဆေးလာခဲ့မိလို့။ ကိုညီ့ပါးစပျနဲ့ သူ့စောကျဖုတျကှာသှားမှာဆိုးသလို မြိုး ဆံပငျတှဆှေဲပွီး ခါးကော့ကာစဖုတျနဲ့ပှတျပေးနသေညျ။ အား..ဈ ကိုညီကှာ အငျးးး အမှေးထူထူ၊ နှုတျခမျးသားညိုညိုနဲ့မသီတာစောကျဖုတျကွီးက မ လိုးခငျယကျတာနဲ့တငျ စီး..နလေို့ ကိုညီအရမျးယကျလို့ကောငျးသှားသညျ။ ကဈဆငျဆှဲသလိုနှုတျခမျးသားကွီးတှဆှေဲစုပျလိုကျ၊ စိကပျနတေဲ့အတှငျးသား တှထေဲ လြှာနဲ့ထိုးလိုးလိုကျရငျး အကှဲကွောငျးထိပျက စောကျစိလေးကို သှားနဲ့ကြိတျပေးလိုကျတော့ မသီတာ တှနျ့လိနျပွီး တခြီပီးသှားရသညျ။ ပီးနခြေိနျမှာ ကို သူ့ဖငျကွီးကိုပငျ့ကိုငျထားရငျး ဆီးခုံစောကျမှေးတှကွေားလိုကျယကျနတေဲ့ကိုညီ့ကို အသဲစှဲဖွဈရသညျ။ ပီးသှားလို့ရှစိရှစိဖွဈနသေောအတှငျးသားလေး တှကေို ယကျလို့မဝဖွဈနသေျောလညျး သူတို့မှာအခြိနျသိပျမရကွောငျးသိသဖွငျ့ အစာပိတျအနနေဲ့ခရညေိုကွီးပါယကျပေးပွီးမကျတပျထရပျသညျ။ တှငျး အောငျးခငျြလှနျးလို့တဇတျဇတျတုနျနသေော သူ့လီးဒဈကွီးနဲ့နီရဲနတေဲ့သီတာ့ထိတျဖူးလေးကိုနှဈခကျြလောကျအပျေါအောကျဆှဲပှတျပွီး စီးကပျနတေဲ့စောကျ ခေါငျးထဲနဈခလြိုကျတယျ။
အာ အ .. ကိုညီ…. အိုး ရှီး.. သီတာရယျ တရဈခငျြးလိုးဝငျသှားတဲ့လီးကွီးအဆုံးရောကျတာနဲ့ ထငျထားတာထကျအဆမတနျပိုကောငျးနလေို့ ကနြေပျသံကွီး နဲ့ကိုညီငွီးမိရငျး ဟထားတဲ့သီတာ့နှုတျခမျးကိုအတငျးနမျးပွီး တခကျြခငျြးဆော့လိုးတော့တယျ။ သီတာကလဲ အောကျကပွနျကော့ပေးမိတာပေါ့ ခုနကမှပီး နတောကိုခံစားနတေုနျး စောကျခေါငျးထဲထိုးခှဲဝငျလာတဲ့ကိုညီ့လီးကိုလဲ အပွညျ့ခံစားခငျြသညျမို့လား။ သူုဘဝမှာ ခုမှတကယျလိုးတယျဆိုတဲ့အရသာကို အပွညျ့အဝခံစားရတယျလို့ထငျမိသညျ။ ကိုညီကလဲစီးရှဲပွီး ပြားရညျသုတျထားသလိုဖွဈနတေဲ့စောကျဖုတျကွီးကိုလိုးရတာမို့စောငျ့ခကျြတိုငျတနျဖိုးထား ဆောငျ့သညျ။ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျဆကျတိုကျဆောငျ့ပွီးတော့ ကိုညီခနနားတဲ့အနနေဲ့ မသီတာကိုပုံစံပွောငျးပေးတယျ၊ ခုနကသူ့အပျေါထပျရကျဖကျထား ရာက ထပွီး မတျတပျရပျတော့ကြှတျသှားတဲ့လီးကွီးကို သီတာနှမွောသလိုခံစားလိုကျရသေးသညျ။ ကုတငျအောကျမတျတကျရပျပီးတာနဲ့ ပကျလကျလှနျ ထားတဲ့ ဘယျခွထေောကျကိုဆှဲမပွီး ညာခွထေောကျပျေါထပျကာ လူကိုပါဆှဲလှညျ့ပေးလိုကျတော့ အို ကုတငျစောငျးမှာဘေးစောငျးအိပျနတေဲ့ပုံစံမြိုးပေါ့။ ဒီပုံစံတခါမှမကွုံဖူးတဲ့သီတာက ကိုညီလုပျသမြှကိုသာ ငေးကွညျ့အလိုကျသငျ့နပေေးရုံ။ ဘေးစောငျးဖွဈသှားတော့ နဂိုတညျးကဂဈတောငျ့တဲ့သီတာဟာ ရောမခေါတျကပနျးခြီကားအလားပဲ။
အောကျပိုငျးကိုတစောငျးထားပမေဲ့အပျေါပိုငျးကို ပကျလကျဆှဲလှနျလိုကျတော့ သီတာ့နိုနို့နှဈလုံးပိုဆှဲဆောငျမှုရှိသှားတယျလေ။ ကောကျခြိတျနတေဲ့သီတာ့ ကိုကွညျ့ပွီးကိုညီသိပျသဘောကသြှားပွီး လှလိုကျတာသီတာရယျ အို့ ခပျဟဟဖွဈနတေဲ့သီတာ့နှုတျခမျးတှကေိုစုတျနမျးရငျး လညျပငျးတှကေတဆငျ့ ကော့ခြှနျနတေဲ့သီတာ့နို့သီးခေါငျးလေးတှပေါစုပျနမျးတော့တယျ။ အောကျကတရမျးရမျးဖွဈနတေဲ့လီးကွီးကိုလဲအအားမထား၊ အသငျ့အနအေရကော့ပေး ထားလို့ ပေါငျနှဈလုံးကွားက အာနတေဲ့သီတာ့စောကျနှုတျခမျးသားတှကွေား ပှတျသပျထိုးစှရငျး ဒဈကိုသှငျးပွီးနောကျ ခေါငျးဝငျကိုယျဆံ့လီးကွီးတဈ ခြောငျးလုံး အတငျးထဲခှဲဝငျလာတော့တာပဲ။ ပေါငျနှဈလုံးထပျထားတော့နဂိုတညျးကစေးနတေဲ့ စောကဖုတျလေးကပိုသေးသှားတာပေါ့။ စောကျခေါငျးတ လြှောကျထိုးစှရငျး နှုတျခမျးသားတှပေါအရသာရှိပွီး နောကျဆုံး သားအိမျဝအထိ ထုတျထုတျထိတော့တာပဲလေ။ ဟှာ…း အအ အာ… ရှီး …..ကိုညီရယျ အငျးးးးးး ဒုတျခနဲ သားအိမျထောကျသှားတာကိုညီသိတာနဲ့ မကျြတောငျလေးစဉျး နှခမျးလေးကိုကျရငျး ညီးနတေဲ့သီတာ့နို့ကွီးကို ဆှဲညှဈရငျးဆောငျ့တော့ တာပဲ။ နာသှားလား သီတာ အဆငျပွရေဲ့လား အငျး… ဘာတှမေေးနတောလဲကိုညီရယျ သိပျလုပျတကျတာပဲ အဲ့လိုဆောငျ့စမျးပါ အူး ရှီး…… သီတာအထဲ ညှဈပေးတာအရမျးကောငျးတယျကှာ
သီတာ့ကိုစှဲသှားဘီကှာ အငျး … ထိတယျကိုညီရယျ ကုတငျအောကျကနမေတျတကျရပျရငျး ဖူးကောကျထှကျနတေဲ့သီတာ့ကို ဆယျမိနဈလောကျခါးအားနဲ့ လှဲဆောငျ့လိုးလိုကျ သီတာ့အဖုတျညှဈအားလေးကိုခံစားရငျးမွှငျးလိုးလိုကျနဲ့ ကွှရှလှုပျရမျးနတေဲ့သီတာ့နို့နှဈလုံးကိုပါကိုငျညှဈနပွေီး ခြှေးဒီးဒီးကတြဲ့အထိ စိတျတိုငျးကလြိုးဆောငျ့နတေယျ။ သူ့ဘဝလိုးဖူးသမြှထဲမှာ အကောငျးလို့ပငျဆိုခငျြသေးသညျ။ မသီတာအတှကျလဲ ပုံစံသဈမို့အဆနျးဖွဈသလို သူ့လီးကွီး ကစောကျနှုတျခမျးသားတှကေိုလိုးခှဲထိုးဝငျရုံသာမက အထဲကအူကလီစာတှထေိလာရောကျဆော့ကစားနလေိုပငျ။ သူ့ကိုထိထိမိမိအလိုးကောငျးတဲ့ကိုညီ့ကို တောငျခဈြလာသလိုပငျ၊ သူ့ကိုစိုကျကွညျ့ပွီးခြှေးတလုံးလုံးနဲ့လိုးနတေဲ့ကိုညီလကျတှကေို သူ့နို့တှပေျေါကနဆှေဲယူဆုတျကိုငျရငျးနဲနဲကွာတော့ ဟငျ အ အ သီတာထပျလာနဘေီ ပီးခငျြပွနျပွီကိုညီရယျ အငျး…. သူမမောတဲ့အတိုငျးဘဲ အာ သီတာအလှကွီးကိုခဈြနရေတာမမောဘူး သီတာ ဒီဖငျကွီးကို စိတျကူး ယဉျရတာကွာနဘေီ ဟူး ဖတျဖတျ ဖတျဖတျ မကျြလုံးလေးစဉျးနှုတျခမျးလေးဖူးပွီးပွောလာတဲ့သီတာကိုပွနျဖွရေငျး ပိုထနျလာလို့ခုနကထကျပိုဆောငျ့ တယျ။ ပီးခငျြသလိုဖွဈလာတဲ့သီတာလဲ သူဆောငျ့တဲ့အတိုငျး ပွနျခါးလေးနှဲ့ပွီးပွနျဆောငျ့ပေးရတာပေါ့။ သီတာ့ခပျဟဟနှုတျခမျးလေးကိုလကျတှနေဲ့စမျး တော့ စောကျရမျးဟော့နတေဲ့သီတာကနှုတျခမျးနားရောကျလာတဲ့ကိုညီ့လကျညိုးကွီးကိုဖမျးစုပျလိုကျတယျ။
ကွံဖူးကွတယျမဟုတျလား၊ အောကျကလီးကလဲသူ့စောကျပကျကိုလိုးနေ၊ သူ့နှုတျခမျးနဲ့လြှာကလဲ ကိုယျ့လီးကိုစုတျပေးနတေဲ့ပုံမြိုး လီးနှဈခြောငျးရှိသလိုကို ခံစားလိုကျရပွီး လကျညိုးတခြောငျးထဲအားမရခငျြတော့၊ လကျခလယျပါထညျ့လိုကျတော့ သီတာကလဲစိတျလိုလကျရ သူ့လကျခြောငျးတှကွေားကိုလြှာနဲ့ ယကျလိုကျ လကျခြောငျးတှကေိုလဲ လီးစုတျသလို စုတျပေးရှာတယျ။ ကိုညီလဲအထနျကွီးထနျပွီး ခွတေဖကျကိုကတငျပျေါထောကျပွီး တဖုနျးဖုနျးမွညျ အောငျဆောငျ့တော့တာပေါ့ ခဈြလိုကျတာသီတာရယျ သိပျလိုးလို့ကောငျးတာပဲ ရှီး . . . အား … ဟုတျတယျ ကောငျးတယျကို ဆောငျ့ကိုညီ သီတာ့ကိုမညှာနဲ့ အား အာ ပီးခငျြလာပွနျပွီကှာ အရမျးထိတာပဲ အငျ ပီးပီ အား…… ကောငျးလိုကျတာကှ အူးဟူးဟူး … မရတော့ဘူး ထှကျပီ … ဟှငျ ဟငျး အ အ သူ့လီး နှေးခနဲဖဈပီးသီတာပီးသှားမှနျးသိတော့ ဆောငျ့နတေဲ့အရှိနျကိုနဲနဲလြော့လိုကျပွီး သီတာ့အဖုတျညဈအားလေးတှကေိုခံစားရငျး တဈခကျြခငျြးလိုးနပွေနျလိုး နလေိုကျတယျ သူလဲသုတျထိနျးမှဖွဈမယျ။ စောကျဖုတျနှခမျးသားတှကေို ညှဈညှဈပီး အမောပွသှေားတော့ သူ့ကိုမှိနျးလိုးနလေို့ ဒီအတိုငျးဆိုကွာမယျမှနျး သီတာသတိရလိုကျတယျ၊ သူ့ကိုကောငျးကောငျးလိုးပေးသှားတဲ့ကိုညီ့ကိုလဲကြေးဇူးဆပျခငျြတာကွောငျ့ အငျး ကောငျးတယျကိုညီရယျ သူ့သိပျလိုးတကျတပဲ သီတာက အရမျးလှတာကိုး ကနြျောတော့အရမျးကိုဆှဲနဘေီ အှငျ အပိုတှေိ. သိပျနောကျကလြို့မကောငျးဘူး ကိုညီ မပီးသေးဘူးမို့လား ကိုညီပွီး အောငျသီတာလုပျပေးမယျလေ ဒီမှာလာလှဲလိုကျ မကျြလုံးလေးလှနျပွီးကွာပွောလေးနဲ့သီတာ့ကွောငျ့ ရငျတှဘောတှခေုနျပွီး ကုတငျပျေါတကျလှဲ ပေးလိုကျတယျ။ သီတာလဲလှဲနရောကထပီး ကိုညီ့အပျေါမခှခငျမှာ မတျတောငျနတေဲ့ကိုညီ့လီးကိုစုတျပေးလိုကျမိသေးသညျ။
ပီးမှကိုညီ့ပျေါသခြောခှပွီး သူ့စောကျခေါငျးနဲ့ခြိနျပွီး ဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခလြိုကျတယျ။ ဒီပုံစံလဲသူကြှမျးလို့မဟုတျ အာကာနဲ့တုံးကစမျးဖူးပွီး ခုကိုညီ့ကို ပွုစု ပေးခငျြလို့ဖွဈတယျ။ ဟှား အားအ တဈထဈခငျြးစောကျနှခမျးသားတှကေိုပှတျတိုကျသှားတဲ့ လီးဒဏျကိုနှဈယောကျလုံးခံစားလိုကျပွီး အဆုံးထိဝငျသှားတာ နဲ့သီတာ ဖငျပွနျကွှပွီး ဆောငျ့ခပြေးရငျး ကိုညီ့ကိုပွနျပွုစုလိုကျတယျ။ ကိုညီကတော့အကွိုကျဆုံးပေါ့ အောကျကနေ သီတာ့ဖငျကွီးကိုထိနျးကိုငျထားရငျး အလိုကျပွနျဆောငျ့ပေးလိုကျ ရငျဘတျပျေါအိကလြာတဲ့ နို့သီခေါငျလေးတှစေို့လိုကျနဲ့ ၁၅မိနဈလောကျကွာတော့ အား အာ ဟှငျး သီတာထပျပီးခငျြလာပွနျပီ နျော သူမပီးသေးဘူးလား အငျ့အငျ့အငျ့ ပီးခါနီးပွောနျောကိုညီ အငျး အှတျ ပွောပွီးတာနဲ့ ကိုညီ့နှုတျခမျးတှကေို အာသာပွငျးပွငျးစုတျနမျးရငျး သီတာ အားရပါးရဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ။ ကိုညီလဲ အဲ့လောကျဆောငျ့နတေော့ပီးခငျြနပေမေဲ့ သီတာပီးတဲ့အထိထိနျးဆောငျ့တယျ။ ခနကွာတော့ လီးထိပျမှပူခနဲဖွ ဈပီး သီတာပီးကွောငျးသိတာနဲ့ သီတာ့ကိုဆှဲလှဲပွီး အပျေါကနအေသကုနျတကျဆောငျ့တော့တာပဲ။ သီတာကလဲ အဲဒါမြိုးကွိုကျတော့ စောကျခေါငျးထဲပီးနေ ရငျးကို ဖွဲကားပွီးကိုပိုးစိုးပကျစကျခံပေးလိုကျတယျ။ နှဈယောကျလုံး ခြှေးတှရှေဲ အသကျရှုသံတှပွေငျးဆူညံပွီး ဆယျမိနဈလောကျကွာတော့ ကိုညီဆကျမ ထိနျးနိုငျတော့ဘဲ အား…. ကိုပီးတော့မယျ သီတာ အပွငျထုတျလိုကျရမလား အငျး ထုတျလိုကျ ကိုညီလဲ ဗိုကျပျေါပနျးထုတျဖို့ထုတျလိုကျခြိနျမှာပဲ သီတာက အမွနျကိုညီ့ပေါငျကွားထဲကနအေောကျကို ကိုညီ့လီအထိလြောဆငျးပွီး ကိုညီ့လီးအကိုဖမျးစုပျလိုကျတယျ။
သူစောကျဖုတျထဲကထုတျထုတျခငျြးမို့ ဒဈကလဲနီရဲဖူးယောငျနပေီး လီးတခြောငျလုံးလဲစောကျညျတှရှေဲနတေဲ့အပွငျ အံ့သွသှားတဲ့ကိုညီလဲခကျြခငျြးမပီး သေးဘဲ ခနအစုတျခံပွီးမှ သီတာ့ပါစပျနှေးနှေးထဲ အားရပါးရပီးလိုကျတာမို့ လရညျတှကေပါးစပျနဲ့မဆံ့ လြှံကလြာရတယျ။ ဒါပမေဲ့သီတာကတော့ ရသ လောကျမွိုခရြငျး လီးတဈခြောငျးလုံးကို ခနကလကျညိုးတှကေိုစုပျနရေပုံမြိုးကို စုပျပေးတာ။ ကိုညီက သိပျခဈြသှားတယျ၊ သူကပါးစပျထဲမှာပီးရတာ ကွိုကျပမေဲ့ မသီတာကိုမပွောရဲသေး။ ခုမသီတာကလဲ သူ့ကိုကောငျးကောငျးထောငျးပေး၊ ယကျပေးထားတဲ့ကိုညီ့ကိုသဒ်ဒါယိုဖိတျပီး လုပျပေးလိုကျခွငျးဖွဈ တယျ။ နောကျဆုံးတဈစကျထိအစုပျမပွတျတဲ့သီတာ့ပါးစပျထဲကလီးကိုဆှဲထုတျပီး သီတာကိုဖကျ အနားကပျလှဲရငျး ခဈြသှားပွီသီတာရယျ ကို့ကိုစိတျမဆိုး ဘူးမဟုတျလား အှငျ လူကိုလိုးပွီးမှ ဘာစိတျမဆိုးဘူးလားလဲ ခုနကလိုးခဲ့ခံခဲ့ကွပမေဲ့ ခုမှရညျးစားရသလိုသီတာရှကျသှားပီး မကျြလှာလေးခတြယျ။ အသဲ ယားသှားတဲ့ကိုညီက အရမျးခဈြမိပီးအသဲတှယေားသှားတာသီတာ ခုလဲထပျလဲလိုးခငျြသေးတယျ နှုတျခမျးလေးကိုဆှဲနမျးရငျးဘေးတစောငျးဖွဈနတေဲ့သီ တာ့ဖငျထှားအိအိကွီးကိုကိုငျညှဈနမေိတော့ ခုနကမပြော့တပြော့ဖွဈနတေဲ့လီးကွီး ပွနျမာလာလို့ သီတာက အသာရုနျးထှကျရငျး ဟိတျ ကိုညီ နောကျကြ လို့မကောငျးဘူးနျော ပွနျကွရအောငျ နာရီကွညျ့တော့၉နာရီခှဲတော့မယျ။
ဟုတျတော့ဟုတျတယျ တရကျကှကျထဲနတောဆိုတော့ သိပျနောကျကလြို့မ ကောငျး အတူပွနျသှားရငျရှော့ရှိနိုငျသညျ။ ဒါပမေဲ့ အခှငျ့အရေးလေးရတုနျးမို့ သီတာ့ကိုဆှဲဖကျလိုကျပီး နောကျတှခေ့ငျြသေးတယျသီတာ၊ သီတာ့ကို ကိုယျ အရမျးခဈြမိနဘေီ အို ကိုညီခဈြတာကွီးကလဲ ကွောကျစရာကွီး မကွောကျနဲ့သီတာ ဖွဈနိုငျရငျတသကျလုံးခဈြခငျြနတော ခုတောငျ … ဟိတျ ဟိတျ မ တောငျနဲ့တော့ညီရယျ နောကျကနြဘေီ နောကျတဈခါပေါ့နျော နျော တကယျနျောသီတာ နောကျလဲခုလိုထပျခဈြခငျြ လိုးခငျြသေးတယျ သီတာလေးရယျ အှ ငျး တူတူပဲကိုညီရယျ အ အှငျး အနမျးရှညျတှကေိုအတငျးရပျလိုကျကွပွီး သီတာ့ကို တကျဆီနဲ့ပွနျခိုငျးပွီးကိုညီကတော့အဆငျပွသေလိုပွနျမယျဆိုပွီးကနျြခဲ့ လရေဲ့။ အိမျပွနျရောကျတော့အားရပါးရရခြေိုးပွီးကုတငျပျေါလှဲရငျး ဒီရကျပိုငျးလေးအတှငျးမထငျမှတျဘဲကွုံခဲ့ရတဲ့ကာမအတှအေ့ကွုံသဈတှနေဲ့ စိတျရော ကိုယျပါပြျောဝငျခဲ့ရသလို ခုမှတကယျကာမဂုဏျဆိုတာကိုခံစားရပွီး အလိုးခံတယျအရသာကိုတကယျပေးစှမျးခဲ့တဲ့ ကိုညီ့ အယုအယတှကေိုတသိမျ့သိမျ့ပွနျ ခံစားရငျး အိပျပြျောသှားပါတော့တယျ။ အိမျမကျထဲမှာတော့ ကိုညီနဲ့မဆုံးနိုငျတဲ့နောကျတဈခါမြားပေါ့ . . . . . . ပွီးပါပွီ။
မထင်မှတ်ဘူး ( စ / ဆုံး )
မြောက်ဥက္ကလာကိုပြန်သော မီနီဘက်စ်လေးထိုးရပ်လာတော့ လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူ မသီတာလဲကားပေါ်တိုးတက်လိုက်ရသည်။ အရမ်းကြီးမကျပ်သော်လည်း လူအပြည့်နှင့်ပင်။ ဒါတောင် စနေနေ့နေ့လည်ခင်းပဲရှိသေးသည်၊ ရုံးဆင်းချိန်ဆိုလျှင်ကားပေါ်တက်ဖို့တောင်မန ည်း။ သီတာက ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လာလုပ်တာ ၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ ရန်ကုန်ပါးဝနေပြီဆိုပါတော့။ သူတို့နားက ကုန်စုံဆိုင်မှလုပ်ရင်းတဖက်က ပွဲစားတောင်လုပ်နေပြီး သူတို့မြောက်ဥက္က လာ အဝိုင်းကြီးထိပ်နားမှာတင် သူပွဲစားလုပ်ပေးထားတာ တော်တော်များပြီ။ ဒီနေ့လည်း မြို့ထဲမှာ အိမ်ရောင်းမယ့်သူရှိလို့စကားပြောပြီး ပြန်လာတာ။ ရေခဲ ဆိုင်နားရောက်တော့ လူတစ်အုပ်တက်လာပီး အတော်ကျပ်သွားသည်။ မတ်တပ်ရပ်သူတွေနှစ်တန်းကနေ သုံးတန်းဖြစ်သွားသည်။ သူ့နောက်မှာတော့ ခုနက သူ့ကိုကွတ်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်နေသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ အမူးသမားတွေ ကုလားတွေနဲ့စာရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့ဟုတွေးသည်။ ရန်ကုန် မှာဘက်စ်ကားစီးရင်ဒီလိုပဲ မသီတာလိုအိုးကောင်းကောင်းမျိုးဆိုလျှင် အထောက်ခံဖို့သာပြင်ထားပေတော့ပဲ၊ ကံကောင်းတာတစ်ခုက သူကလဲကြိုက်တယ် လေ။
ယောကျာင်္းနဲ့အနေဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုကိစ္စဖြစ်လာရင်သူမအတွက် ဖြေရှင်းစရာနှစ်နည်းပဲရှိတယ်။ တစ်နည်းက သူနှင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ငြိထားသော သူ့ကုန်စုံဆိုင်သူဌေး ဦးအောင်မိုး၊ သူကတော့ သူမကိုတွေ့လျှင်ငန်းငန်းတက် ပြောတာတော့ သူ့သမီးအကြီးမကြီးနဲ့တူလို့သူ့စိတ်ထရပါသတဲ့ ကဲ။ အဖိုးကြီး ဖြစ်လို့သိပ်ဆန္ဒမပြည့်ဝသလို သူလဲသိပ်ဖီလ်းမလာ၊ သူအဖိုးကြီးဆီမသွားကြာပြီ။ နောက်တစ်ခုက ခုလိုကားပေါ်ကရသေ့စိတ်ဖြေလေးတွေ၊သူတို့က ကား စီးနေရင်း ကားပေါ်မှာထောက်ရင်းဖီလ်းခံ၊ သူမက သူ့ဖင်ကြားထဲလာထောက်နေတဲ့ လူရဲ့ဆိုဒ်ကိုမှန်းပြီးဖီလ်းတက်၊ မှတ်တိုင်ရောက်တော့ သူ့လမ်းသူသွး ကိုယ့်လမ်းကိုသွားပဲ ရှင်းတယ်၊ ဘယ်သူမှမသိဘူး။ ဟိုတခေါက်ကတော့ သူ့ဖင်ကြားထဲ နွေးနွေးထွားထွားကြီးလာ ထောက်ထားတော့ ရင်ခုန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာ စတီးထမင်းချိုင့်လေးဖြစ်နေလို့ ရီရသေး တယ်၊ တစ်ခါတလေ ကုလားတွေလာထောက်ရင်တော့ သူမကြိုက်ပေ။ မသီတာမှ အချောအလှကြီးတော့မဟုတ် ရိုးရိုးသာမန်မိန်းမ အသက်၃၆ အိမ်ထောင်ရှိ ရွှေတောင်သူ အကိတ်တစ်ယောက်။ အသက် ၃၆ကလေးတစ်ယောက်အမေဆိုတော့ ဗိုက်ခေါက်လေးမဆိုစလောက်ရှိတာကလွဲပြီး ကျန်တာ ကတော့သရေယိုစရာ ဆိုတော့ကာ ကားပေါ်ရောက်လျှင် အထောက်ခံရသမြဲ။
ရုတ်တရက် လူတွေပြန်ဆင်းသွားတော့နဲနဲပြန်ချောင်သွားသည်၊ သို့သော် သူ့နောက်က ကောင်လေးကမခွာသေး။ လူက နှစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်၊ အောက်ကပူပူနွေးနွေးလေးကလဲ ထာက်ထားတာက ကလေးလိုပဲ။ အင်း ခလေးတွေအတက်ကောင်းတွေတက်နေတာ။ သူ စချင်နောက်ချင်စိတ်နှင့် သူ့ဖင် ကိုမသိမသာ အနောက်နဲနဲတိုးပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်လေး မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ထင်တယ် တခြားလူတွေဆို ပိုကပ်လာမယ်ဖြစ်သော်လည်း ကောင် လေးကတော့အနောက်လဲနဲနဲပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ ခနနေတော့ ပြန်လာကပ်သည်၊ လက်ကိုလဲ အပေါ်တန်းကိုင်လိုက် ပြန်ချလိုက်နဲ့ သူဖင်နဲ့မထိ ထိအောင် လုပ်နေတာ စိတ်မရှည်ချင်စရာဖြစ်သည်။ သူ့ရှေ့ထိုင်ခုံက လူဆင်းသွားပြီး မသီတာထိုင်လိုက်တော့ ကောင်လေးကဘေးမှာလာရပ်သည်။ မော့မကြည့် သော်လည်းသေချာတာကတော့ သူမအကျီလည်ဟိုက်ထဲမှ တစွန်းတစပေါ်နေသောသူမရင်သားတွေကိုငုံကြည့်ပီး စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီထင်၏၊ လက်မောင်း ကိုလာကပ်သောသူ့ပေါင်ကြားမှာ နွေးနွေးကြီးကမာလာသည်။
မှတ်တိုင်မှာလူတွေထပ်တက်ရ်ျ ခါးပိုက်နှိုက်ရန်ကြောက်သလို သူ့ကျောပိုးအိတ်ကိုအရှေ့မှာပြောင်းလွယ်ပီးကိုင်ထားလေတော့ လူတိုးရင် သူ့လက်လေးက မသီတာနို့အုံနားရောက်ရောက်လာသည်။ ဒီကောင်လေးအကြံဉာဏ်များပြီထင်သည်။ မော့ကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ကလေးချောလေး အသားဖြူဖြူမှာ မျက်နှာနဲနဲနီနေသည်။ မသီတာကလေးကိုစချင်လာသဖြင့် မသိမသာ ရင်ကိုပိုမောက်လိုက်ပြီး သူ့ဘက်နဲနဲကပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့လက်လေးနဲ့ထိမိသွား တယ်၊ သူကကိုယ့်ကိုလာထိတာမဟုတ် သူလက်ကိုကိုယ့်နို့နဲ့သွားထိတာဆိုတော့ ကောင်လေး လန့်သွားသည်ထင်သည်။ ချွေးတွေဘာတွေထွက်လာတာမြင် ရတော့ မသီတာရီချင်လာသည်။ သူနိုင်လို့ရလောက်သည့်အရွယ်မို့ရော၊ သူထိကြည့်ချင်တာ ထိကြည့်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ရော မသိချင်ယောင်ဆောင် ပေးလိုက်တယ်။ (ကောင်လေးက အတွေ့အကြုံမရှိအသစ်လေးဖြစ်သော်လည်း အတောင့်စားအမကြီးတစ်ယောက်က ပေးတာကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ယူရ တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်။ သူ့မှာ ဒီနို့ကြီးတွေကို ထိလဲထိကြည့်ချင် အော်လိုက်မှာလဲကြောက်နှင့် ချွေးတွေပင်ထွက်လာရသည်။ အထိအတွေ့ကတော့ ဘာ ကောင်းသလဲမမေးနှင့် သူဖြေတက်မှာမဟုတ်။)
လူတွေတိုးတော့ အရှေ့ကိုင်းသလိုလိုဘာလိုလိုနှင့် မသီတာရင်အုံတစ်ခုလုံးကိုလာထိသည်။ အဲ့လောက်မရဲဟုထင်ထားသော မသီတာမှာ အံ့သြရသည်၊ ကိုယ်ဟန့်ဖို့ပြန်လုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကောင်လေးရှက်သွားမှာ ကောင်လေး မျက်နှာညှိုးသွားမှာ စိုးသဖြင့်ရော မသိသလိုသာနေပေးလိုက်တော့သည်။ သူ့ယောင်္ကျားကိုင်သလို တစ်အုံလုံးကိုင်တာမှဟုတ်တာ နို့ဘေးသားလေးကိုလက်နဲ့ထိရုံပဲဥစ္စာ ဘာဖြစ်လဲ၊ ဒီကောင်ချောလေးကျေနပ်တာကို သူပျော်နေ သလိုခံစားရသည်။ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ကောင်လေးစိတ်ဝင်စားခံရရ်ျ စိတ်လှုပ်ရှားတာလဲဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီကောင်လေးကလဲ အတော်ရောင့်ရဲသည် ဒီ ထက်ဘာမှပိုမတက် ခုနအတိုင်း ထိထားရုံလေးနဲ့ငြိမ်နေသည်။ ခဏကြာတော့ လူတွေချောင်သွားပီး သူ့ဘေးကလူလဲဆင်းသွားတော့ သူဘေးရွှေ့လိုက်ပီး ကောင်လေးကိုပြုံးပြပြီး ဝင်ထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်မိသည်။ လာ မောင်လေး ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ ဘယ်ပြန်မှာလဲ အဲ ဟို မြောက်ဥက္ကလာပါ (ကောင် လေးမျက်နှာချွေးပြန်နေပီ) ဟင်းဟင်း မောင်လေးက မြောက်ဥက္ကလာမှာနေတာလား မှုတ်ဝူးဗျ အဒေါ်လူတယောက်ရှာခိုင်းလို့ပါ သြော် … ကျောင်း တက်နေတာလား အမှန်တော့ ကောင်လေးကိုသူစကားပြောချင်ရ်ျသာစကားတွေဆက်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်လေးက ဆက်ကန်းရီးယားကွန်ပြူတာ ဖြစ်ကြောင်းပြန်ဖြေပီး သူတို့စကားတွေဆက်သွားသည်။ ဒီလိုကောင်အထက်တန်းစားကောင်ချောချောလေးနဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့နေရတာမသီတာပျော်သလို ဖြစ်နေသည်။
အဝိုင်းကြီးထိပ်ပါလား အင်း ပါတယ် အမဆင်းတော့မယ်နော် မင်းရော ကျနော်လဲဆင်းမှာ မသီတာအရှေ့ထွက်သွားသည်၊ စိတ်ထဲတော့သိပ်မသင်္ကာ ခုနကတော့ မရေမရာပြောပြီး ခုဆင်းတော့ သူနဲ့တစ်မှတ်တိုင်တည်း။ တိုးဆင်းကြတော့ သူ့နောက်ကခပ်နွေးနွေးတစ်ချောင်းက ကောင်လေးဖြစ်ဖို့များတယ် လို့သူတွေးလိုက်သည်။ ကားအောက်ရောက်တော့ မောင်လေးရှာမယ်လိပ်စာပေးလေး အမကူရှာပေးမယ် အဲ . . . လိပ်စာကပျောက်သွားပီအမရဲ့ အဒေါ် ပြောတာက မှတ်တိုင်နားမှာပဲတဲ့ အဲ့ဒါဘယ်လိုရှာမလဲ နာမည်ကော နာမည်က အဲ ဒေါ်မြခင်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပြောတာပဲ၊ ကျွန်တော်လဲ အနီးအနားလိုက်ကြည့်ပီး မတွေ့ရင်ပြန်မှာပါ အင်း . . . . အကူအညီလိုရင်ပြောနော် အမက ဒီမျက်နှာခြင်းဆိုင်နားကတိုက်မှာနေတာ ဝင်လည်ပေါ့ ကျေးဇူး နော်အမ . . . ဟို ရေလေးတခွက်လောက်သောက်ပီးမှ သွားရှာမလားလို့ ဒီကောင်လေး သူ့ကိုတော့စိတ်ဝင်စားနေတာသေချာပီ ဒီအရွယ်ကြီးကို၊ သူကလဲဒီ ကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီမဟုတ်လား။ ဒီကောင်လေးနှင့်ထပ်ပတ်သတ်ချင်သေးရ်ျ အိမ်သို့အလည်ခေါ်သွားလိုက်သည်။ အင်းလေ . . . အမအိမ်မှာရေ လိုက်သောက် ပီးမှရှာပေါ့ ဟာ ကျေးဇူးဗျာ အမကသိပ်လှသလို သဘောလဲသိပ်ကောင်းတာပဲနော် အမယ် မောင်လေးက မြှောက်တက်သားပဲ ဟင်းဟင်း ပြောဇမ်းဘာစားချင်လို့လဲ အာ အမကလဲ တကယ်ပြောတာပါ ကဲ အမကဘယ်မှာလှလို့လဲ တောသူကြီးကို အာ အဲလိုမပြောပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော့မျက်လုံး ထဲမှာတော့ အမကသိပ်ကိုလှပါတယ် အတည်ကြီးပြေနေတာ၊ မသီတာတောင်ရှက်သွားတယ်။ ဖြူဖြူနုနုကောင်လေးက သူ့ကိုလှတယ်ဆိုတော့ သူမသိပ် ကျေနပ်သွားသည်။
ကဲ အပြောလေးတွေလျှော့ ဒီတိုက်ပဲ အပေါ်ရောက်မှမင်းစားချင်တာကျွေးမယ် ဗျာ တ ကယ် နော် ဟဲ့ . . . . သြော် ဒီကလေး ရှက်ရှက်နဲ့မသီတာပြေးတက် သွားသည်၊ အနောက်ကကောင်လေးကတော့ သူ့ဖင်တုန်းတွေလှုပ်သွားတာကိုကြည့်နေတော့မည်။ မသီတာအခန်းက ဒုတိယထပ်မှာ တံခါးဝရောက်တော့ ဖြူဖြူနုနုနဲ့ပိုးဟတ်ဖြူလေးကို စချင်စိတ်ဖြင့် ကဲ ရေပဲရမယ်နော် ဒါနဲ့ ရှင်လေးက ဘာစားချင်လို့တုန်း ဟွန်း ဟွန်း (ကောင်လေးမှာ ရှက်သွားပြီး မျက်နှာကြီး ရဲလာသည်) အာ ဟို ရေပါပဲဗျာ တခြားဟာမဟုတ်ပါဘူး အမကိုနောက်တာပါ ဆိုသော်လည်း သူ့အကြည့်တွေက မသီတာရင်သားတွေမှမခွါ၊ ခက်ပါပြီခ လေးရယ်။ အပျိူလေးတစ်ယောက်လို သူမရင်တွေဘာတွေခုန်လို့။ ကဲ ထိုင်ဦးမောင်လေး အမရေသွားယူပေးမယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါနော် ဒါနဲ့ မောင် လေး နာမည်က ကျွန်တော်နာမည် အာကာပါ အမကရော အမနာမည် သီတာ တဲ့ ရော့ရေသောက်လိုက်ဦး သူ့ဘဝမှာသူ့အမျိုး သူ့မောင်လေးတွေကလွဲပြီး ဒီအရွယ်ချာတိတ်လေးတွေနဲ့မဆက်ဆံဖူး၊ ဒီဖြူဖြူသန့်သန့်ကောင်လေးကို သူစိတ်ဝင်စားသွားသည် ပြီးတော့ ဒီကောင်လေးကလဲ သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီ အထိရောက်လာတာမဟုတ်လား။
ကောင်လေးကတော့ ရှက်နေတာနဲ့ စမှာမဟုတ် သူကပဲ ကဲ ခနနားဦး နဲနဲအိုက်တယ် အမအကျီင်္လဲလိုက်ဦးမယ် ပြီးမှ အမပါထွက်ကူရှာပေးတာပေါ့ မသီတာအခန်းထဲဝင်သွားပြီး ကောင်လေးချောင်းချင်ချောင်းလို့ရအောင် တံခါးမပိတ် လိုက်ကာကြားမှမြင်နိုင်သည်လေ။ အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တော့ သူ့ရင်သားနှစ်ဆိုင်ဟာသိပ်မကြာခင်ကြုံတွေ့မယ့်အရေးအတွက်ကြွားကြွားကြီးစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ ဘရာဇီယာကို ချွတ်လိုက်တော့ အို နို့သီးခေါင်းလေးတွေပါထောင်လို့ပါလား။ ထမီတစ်ထည်ကောက်လဲလိုက်ပြီး မှန်ထဲကကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးခမျာမျက်လုံးကြီး ကိုပြူးလို့၊ သူကျေနပ်သွားသည်။ အကျီတစ်ထည်ကောက်ဝတ်မယ်လုပ်တော့ ဘရာဇီယာမဝတ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းအကျီတထပ်တည်းဝတ်ပြီးပြန်ထွက်ခဲ့ လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ငါ့မောင်က လူချောပဲ၊ ကျောင်းမှာဆို စော်တွေဝိုင်းနေမှာ အာ . . အမကလဲ စော်မရှိပါဘူး အမယ် ဟုတ်လို့လား ဒီလောက်ချောတဲ့ လူချောလေးကို အမကတော့လုပ် ပီ နဲနဲပါ အဟဲ အမ မသီတာကမှ တကယ့်မိန်းမလှ အမယ် တောသူကြီးကို ဘယ်မှလှလို့လဲ မင်းကျောင်းမှာမှ ဆော်လှလှလေးတွေ ကျတော်တို့မကြိုက်ပါ ဘူး ပိန်တာရိုးတွေ အမသီတာတို့လို အလုံးအထည်မျိုးမှ တကယ်လှတာ ပြောပြောဆိုဆို မျက်လုံးက မသီတာရင်သားဆီကမခွာတော့ ကြည့်ရင်း နို့သီ ခေါင်းကလေးမှာလူကြည့်တော့ထောင်လာသဖြင့် အကျီပေါ်မှမြင်နေရသည်။
ဒါဆိုဒို့က ရုပ်လှတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းကလှတာပေါ့ ဟုတ်လား အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ ဒီမျက်နှာနဲ့ ဒီဘော်ဒီလိုက်တယ် လှတယ်ပြော တာ အဲ့လို့ကောက်ကြောင်းလှလို့ မင်းကားပေါ်မှာကပ်နေတာမဟုတ်လား ဟွန့် (မျက်စောင်းလေးနဲ့ညုလိုက်တယ်) အာ အမကလဲ လူတိုးလို့ပါဗျ ကောင် လေးမျက်နှာတော်တော်ရဲသွားသည်၊ နောက်တဆင့်ထပ်တင်မှဖြစ်မယ်။ အာကာထိုင်နေတဲ့နားသွားထိုင်ပြီး အမယ် ဘာလူတိုးလို့လဲ အောက်ကလဲ တောင် နေပီးတော့ အဲ အဲဒါက ဟို ကပ်နေလို့ပါ ပီးတော့ အမဖင်ကြားထဲကိုလဲ လာထောက်တယ်လေ ဟုတ်တယ်မို့လား မသီတာစကားကြမ်းကြမ်းပြောလေ့မရှိ ပါ၊ ရှက်နေတဲ့ကောင်လေးကို ပိုရှက်စေချင်လို့ပြောရင်း သူစိတ်ပိုပါလာသည်။ ဘာအခုမှခေါင်းငုံ့ထားတာလဲ ပြောလေ ဘာလို့ဒို့ဖင်ကိုလာထောက်တာလဲ လို့ ဟို ဟို မပြောတက်ဘူး ပြန်တော့မယ် အမယ် လူကိုကားပေါ်မှာထောက်တုန်းကထောက်ပီး ခုမှဘာပြန်မယ်လဲ မရဘူး ပြော ဘာလို့အမကိုလာထောက် တာလဲ ဟို ဟို အမစိတ်မဆိုးနဲ့နော် အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အမ အဲ ဖင်က သူများတွေထက်လှလို့ ကြီးလဲကြီးလို့ ကျွန်တော်ထောက်မိသွားတာပါဗျာ စိတ်မ ဆိုးပါနဲ့ ဘာပဲပြောပြောသူ့ဖင်ကိုလှတယ်လို့ပြောတာ မသီတာကျေနပ်သွားပြီး ရှက်လဲရှက်သွားသည်။
စိတ်မဆိုးပါဘူးအာကာလေးရယ်၊ တကယ်လား ဒို့ဖင်လှတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလှတာလဲ ကျတော်မပြောတက်ဘူးဗျ သူများထက်တော့လှတယ် လုံးတင်း ပြီး ဘောလုံးကြီးလိုပဲ ဆိုတော့ မောင်လေးက ထိချင် ကိုင်ချင်နေတာလား ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ အမစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကောင်လေးကို သနား ပြီးပါးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ် ဟင့်အင်း အမှန်တိုင်းပြောရင်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် မင်းကိုဆုတောင်ချဦးမှာ ကဲပြောပါဦး အာကာကိုင်ချင်နေတာဖင်တစ်ခု တည်းလား အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ တကိုယ်လုံးပဲအမရယ် ဟယ် . . ဒို့နို့တွေရောပေါ့ ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲ ကျတော် မပြောတက်ဘူး၊ ဟို အမကိုကိုင် ချင် နမ်းချင်နေတာပဲသိတယ် ကဲ ရှက်မနေနဲ့တော့အာကာ မင်းကတကယ် ရည်းစားမရှိ မိန်းမမလုပ်ဖူးတာလား ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ဟုတ်ပုံရပါသည်။ လူပျို လေးကိုရှင်ပြုပေးရမည်ဆိုတော့ သီတာစိတ်ကြွလာပြီး သီတာကပဲစနမ်းလိုက်သည်ထင်သည်၊ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဆက်သွားတော့ အာကာလက်တွေက မ သီတာရင်သားတွေဆီမရဲတရဲရောက်လာသည်။ ခုထိရှက်မနေသေးတာ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါတောင် မကိုင်ရဲသလိုကိုင်နေသဖြင့် သူမကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြ လိုက်ရသေးတယ်။ ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ကောင်လေးနှင့်နမ်းနေရတာ မထင်မှတ်လောက်အောင် ရင်ခုန်နေရသည်။ သူ့နို့တွေကိုညှစ်ရဲလာပြီး ပေါင်တွေကို ပွတ်ပေးသည်။ သီတာလဲ သူ့ပုဆိုးအောက်မှထောင်နေတဲ့သူ့ဂျိုးလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ဟော့တော့ နမ်းနေတာကိုခွါပြီး သေချာပြန်ကြည်ံလိုက်တယ်၊ သူကိုင်လိုက်မိတာဒီကောင်လေးဟာမှဟုတ်ရဲ့လား။
သူထင်တာကဖြူဖြူဖျော့ဖျော့ကောင်းလေးမှာ သေးသေးလေးပဲရှိမယ်ပေါ့ လက်တွေ့တွေ့လိုက်ရတာက ဦးအောင်မိုးထက်ကြီးပြီး သူ့ယောကျာင်္းနီးပါး လောက် တောင်မတ်နေတာနေတဲ့သူ့အရွယ်အစားကိုသဘောကျသွားတယ်။ ဂွင်းတော်တော်ဆော့တယ်ထင်တယ်။ သူကျေနပ်သွားပြီး ပုဆိုးဆွဲချွတ်လိုက် တယ်၊ သူ့အကျီကိုလဲချွတ်ပေးလိုက်တော့ အာကာမှာ သူ့နို့ကြီးတွေကို ကိုင်ကြည့်ညှစ်ကြည့်လုပ်နေသေးရ်ျ စို့ခိုင်းလိုက်ရသေးသည်။ သူကတော့ ကောင် လေးလီးကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးဆုပ်ကိုင်ပြီး ကွင်းတိုက်ပေးနေလိုက်တယ်၊ ခနနေတော့ အာကာ မောင်လေး ဒီမှာကြည့်ဇမ်း မတ်တက်ရပ်ပြီး ကျန်နေသေးတဲ့သူ့ ထမီပါချွတ်ပြလိုက်တယ်၊ အာကာ့မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသား လှသေးရဲ့လား အာကာ သိပ်လှတာပဲ မသီတာရယ် ဒါလေးကော မလိုချင်ဘူးလားခလေးရယ် (သူ့စောက်မွှေးတွေကိုထိုးဖွဆော့ပီးမေးလိုက်တာ) ပြန်မဖြေနိင်ဖြစ်နေတဲ့ အာကာမျက်နှာနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ် အာကာမှာဘာမှမလုပ်တက် ရုပ်ရှင် တွေထဲကိုလျှက်ကြည့်ဖို့လျှာထုတ်လိုက်ပေမဲ့ အမွှေးတွေ ကိုပဲယက်မိတယ်။ သူသင်ပေးမှရတော့မယ့်ပုံပဲ။
အခန်းထဲသွားကြရအောင် ခလေးရယ် ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ မသီတာဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး အနောက်ကအမြန်လိုက်သွားတယ်။ အခန်းထဲ ရောက်တော့ ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး ကုတင်ပေါ်တင်ပါးလွှဲထိုင်နေတဲ့မသီတာကို နမ်းတယ်၊ သူသဘောကျနေတဲ့ နို့ကြီးတွေကိုလဲ အားရပါးရပင့်ကိုင်တယ်။ မသီတာကလဲ အာကာ့လီးကိုပိုမာတောင်လာအောင်ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဂွင်းတိုက်ပေးပီး ပိုမာတောင်လာတော့ မသီတာလဲဂွင်းတိုက်တာရပ်လိုက်တယ်၊ ပို့ မယ့်ပို့ကုတို့ရောက်အောင်ပို့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကောင်လေးကိုနတ်ပြည်ပို့ဖို့ သူစေတနာအပြည့်နဲ့ ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ မသီတာရဲ့လက်နဲ့ ဂွင်းဆွဲပေး နေတုန်းကခံကောင်းကောင်းနဲ့ခံနေတဲ့အာကာဟာ နွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့မသီတာရဲ့နှုတ်ခမ်းအရသာနဲ့တွေ့တောင့် အား ခနဲတစ်ချက်အော်လိုက်တယ်၊ နာလို့ မဟုတ်ဘူး သိပ်ကျေနပ်သွားလို့။ ရုပ်ရှင်တွေ စာတွေထဲမှာဖတ်ဖူးတွေ့ဖူးပေမဲ့ မသီတာက သူ့ကိုစုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးလေ။ မသီတာလဲ တခါမှ ဒီလောက်မထန်ဖူးပေမဲ့ ဘာမှမသိတဲ့ကောင်လေးကို ဆရာလုပ်ချင်ဇောနဲ့ သူသိသူတက်တာတွေအကုန်လုပ်ပေးရင်း သူစိတ်ပိုကြွလာတယ်။ သူ့ယော င်္ကျားနဲ့သူတောင်အမြဲမစုတ်ပေးဘူး ဒီကောင်လေးနဲ့မှ သူထန်နေတာကိုလဲ သူအံသြတယ်။
အမကိုလဲ ကျွန်တော်ပြန်နမ်းပေးမယ်လေ မင်းကဘာကိုနမ်းမှာလဲ (ပြုံးစိစိနဲ့ သိသိကြီး၊ ဒီကောင်လေးပြောတာကြားချင်လို့တမင်မေးတာ) အမ ဒီဟာလေ အာကာရှက်မနေနဲ့ကွာ ခနကပဲသူ့လီးကိုစုပ်ပေးပီးပီ သူတောင်ဒို့ပါးစပ်ထဲ လရည်တွေပန်းပီးတော့ အခုဘာပြန်နမ်းမှာလဲ (မျက်နှာရဲခနဲဖြစ်သွားပေးမဲ့) အမ အဖုတ်ကိုလေ ယက်တက်လို့လား အမသင်ပေးလေ ခစ်ခစ် အင်းသင်ပေးမယ် ပြန်မေးလေ အာကာ အမအဖုတ်ကိုနမ်းပေးမယ်လေ မနမ်းနဲ့ . . . . . ဒို့စောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေး (သီတာလဲအဲ့လိုပြောရတာ အရသာတွေ့လာတယ်) ပြောပီးတာနဲ့ သူ့ပေါင်တွေကိုကားပေးလိုက်တယ်၊ အာကာလဲတက် သလောက်မှတ်သလောက် ယက်တော့တာပဲ၊ ပေါင်ခြံတွေကိုနမ်းတယ် ဆီးခုံအမွှေးတွေကိုယက်တယ် ပီးတော့ အကွဲကြောင်းကြီးကိုအပေါ်ကနေယက်နေ တယ်။ သီတာအသည်းတယားယားဖြစ်နေပေမဲ့ မထိရောက်တော့ အမှန်ကိုသင်ပေးရဦးမယ်။ အာကာ့ခေါင်းကို ဆွဲမလိုက်ပြီး အကွဲကြောင်းလေးကို လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲဟလိုက်ပီး ဒါလေးကိုယက်ရတယ် ခလေးရဲ့၊ (အာကာ့ခေါင်းလေးကိုဆွဲကပ်ပြီးနေရာချပေးလိုက်တယ်) ဒီအဖုလေးကို စုပ်ပေး အား ဟုတ်တယ် အဲ့လိုမျိုး အားစ် အာကာကလဲသူသင်ပေးသမျှလိုက်လုပ်တယ်၊ အကွဲကြောင်းကြီးကလဲလျှာနဲ့ယက်တာအောက်ကခရေညိုကြီးအထိပဲ။ သီတာသင်သာသင်ပေးရတယ် တခါမှအယက်မခံဖူးပေ၊ လက်တဖက်ကကောင်လေးခေါင်းကိုကိုင် နောက်တဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေရင်း ကောင်းကောင်းခံစားပစ်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်လေးကိုသင်ရင်း သူလိုချင်တာတွေကိုပါလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်၊ ကောင်လေးက ခရေညိုကြီးပါယက်တော့ သူ့မှာ တွန့်ခနဲပဲ။ သူဖ်ီလ်းပိုတက်လာတော့ အာကာ့ခေါင်းလေးကိုထိမ်းကိုင်ရင်း သူ့အဖုတ်အုံကြီးနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ကောင်လေးမျက်နှာရွှဲသွားတော့ သူပိုလို ချင်တာပီ။ ခုနက တချီပီးထားပေမဲ့ ကောင်လေးဟာကမကျသေးဘူး။
အား ကောင်းလိုက်တာ အာကာရယ် . . . ဟုတ်တယ် အဲ့လို . . . ရပီမောင်လေး ဒို့လိုချင်ပီ (ယက်နေတာကိုရပ်ပီး သူ့ပေါင်ကြားဝင်တာတယ်) ကျတော် . . လိုးရတော့မှာလားအင်း ဟုတ်တယ် လိုးရတော့မှာ မင်းလီးကြီးကိုလိုချင်ပီ မင်းလီးကိုဒို့ထဲထည့်လိုက်တော့ အား ဖြေးဖြေးမောင်လေး အင်း အပေါက် သေချာချိန်ပီး အားနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တာ ရုပ်တရပ်ဆိုတော့နာသွားတယ်၊ ကောင်လေးလဲ သူ့ဟာကြီးလို့ဆိုပီးကျေနပ်နေသည်။ ကောင်လေးအတွက်ပထမ ဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့ အငမ်းမရဖြစ်တော့သည်။ အထနှေးပေးမဲ့ စက်ကသွက်တယ်၊ ကောင်လေးနွားငတ်ရေကျဖြစ်လေ သူသဘောကျလေမဟုတ် လား။ အရှိန်အထိန်းပဲခပ်သွက်သွက်ဆောင့်တယ် ပထမအချီပီးထားလို့နဲနဲကြာတာ၊ နောက်အချီကျရင်တော့ပြောပြမှဖြစ်မယ်။ အာကာအတင်းဆောင့်လေ အစိကိုပွတ်မိတာများပီး သူကောင်းလာတယ် အရည်တွေလဲရွှဲနေပီ။ အားစ် . . . ကောင်းတယ် လိုးလိုး ကောင်းလားမောင်လေး ကောင်းတယ် အရမ်းပဲ ဟား . . . မနာတော့ဘူး မဟုတ်လား ဟင့်အင်း . . . ဒို့ကိုအားမနာနဲ့ဆောင့် အား ကောင်းတယ်ခလေးရယ် အင် ကောင်လေးမကြာခင်ပီးတော့မယ်ထင် တယ်၊ ဆောင့်ချက်တွေသွက်လာသည်။ သူလဲအမြန်လိုက်ပီးမှဖြစ်မယ် အာကာ့ကိုအောက်ကနေပြန်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ပီး ခါးကိုစကောဝိုင်းသလိုလုပ် ပေးလိုက်တော့ အဝင်အထွက်ပိုထိသလို နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ခံစားမှုဆန်းသစ်စေသည်။ ဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်သွားသောနို့အုံကြီးကိုဆွဲပြီး ဆောင့်သည်။
အား ကောင်းလိုက်တာအမသီတာရယ် ရီုး ထွက်တော့မယ် လိုးမောင်လေး လိုး ဒို့လဲကောင်းတယ် ပီးချင်ပီ အားစ် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူပီးသွား သည်၊ မသီတာ ပီးနေတုန်း အာကာ့ဖင့်ကိုကိုင်ပီး ကပ်ညှောင့်ပေးလိုက်တော့ အရမ်းကောင်းသွားတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ယောနီလမ်းကြောင်းထဲ အာကာ့လရည် တွေအားနဲ့ပန်းဝင်လာတော့တယ်။ အာကာပြန်သွားတော့ သီတာမှန်ထဲမှာကိုယ့်ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်းသဘောကျနေသည်။ အသက် ၃၆နှစ်ဆိုသော်လည်း ခုချိန်ထိယောင်္ကျားတွေကြိုက်ကြသေးသည် မဟုတ်လား။ ရွှေတောင်မှာ အသက်သုံးဆယ်ကျော်နေခဲ့တုန်းက သူ့ဘဝမှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်သာ အတွေ့အကြုံရှိဖူးတာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ကြိုက် အဲ့တစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျ အဲ့တစ်ယောက်ပဲအထိအတွေ့ရှိဖူးသည်။ ခုရန်ကုန်ရောက်မှသုံး နှစ်အတွင်း နှစ်ယောက်၊ ပွဲစားထဲမှာလဲ သူ့ကိုကြံစည်ချင်တဲ့သူ တွေရှိတယ် ဒါတောင်သူ ခပ်တည်တည် ခပ်တန်းတန်းနေတက်တဲ့သူမို့လို့။ သူနဲ့ဖြစ်တဲ့ ပထမ တစ်ယောက်က ဦးအောင်မိုး၊ သူအလုပ်လုပ်တဲ့ကုန်စုံဆိုင်သူဌေး မုဆိုးဖိုကြီး သူမငွေလိုလို့ သူ့အိမ်မှာပိုက်ဆံသွားဆွဲတုန်းက ဖြစ်ကြတာ၊ အဲ့တုန်းက သူ့လဲ စိတ်ပါနေတုန်း အခြေအနေတစ်ခုအရမို့၊ နောက်ပိုင်း နှစ်ခါထက်ဖြစ်ဖူးလဲ သူစိတ်သိပ်မလာ။ ခုတစ်ယောက်ကတော့ အသက် ၁၈လောက်ပဲရှိဦးမယ့်ကောင် လေး၊ ဒါကတော့ ဖြူဖြူနုနုကောင်လေးကိုသူချစ်လို့ မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တာ။ သီတာအတွေ့အကြုံနဲနဲလေးနဲ့ကလေးကိုဆရာလုပ်ခဲ့ရတယ်၊ သူမရဖူးတာ ခံစားကြည့်ချင်တာမှန်သမျှခိုင်းသည်၊ ကောင်လေးကလဲသူခိုင်းတာအကုန်လုပ်သည်။ ဒီပိုးဟပ်ဖြူလေးနဲ့ကျမှ သူကိုယ်တိုင်လဲအရမ်းထန်ပြီး တခါမှမပြော ဖူးတဲ့စကားကြမ်းကြမ်းတွေပြော၊ အရမ်းစိတ်ပါနေတာအံသြရသည်။ အာကာက နောက်တစ်ခါထပ်တောင်းလုပ်ပြီး မပြန်ခင်နောက်ထပ်လာခွင့်တောင်း သွားသည်။ သူကခေါ်တောင်ထားချင်တာ ခစ်စ်။ ဖောက်ပြန်မိပြီဆိုတဲ့အတွေးကတော့ လမ်းခုလပ်တွင်ရပ်သွားရသည်ပေါ့ သူနယ်မပြန်တာလဲ တစ်နှစ်ပြည့် တော့မယ်မဟုတ်လား။
နောက်တစ်နေ့ ဆိုင်ရောက်သွားတော့ စောနေသည် ဦးအောင်မိုးတစ်ယောက်တည်း၊ သူနှုတ်ဆက်ပီးဝင်သွားလိုက်တယ်၊ အတူလုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေး နီလာက စာမေးပွဲရှိလို့ခွင့်ယူထားသတဲ့၊ သူတစ်ယောက်တည်းအလုပ်တွေရှုပ်တော့တာပေါ့။ ခနနေတော့ တယောက်တည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေပြီလား သီတာ ရပါတယ် ဦးရဲ့ ဈေးဝယ်မှသိပ်များတာ ရော့ လက်ဖက်ရည်ဝယ်လာတယ် သောက်လိုက်ဦး ဟုတ်ဦး ကျေးဇူးနော် ဘယ်သူမှမရှိပါ သီတာရယ် ဖေကြီးလို့ခေါ်ပါအုံး သီတာအဲ့လိုမခေါ်တာကြာပြီနော် ဖေကြီးသတိရနေတယ်သီတာ ဒါကဦးအောင်မိုးရဲ့ဆိုက်ကို၊ သူစိတ်ကြွလာတဲ့အခါတိုင်း သူ့ကိုအဖေ ကြီးလို့ခေါ်ခိုင်းတယ် သီတာကိုလဲသူ့သမီးအကြီးမနဲ့တူလို့သူစိတ်ထပြီးလုပ်ချင်လာရပါသတဲ့ ကဲ ကိုယ့်သမီးကိုများ။ မနေ့ကမှ အာကာနဲ့လုပ်ခဲ့ကြပီးတာဆို တော့ စိတ်သိပ်မပါသော်လည်း ငွေတွင်းကြီးမို့အတင်းမငြင်းချင်ပါ။ အွင် . . . ဦးအောင်ကလဲစောစောစီးစီး မတွေ့ရတာကြာပီမဟုတ်လား သီတာရယ် (ပြောရင်းသူ့အနောက်မှာလာရပ်တယ်၊ သူ့ဟာကြီးက မမာတမာဖြစ်နေပီ) ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ် . . . ဖေကြီးကလဲ လူတွေတွေ့သွားဦးမယ် သူ့ဖင်ကြား ထဲနွေးနွေးကြီး လာထောက်တော့ ရင်တုန်ပီးဖေကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာမိတာသီတာ့အမှား၊ ဟိုကသူကြားချင်တာလဲကြားရရော အဆင့်ပိုတက်လာတယ်၊ သီ တာ့တင်ကြီးကို ထမီပေါ်ကနေပဲကိုင်လိုက်တာ ရင်တောင်တုန်သွားတယ်။ သူတို့ဆိုင်လေးက လူသွားလူလာသိပ်မများတဲ့ဒေါင့်နဲ့ ကောင်တာအကွယ်မှမို့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေမြင်မှာတော့မပူရ။
ဒါနဲ့ သမီးလေးသီတာအတွက်လက်ဆောင်၊ သီတာလေးအတွက်ဝယ်ထားတာ အနောက်ကနေ ဖင်ကိုထောက်ပီးရွှေဗူးလေးတခုလာပေးတယ်။ သူရုံးမရဘဲ ဖွင့်ကြည့်တော့လက်စွတ်ကလေး၊ သိပ်တန်ကြေးကြီးပုံမပေါ်ပေမဲ့ ရွှေဆိုတာမိန်းမကြိုက်လေ ဒါလေးတွေနဲ့ပဲသူ့ကိုချုပ်နေတာဖြစ်သည်။ ဟိုတခေါက်လဲ နားကပ်လေး။ ဒီည ၈နာရီလောက်အလုပ်သိမ်းပီး ထပ်တွေ့ရအောင်သီတာရယ် ဖေကြီးလွမ်းလှပီ ဖေကြီးကလဲ ဇွတ်ပဲ လူတွေတွေ့သွားဦးမယ် လက်ဆောင်ရတော့ပျော်နေသဖြင့် ညုပြောလေးနှင့် ဦးအောင်မိုးလီးကြီးကိုပုဆိုးပေါ်ကနေဖမ်းကိုင်လိုက်သေးသည်။ ခုနကမာနေသောအချောင်းကြီးက ချက်ချင်းတောင်တက်လာတယ်။ ဒီလူကြီးဘာဆေးတွေစားထားလဲမသိ သူ့ယောင်္ကျားနဲ့စာရင် နဲနဲတိုသလိုရှိပေမဲ့ စိတ်ထစရာလုံးပတ်တုတ်တုတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး နောက်ပြန်ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တယ်။ ဦးအောင်မိုးက လူရှင်းမရှင်းတချက်ကြည့်ပီး သီတာနို့ကြီးကိုအနောက်ကနေပင့်ကိုင်လိုက်တော့ လှန့်သွားရ သည်။ အိုး လူတွေမြင်ကုန်မယ် ဖယ် ခနလေးပါကွာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး ရသလောက်ညှစ်လိုက်သေးသည်၊ ဦးအောင်မိုးကြည့်ရတာဖြစ်နိုင်ရင်ခုချက်ချင်း ဆိုင်ပိတ်ပီး လိုးလိုက်ချင်ပုံရသည်၊ အနောက်ကထောက်ပီးညှောင့်တာကလဲထမီတောင်ပေါက်လောက်တယ်။ ခနတော့လူသွားလူလာများလာသဖြင့် လူခွါ လိုက်တယ်ပေမဲ့ အဖိုးကြီးရဲ့ငမ်းငမ်းတက်မျက်လုံးတွေက သီတာကိုစိတ်ကူးနဲ့လိုးနေပုံပဲ၊ သူ့နို့သီးခေါင်းတွေထောင်လာရပြန်သပေါ့။ တနေကုန်လူလစ်ရင် လစ်သလို ဖင်လာကိုင်လိုက်နို့လာနှိုက်လိုက်လက်ကမြင်းနေတာ တော်တော်ပျော်နေတယ်ထင်တယ်။
နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ကတည်းကအပြင်ထွက်သွားပီးတာ ညနေလေးနာရီခွဲလောက်မှပြန်လာပြီး “ ကဲ လူလဲသိပ်မလာတော့ဘူး သီတာလဲတစ်နေကုန်တ ယောက်ထဲပင်ပန်းနေပီ ပိတ်ကြရအောင်” ပုံမှန်လဲဒီအချိန်လူမကျတာသိသိကြီးနဲ့ကို၊ သီတာလဲနောက်ချင်လာတာနဲ့ ဟုတ်ပနော် သီတာလဲပင်ပန်းပီး အိပ် ချင်လာတာနဲ့အတော်ပဲ သီတာ အိပ်ချင်လို့လား အိမ်မပြန်နဲ့တော့ ဖေကြီးဆီမှာအိပ်သွားလေ သမီးကြီး အပေါ်ထပ်ကသူ့အခန်းထဲရောက်ရင် အိပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့များ ဟွန့် သမီးအိပ်ချင်ရင် ဖေကြီးဖက်သိပ်မှာပေါ့သမီးရယ် တဏှာခိုးတွေဝေနေတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပီး ဖင်ကိုတချက်ညှစ်ပီး တစ်ချက်နမ်း လိုက်သေးတယ်။ ဒီလူကြီးတော်တော်ဖြစ်နေတာပဲ။ တံခါးတွေဘာတွေပိတ်ပီးတာနဲ့ ဆိုင်ထဲကနေအပေါ်တက်တဲ့လှေကားဆီကိုလက်ဆွဲခေါ်သွားပြီး တက် သမီးကြီး ဟင် သီတာအိမ်ပြန် ရေချိုး ရှုး . . . အချိန်တွေမဖြုန်းပါနဲ့ကွာ အပေါ်ထပ်မှာရေချိုးခန်းရှိပါတယ် (တလှမ်းချင်တက်သွားတဲ့ သီတာ့တင် ဆိုင်တွေကို အားမလိုအားမရ ပုတ်လိုက်ပီး) ကျန်းမာရေးကောင်းလိုက်တဲ့သမီးကြီး ဖေကြီးနော် သူများဖင်တွေကို အခေါ်အဝေါ်တွေကိုက သမီးနဲ့ဖေကြီး ဆိုတော့သီတာလဲ တကယ့်သူ့သမီးလိုကလေးဆန်သွားရသည်ပေ့ါ။ အပေါ်ထပ်ရောက်တာနဲ့ သူ့ကိုဖက်နမ်းနေတဲ့အဖိုးကြီးကို ခနတားထားပီးရေဝင်ချိုးရ သည်။ တနေကုန်ပင်ပန်းထားတာဆိုတော့ ရေချိုးလိုက်မှလန်းသွားသည်။ ဟိုကြားဒီကြားတွေလဲမနံအောင်ဆပ်ပြာသေချာတိုက်။
သီတာရေဝင်ချိုးနေတုန်း ဦးအောင်မိုး သူဝယ်လာတဲ့ဆေးကို သေချာအောင်နောက်တလုံးထပ်သောက်လိုက်တယ်၊ မနက်ကတစ်လုံးသောက်ပီး အစွမ်းကို ကျေနပ်လောက်ပေမဲ့ ထပ်သောက်တော့ပိုစွမ်းတာပေါ့။ သီတာသူ့ဆိုင်မှာလုပ်တာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ၊ နယ်ကနေအလုပ်လာလုပ်တဲ့ ခလေးတစ်ယောက်အမေ ဖြစ်ပေမဲ့ သီတာ့ဒင်ကြီးကိုသူအရူးအမူးသဘောကျတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှအိပ်ထောင်ကျနေတဲ့ သူသမီးအကြီးမနဲ့ရုပ်ကလဲခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ သမီးပေါ် ကြံစည်မကောင်းတဲ့ဟာတွေ သီတာအပေါ်ငွေပေးကြံစည်လိုက်တော့တယ်။ အဲ့အချိန်ထမီရင်လျားနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ သီတာ့ကိုမြင်တော့ တ ဘတ်သွားပေးရင်း ရော့ တဘတ်၊ ဖေကြီး သမီးကြီးကအရမ်းလှတာပဲ အင် ဟုတ်လို့လား အသက်ကြီးနေပါပြီ ဖေကြီးရယ် ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဖေ ကြီးအတွက်တော့ ဒီသမီးကအလှဆုံးပဲ၊ ရွှတ် သွား သွား ဖေကြီးလဲရေသွားချိုး သူ့လည်တိုင်တွေလာနမ်းတဲ့ဦးအောင်မိုးကိုရေချိုးခန်းထဲတွန်းပို့လိုက် တယ်။ အောက်ကမာမာကြီးကလဲ ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့၊ ဒီအဖိုးကြီး နွားငတ်ရေကျဖြစ်ဦးမယ်လို့တွေးမိတော့ သူ့စိတ်တွေထလာရပီး နို့သီးခေါင်းလေးကထောင် လာတယ်၊ ဒီရက်ပိုင်း စိတ်တွေတော်တော်ထရပါလား။ လူတစ်ယောက်ရေချိုးပြီးရင်သူ့ကိုလာလိုးဖို့ကုတင်ပေါ်ကစောင့်နေရတာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ရင်လဲဖို ရသည်။ ဦးအောင်မိုးရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တဘတ်ပါမလာ၊ သူ့လီးကြီးက ရှေ့ကိုငေါငေါကြီးထွက်နေသည်။
ဟာ ဖေကြီး ညစ်ပတ် သီတာရှိတာသိရဲ့သားနဲ့ သမီးက ရှက်လို့လား ပြပါဦးရှက်နေတဲ့မျက်နှာလေး အွင်. . . ကုတင်ပေါ်ကိုဂမူးရှူးထိုးတက်လာပြီး လာ နမ်းတယ်၊ သူ့လက်တွေကလဲ သီတာထမီရင်လျားကိုဖြုတ်လိုက်တော့ ပေါ်လာတဲ့သီတာရင်အုံထွားထွားကြီးကိုစိုက်ကြည့်ပီး ထောင်နေတဲ့သပြေသီးရောင် နို့သီးခေါင်းတွေကိုဖမ်းစို့တော့တာပဲ၊ အောက်က ဖင်သားတွေကိုလဲဖျစ်ညှစ်နေသေးတာ၊ အာ . . .ာဖေကြီး ဖြေးဖြေး သီတာထွက်မပြေးပါဘူး လှလိုက် တာ သမီးကြီးရယ်၊ သမီးကြီးကိုဖေကြီးလုပ်ချင်နေတာကြာဘီ သိလား (သူ့မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြီးကြည့်ပြီးမေးနေတဲ့ လူကြီးကိုနောက်ချင်စိတ်အပြင် သူလဲစိတ်ပါလာသဖြင့်) ဘာလုပ်ချင်တာလဲ၊ လူကိုလိုးချင်နေတာမဟုတ်လား ဖေကြီး (သီတာ့စကားတွေကြောင့် ဦးအောင်မိုး စိတ်ဘရိတ်ပေါက်သွားပြီ၊ သီတာ့ပေါင်ကြားထဲဝင်လာပြီး) ဟုတ်တယ်သမီး၊ သမီးဖင်ကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပီးဖေကြီးလီးတောင်နေတာ သမီးကိုလိုးချင်နေတာ ပြောပြီး သူ့တုတ်တုတ် ကြီးကို သီတာ့အကွဲကြောင်းထဲအတင်းထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်၊ နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ပါနေသဖြင့်နာတာကိုမသိလိုက်၊ တဖြေးဖြေးဝင်သွားတဲ့လီးနဲ့ပြန် ထုတ်လိုက်ရင်ကပ်ပါလာတဲ့သီတာအတွင်းသားလေးတွေကိုကြည့်ပီး အရသာခံနေကြရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖြင့် ခနမြှင်းလိုးနေပီး အရည်လိုက်တာတော့ ဆိုင်ကယ်စီးပုံစံနဲ့ ဖေကြီးကြမ်းတော့တယ်။
နေ့စဉ်နီးပါးစိတ်ကူးနေရတဲ့ အကိတ်ကြီးသီတာ၊ လွယ်လွယ်ကပ်မရ သူတောင်ငွေပေးလိုက်ရွှေပေးလိုက်နဲ့မနည်းချူချုပ်လိုးနေရတဲ့ သီတာကြီး သူဆောင့် လိုက်တိုင်း မျက်နှာလေးရှုံမဲ့သွားပုံက သူသမီးကြီးနွယ်နီထွန်းနဲ့တူလွန်းသဖြင့် ဦးအောင်မိုးစိတ်ပိုကြွလာရတယ်။ အဖိုးကြီးဆေးတွေစားလာတာသေချာပါ တယ်၊ အရင်ကဆိုဒီလောက်မဆောင့်နိုင်၊ လီးလဲဒီလောက်မမာဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်စွပ်လဲရ ဆေးသောက်ပြီးလဲချတော့ သီတာကျေနပ်ရပါသည်။ ပေါင် တွေကိုအစွမ်းကုန်ကားမြှောက်ထားပေးပီး အဖုတ်အထဲကသူ့လီးကိုညှစ်ပေးလိုက် အောက်ကနေသူ့ကိုပြန်ဆောင့်ပေးလိုက်နဲ့ကျေးဇူးဆပ်လိုက်တယ်။ အာ . . . ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ်၊ ဖေကြီးလိုးတာကောင်းရဲ့လား အင်း ကောင်းတယ်ဖေကြီး အရင်ကထက်ပိုကောင်းတယ် အာ ရှီး . . . . သမီးးကို ကောင်းကောင်းလိုးချင်လို့ဖေကြီးဆေးစားထားတာ အား သမီးကြိုက်လား အင်း . . . အာ . . ကောင်းတယ်ဖေကြီး ကြိုက်တယ် ဆောင့် ဆောင့် အား ပီးချင် လာပြီ အား နို့သီးခေါင်းတွေကိုခြေရင်း တုန်ခါနေတဲ့သူ့နို့အုံနှစ်လုံးကိုဆွဲပီးဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်တော့ သူအရမ်းကောင်းပြီး ပီးသွားတယ်။ အဆောင့်မရပ် သေးတဲ့ ဦအောင်မိုးဖင်ပြောင်ကြီးကိုလက်သည်းတွေနဲ့ကုတ်ပီး ပီးပလိုက်တာ၊ ဦအောင်မိုးလဲခနငြိမ်ပီး သီတာပီးတာကိုခံစားနေရပေမဲ့ သူမပီးသေး။ သီတာ ငြိမ်သွားတော့ သီတာ့ကိုကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ လှလိုက်တဲ့ဖင်ကြီးတွေကွာ ဖျန်း ခနဲသူရိုက်လိုက်သေးသည်။ သူ့လီးထည့်မယ်လုပ်ပီးမှ သီတာကိုဒီတခါလုပ် ရင်ယက်ကြည့်မယ်ဆိုတာသတိရတယ်။
ကုန်းထားလို့အနောက်ကိုပြူးနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သူအာသာငမ်းငမ်းကြည့်ပီးတော့ အကွဲကြောင်းထဲ လျှာနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။ လီးဝင်လာမယ်ထင်ထား တဲ့သီတာလဲ ထွက်သက်ကိုနွေးခနဲခံစားလိုက်ရပြီး စိုစိုစွတ်စွတ်လျှာကြီးဝင်လာတော့ ရင်ထဲ အေးခနဲ၊ “ အာ့ . . စူး အိုး ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဖေကြီးရယ်” စကားပြန်မရတော့၊ သီတာကြိုက်မှန်းသိသွားတာမို့ ဦးအောင်မိုးယက်တာစိတ်ပါလာပြီး ပက်လက်အိပ်ပီးသူ့ခေါင်းကို သီတာ့ပေါင်အောက်ထိုးသွင်း ပြီး အသာကုန်ဂျာတော့တယ်။ တကယ်တော့ ဦးအောင်မိုးလဲအခုမှဂျာဖူးတာ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖူးတာနဲ့တက်သလောက်ယက်နေတာ သီတာကောင်းသွား တယ်။ သီတာကလဲ သူလိုချင်တဲ့နေရာကို အောက်ကအဖိုးကြီးလျှာနဲ့တည့်အောင် အပေါ်ကနေရွေ့ပေးတယ်။ အာစ် . . အွင် ဖေကြီး လိုးတော့ကွာ သမီးကို လိုးတော့ အင် ဖင်နှစ်လုံးကိုကိုင်ပီးအောက်ကနေအားရပါးရယက်စုပ်နေတော့ ချက်ချင်းရပ်မရဘူး၊ ခနနေမှအောက်ကပြန်ထွက်ပြီး နေရာယူလိုက်တော့ လီးက စိတ်တိုင်းကျမမာတော့သလိုဆိုတော့ သမီး ဖေကြီးကို ဟို ဟို စုတ်ခိုင်းချင်တာပြောမထွက်၊ သီတာလှည့်ကြည့်ပီးသဘောပေါက်သွားတယ်၊ ဘာမှမ ပြော နောက်လှည့်ပီး တခါတည်းဦးအောင်မိုးလီးကြီးကို ကုန်းစုပ်လိုက်သည်။ သီတာပါးစပ်ထဲသူ့လီးကြီးကိုစုပ်ပေးနေတာကိုကြည့်ပီး ပီးတောင်ပီးချင်သွား တယ်။ သူ့လီးကိုစုပ်ပေးနေတဲ့သီတာ့နှုတ်ခမ်းတွေရယ်၊ တွဲရရွဲကျနေလို့သူပင့်ကိုင်ထားရတဲ့ သီတာ့နို့အုံကြီးရယ် ပီးတော့ ကုန်းလျက်လှမ်းစုတ်ရတာမို့ ဖင် ထောင်သွားတဲ့သီတာ့အိုးကားကားကြီးရယ် မြင်သမျှဟာသူ့အတွက်စိတ်ကြွစရာတွေချည်း။
တော်ပီသမီး ဖေကြီးလိုးချင်ပီ အင်း ဟုတ်ပီ ခါးလေးခွက်ထား အေး အဲ့လို အား . . . ဖြေးဖြေးဖေကြီး အာ့စ် . . ဆေးအစွမ်းကြောင့်လားမသိ လီးကပိုပူပြီး ပိုပွလာသလိုပဲ၊ သီတာအဖုတ်နှခမ်းသားတွေကိုပွတ်တိုက်သွားသလိုမျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။ သီတာကဖင်ကိုဦးအောင်မိုးစိတ်ကြိုက်ထောင်ပေးထားရင်း သူ ကတော့မွှေ့ယာပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီးကိုခံစားတာ၊ အသံတောင်မထွက်နိုင်တော့။ ဦးအောင်မိုးလဲ သီတာ့ခါးတုတ်တုတ်လေးကိုကိုင်ပီးတော့ တဖောင်းဖောင်း ကို ဆောင့်သည်။ သူ့မိန်းမသေသာသွားတယ် ဒါမျိုးမလိုးဖူးလိုက်ရတာနာတယ်။ မိနစ်၂၀လောက်ကြာတော့ သူဆက်မထိန်းချင်တော့ ကောင်းလိုက်တာ သမီးလေးရယ် အား . . ဖတ် ဖတ် ဖတ် . . . အားစ် နွေးပြစ်နေတဲ့လရည်တွေသီတာသားအိမ်ခေါင်းထဲပန်းထည့်လိုက်တယ်။ ဦးအောင်မိုး သိပ်ကျေနပ်သွား တယ် သူ့ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးပီးခြင်းပဲ။ သီတာ့အထဲကညှစ်ပေးနေတာလေးကိုမျက်လုံးမှိတ်ငြိမ်ခံရင်းနဲ့ပဲ သီတာ့ဘေးမှာကပ်လဲပြီး ခဏအားပြန်ဖြည့် လိုက်သည်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ဦးအောင်မိုးပြန်နိုးလာပြီးသီတာကတော့ သူ့ဘေးမှာ အိပ်ပျော်အနားယူနေလေရဲ့။ သူ့ကိုအကောင်းဆုံးပေးဆပ်ခဲ့ တဲ့သီတာကိုလဲ သနားပြီး သိပ်ချစ်သွားတယ် နောက်ပြီး ကိုယ်တုံးလုံးဘေးတဆောင်းကြီးအိပ်ပျော်နေလေတော့ သူသိပ်သဘောကျနေတဲ့ သီတာဖင်ကြီးက သူ့ကိုလန်းဆန်းသွားစေတယ်လို့သူထင်သည်။ အချိန်ကြည့်တော့ ၇နာရီဆိုတော့ သိပ်နောက်မကျသေး သူနောက်တခေါက်ဆွဲလိုက်ချင်သေးသည်။
ဒီနေ့သီတာအိပ်ယာထနောက်ကျတယ်၊ မနေ့ကဦးအောင်မိုးနဲ့ အကဲလွန်ပြီး နောက်နှစ်ချီလောက်ဆော်ပြီးမှ ပြန်တာဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ တခါ တည်းထိုးအိပ်လိုက်တာ ခုမှနိုးတယ်။ ပင်ပန်းတာလဲပါတာပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ကမန်းကတန်းရေမိုးချိုးပြီးဆိုင်သွားလိုက်တော့ အဘိုးကြီးလဲခုမှထဆိုင်ဖွင့်နေတုန်း ထင်ပါရဲ့။ ဆောရီးနော် ဦး သီတာအိပ်ယာထနောက်ကျသွားတယ် ဟား ဟား ဦးလဲခုမှနိုးတာပါသီတာ၊ ဆိုင်ခင်းထားဦး ဦးမနက်စာသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ် ဟုတ်ကဲ့ အားရပါးရပြုံးပြသွားတဲ့ ဦးအောင်မိုးရဲ့အပြုံးကြီးကိုသူနဲနဲတောင်ရှက်သွားတယ်၊ နီလာလဲစာမေးပွဲဆိုတော့ တစ်ပတ်လောက်ကြာဦးမယ် ထင်သည်။ ဒီတပတ်လုံးဘယ်လိုပတ်ရှောင်ရမလဲဟုစဉ်းစားရင်း အင်း မနေ့ကလို လက်စွပ်လဲရ ဆေးလေးသောက်ပီးအချခံရရင်တော့လဲ မဆိုးပါဘူးဟု ခပ် ပြုံးပြုံးစဉ်းစားမိနေတုန်းမှာပင် မသီတာ ဘာတွေတစ်ယောက်တည်းပြုံးနေတာတုန်းဗျ ဟယ် လန့်လိုက်တာ ကိုညီရယ် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဘာလာဝယ် တာလဲ စူပါဆယ်ထုတ်ဗျို့ ပြီးတော့ မသီတာကိုတွေ့တာနဲ့တခါတည်းပြောရဦးမယ်
ကျနော့်အဒေါ်က အိမ်လူငှားတင်ချင်လို့တဲ့ အဲ့ဒါ မသီတာဆီမှ ပြောထား တဲ့လူလေးဘာလေးမရှိဘူးလား အင်း….ခန ကျမစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ဒါနဲ့ အခန်းကဘယ်မှာလဲ စကားလဲပြောရင်း ကော်ဖီထုတ်လေးတွေလှမ်းဖြုတ်နေ တဲ့ မသီတာဖင်တုန်းကြီးတွေကိုကြည့်ရင်း ကိုညီဇတွေးတွေမြိုချနေမိသည် အင်း ဒီဆိုင်လာတိုင်း ဒီလိုပဲ ကန်သာယာနားမှာ မသီတာလိုက်ကြည့်မလား လိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျမတစ်ပတ်လောက်အားမှာမဟုတ်ဘူး အင်း . . . . . မသီတာအလုပ်ဘယ်အချိန်ပြီးလဲ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ဆိုရင်ရော ဆိုင်ပိတ် ချိန်ကတော့ ၈နာရီ ၉နာရီလောက်ပေါ့ သိပ်မသေချာဘူး ဒီလိုလုပ် သော့ကကိုညီ့ဆီမှာဆိုရင် ကျမဆိုင်ပိတ်ရင် ကိုညီ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်လေ ဘယ်လိုလဲ အင်း . . . မဆိုးပါဘူး ဒီညလား မသေချာဘူးနော် ကိုညီ့ဖုန်းနံပါတ်ရေးသွားလိုက် အိုကေ အိုကေ ခနနေ ဦးအောင်မိုးပြန်ရောက်လာတော့ ဈေးဝယ်ဖို့ စာရင်းလုပ်ဘာညာနဲ့ အလုပ်နဲနဲရှုပ်သွားပြီး ညနေစောင်း အလုပ်တွေပါးသွားတော့မှ အအေးနှစ်လုံးလှမ်းမှာပြီးအအေးသောက်ရင်း ပင်ပန်းသွားလားသီတာ လုပ်နေကြအလုပ်တွေပဲဟာ အရမ်းမပင်ပန်းပါဘူး အခုမေးတာမဟုတ်ဘူး ညကအတော်ပြိန်းသွားလားမေးတာ၊ ဖေကြီးတောင် ဖလက်ပြသွား တယ် ဟီး အဲ့တော့မှ သီတာမျက်စောင်းလေးထိုးပြီး သွားပါ ခုမှ ညကတော့သရဲစီးနေသလိုဘဲ ဆေးကအစွမ်းနော် ဟွန့် ဟဲဟဲ ဆောရီးပါသီတာရယ် ဦး အရမ်းကြမ်းသလိုဖြစ်သွားရင်၊ သီတာ့အိုးကြီးမြင်ရင် မနေနိုင်လို့ပါ လက်ကလဲ သီတာ့ဖင်ကြီးကိုလှမ်းညှစ်ရင်း အသားယူလိုက်သေးသည်။ မနေ့က လောက်ထထကြွကြွှမရှိသော်လည်း လူလစ်တာနဲ့လက်နဲ့တော့အသားယူချင်သေးသည်။
အိုး ဦးကလဲ ဒီဖင်ပဲလိုက်ရန်ရှာနေ သူဖာသာနေတာကို၊ ဒီနေ့လဲဆေးစားလာပြန်ပီလား ဒီနေ့တော့ ဦးပင်ပန်းနေလို့ဆေးမစားထားဘူး အနားယူ အားဖြည့် လိုက်ဦးမယ်။ ဘာလဲ သီတာက ဆေးစားစေချင်ပြီလား ဟဲ ဟဲ အာကာ့ကြောင့်စိတ်ထပြီး သောင်းကျန်းမိတာကို သူ့ကြောင့်ထင်ပြီး မာန်တက်နေသည်။ အဖိုးကြီးမှာဆန္ဒရှိသော်လည်း ခန္ဓာကမလိုက်တော့ အမလေး တော်ပါ ဒီညစောစောအိပ်ချင်တယ် ဒါဆို မနက်ဖြန်ညမှပေါ့ သီတာလေးရယ် . . . ကဲ ဒီနေ့ ဆိုင်စောစောပိတ်ပြီး သီတာလဲပြန်နားတော့ ရွတ် သွားခါနီး အနောက်ကနေသူ့လည်ပင်းလေးနမ်းရင်း နို့လေးလဲလှမ်းဆွဲသွားသေးသည်။ ဈေးလာဝယ် သော တခြားပွဲစားတွေတွေ့မှ ကိုညီပြောခဲ့တာသတိရတယ်။ အိမ်ငှားဖို့ပြောထားတဲ့လူတွေပြန်စဉ်းစားရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်ညနေတော့ အိမ်လိုက်ကြည့်ထားရ မည်။ ကိုညီဆိုမှ သူ့အကြောင်းခေါင်းထဲရောက်လာသည်။
ကိုညီက သဘောင်္သား၊ ကလေးတယောက်အဖေ၊ လူဖြောင့်၊ သူပြန်လာစတုံးက သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်အတွက် အိမ်ငှားပေးဖြစ်ရင်း ခင်ကြတာ ဖြစ်သည်။ ဈေးလာဝယ်ရင် သူ့အကြည့်စူးစူးတွေခံရသော်လည်း ရည်ရည်မွန်မွန်စကားပြောတက်သူဖြစ်ပြီး သူနှင့်ဆက်ဆံရတာအဆင်ပြေသည်။ နဲနဲကြာ တော့ဝယ်သူပါးသွားပြီး ဆိုင်စောစောသိမ်းကာ ကိုညီ့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး ကားဂိတ်မှာချိန်းလိုက်သည်။ ညနေ၆ခွဲလောက်ရှိသဖြင့် ကားကအရမ်းမကျပ် သော်လည်းထုံးစံအတိုင်းလူအပြည့်၊ ကိုညီ ကပထမတော့သူ့ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားဖို့ပင်၊ ဒီနေ့မှသူ့မိန်းမက သူ့ဘိုးတော်အိမ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီးဆိုင်ကယ်ယူ သွားသဖြင့် ဘက်စ်ကားနဲ့သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုညီအနေနဲ့မသီတာဖင်ကြီးကိုသဘောကျနေပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိပါ။ ပထမဘေးချင်းယှဉ် လျက်ဖြစ်သော်လည်း လူများလာတော့ ဒေါ်သီတာ ကိုညီ့ရင်ခွင်ထဲဝင်ရပြီ၊ အောက်ကဖင်ကြီးကိုလဲအလှူပေးရပြီ။ မသီတာက နေ့လည်ကအဖိုးကြီး လက်ဆော့ထားသောအရှိန်တွေနဲ့စိတ်နဲနဲထနေပြီး တစိမ်းလည်းမဟုတ်တာမို့ ပုဆိုးအောက်ကတဖြည်းဖြည်းထကြွလာသာ အချောင်းကြီးကို မသိချင် ယောင်ဆောင်ထားနိုင်သော်လည်း ကိုညီကတော့အားနာနေရသည်။
လူနဲနဲချောင်လို့အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သော်လည်း လူပြန်တိုးရွေ့တော့ နေရာပြောင်းပြီးထောက်သလိုတောင်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်ပါလား။ တချက်တချက် ဖင်ကြားထဲသူ့အမြှောင်းလိုက်ကြီးဝင်မွှေသလိုဖြစ်သွားတော့ အားနာပြီး ရလား မသီတာ၊ လူအရမ်းတိုးတာနဲ့ ဒီအတိုင်းက အဆင်ပြေတယ်၊ သူအဲ့လို အနားနားတိုးတိုးလေးပြောလိုက်မှ လည်ဂုတ်နားသူ့ထွက်သက်နဲ့တိုးတော့ သီတာ့မှာ ရွစိရွစိဖြစ်ရသည်ပေါ့၊ အောက်ကထောက်ထားတဲ့အချောင်းကလဲ ပေါ့ သေးသေးမှမဟုတ်တာ၊ ဒါပေမဲ့ သူအနေခက်မှစိုးလို့ ရတယ် ကိုညီ အေးဆေးပါ သူငုံပြီးကပ်ပြောတဲ့ဘက်ကို မသီတာကလှည့်ပြီးမော့ပြောတာဆိုတော့ ကိုညီ ဒိန်း ခနဲသွေးတိုးသွားရသည်။ စူးစူးဝါးဝါးစိုက်ကြည့်ပြီး အောက်ချထားတဲ့လက်တဖက်ကလဲ ရှေ့ကသီတာ့ခါးကိုမသိမသာလေးဖက်လိုက်မိတယ်။ လူချင်းကလဲထပ် မျက်နှာနှစ်ခုကလဲနီးနီးကပ်ကပ်ဆိုတော့လူက ဖက်မနမ်းမိအောင်ထိန်းထားပေမဲ့ သီတာဖင်ကြားထဲဝင်နေတဲ့သူ့ညီလေးကတော့ အောက် သွေးတဒုတ်ဒုတ်တိုးနေတော့တာပဲ။ မသီတာကလဲ ကိုညီ့ထွက်သက်ထိမိတဲ့ လည်ဂုတ်နားကနေ မီးညှောင့်ရိုးနားအထိ ကြက်သီးတွေထပြီး ဖင်တောင်နဲနဲ ကောက်ပေးမိသလို အားနာနေတဲ့ကိုညီကလဲ သူ့လီးကိုလက်နဲ့အုပ်ဖို့လက်ကိုနေရာရွေ့ပေမဲ့ ကြားခံနေတဲ့ မသီတာဖင်ကြီးနဲ့ထိမိတဲ့အခါမတော့ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရဘဲ လုံးကျစ်ထွားအိနေတဲ့ဖင်သားကြီးကိုအုပ်ကိုင်ပြီးအားမလိုအားမရ ဖြစ်ညှစ်လိုက်မိတော့တယ်။
ကန်သာယာပါလား ရုတ်တရက် စပယ်ယာအော်သံကြောင့် နှစ်ယောက်သားပြန်သတိထိန်းနိုင်လိုက်ပြီးမှတ်တိုင်မှာဆင်းခဲ့ကြသည်။ စကားမဆိုမိဘဲ လျှောက်လာရင်း လမ်းချိုးလေးအဝင်အမှောင်ရိပ်ရောက်မှ ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ် မသီတာ၊ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး (သူတောင်းပန်လိုက်မှ နဲနဲ ရှက်သွားသည်) အား ဘာကိုလဲကိုညီ သီတာနားလည်ပါတယ် ကျနော်တမင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဟို ဟို စိတ်မထိန်းနိုင်လိုက်လို့ပါ ကျနော့်အပြစ်ပါ သူများတွေထောက်မှာစိုးလို့ ကာထားပေးတာမှ ကျနော်က ကိုင်လိုက်မိတဲ့အထိ အိုး ရပါတယ်ဆိုမှ ဒီမှာကားစီးရင်ဒီလိုပဲသည်းခံရတာပဲ ခု တစိမ်းလဲ မဟုတ်တော့… အွတ် ရုတ်တရက် မသီတာနှုတ်ခမ်းကို ကိုညီဖမ်းစုတ်လိုက်တယ်။ မသီတာမလှပါ၊ ခုနကရင်ခုန်တာတွေနဲ့ ခုလိုမီးမှောင်မှောင်လမ်းကြားထဲ မှာ ရှက်နေတဲ့သီတာ့မျက်နှာကို ကိုညီအရမ်းဖီလ်းဖြစ်သွားလို့နမ်းလိုက်တာ။ ခဏလေးပဲလမ်းကြားထဲက ခလေးနှစ်ကောင်ပြေးထွက်လာလို့ အမြန်ရပ် လိုက်ပြီး အိမ်ဆီလမ်းဆက်လျှောက်လာရသည်။ ဟို ဟို ဆောရီးမသီတာ၊ ကျနော်အခွင့်အရေးယူတက်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး ခု မသီတာနဲ့တွေ့မှ စိတ်တွေအရမ်းဖောက်ပြန်နေလို့ (တောင်းပန်နေသောကိုညီ့ကိုရီချင်လာသည်) တော်သေးတာပေါ့ အခွင့်အရေးမယူတက်လို့၊ ကားထဲမှာလဲဖင်ကိုင်တယ် ခုလဲဖက်နမ်းတယ် နော် တုံ့ပြန်တဲ့အသံထဲမှာဒေါသသံမပါလို့ ကိုညီစိတ်အေးရသည်။ မဟုတ်လို့ရပ်ကွက်ရုံးတိုင်လျှင်နာမည်ပျက်မည်။
ဆောရီးပါ မသီတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကျနော်သဘောင်္ပေါ်မှစိတ်ထိန်းနိုင်ခဲ့သလောက်မသီတာနဲ့တွေ့မှ အမလေးကျမကို တရားခံမရှာပါနဲ့နော် ကျမလဲ တစိမ် ယောကျာင်္းတွေနဲ့ တရုံးရုံးမဟုတ်ပါဘူး ရှင်အဲ့လိုစိတ်မထိန်းနိုင်ရင် ကျမရှင့်အိမ်ထဲဝင်ရမှာတောင်ကြောက်လာပြီ… ခစ် နှစ်ယောက်လုံးအတွေးထဲ အိမ်ထဲ ဝင်ရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်လာတယ်၊ ကိုညီ အောက်သွေးပြန်တိုးလာသလို သီတာလဲ ကားပေါ်ကခံစားချက်မျိုးပြန်ဖြစ်ရသည်။ အိမ်ထဲရောက်လို့ ကိုညီစ လာရင် သူဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမှန်းဝေခွဲလို့မရသေး မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ ကျနော်ကတိပေးပါတယ် ကိုက်မစားပါဘူး ဟား ဟား ကိုက်စားမှာကိုမကြောက်ဘူး ခုနကလို စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုပီး ဖက်နမ်းမှကြောက်တာ ခစ်ခစ် အာ ဟဲ ဟဲ ရှေ့ကအိမ်ပဲ ခြံတံခါးဖွင့် မီးတွေဘာတွေဖွင့်ပြီးအိမ်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်သည်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ အိမ်သာတစ်၊ ဧည့်ခန်းမှာလဲ ဆက်တီတွေနဲ့ တီဗီဘာညာတော့မရှိ ဘီဒိုတွေ ကုတင်တွေတော့ရှိသည်။ အခန်းတွေလိုက်ကြည့်နေသော မ သီတာကိုနောက်ကကြည့်ပြီး ခုနကပြောထားတာတွေနဲ့ စိတ်ထရသည်။
လင်းလင်းချင်းချင်းဆိုတော့ လူကဘာမှမလုပ်ရဲပေပုဆိုးထဲက ဆန္ဒပြနေသော ညီလေးကိုမထိန်းနေတော့ ပစ္စည်းတွေလဲပါတော့ တလနှစ်သိန်းကတော့တန် တယ် ကိုညီ (ဖင်ကြုံစီးနေတုန်း စကားလှမ်းပြောတော့လှန့်သွားသည်) ဟုတ် အဒေါ်တို့က ဘီးလင်းမှာပဲနေကြတော့မှာမို့ လူငှားတင်တာလေ။ ကြာလေ ကောင်းလေပဲ အခန်းထဲမှာကုတင်တွေမွေ့ယာတွေအဆင်သင့်ပဲ အဲ ပြောရင်းဆိုရင်ကုတင်နားရောက်သွားကြတာမို့ နှစ်ယောက်သားရင်နဲနဲဖိုသွားသည်။ ကို ညီက လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုသောအတွေးနဲ့ မသီတာကတော့ သူများလာနမ်းတော့မလားဆိုပြီးရင်ဖိုရသည်။ မွှေ့ယာကိုစမ်းကြည့်ရင်း အနောက် ကငေးနေသည့် သူကိုမျက်လုံးစောင် ကြည့်တော့သူလဲကိုယ့်လို ဂွကြားမှာဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေတာမြင်ရသည်။ ထန်နေတာကိုပင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သောကို ညီ့ကိုအမှတ်ပေးမိသည်။ သူက လိုချင်နေလို့သူဘက်ကဆွဲဆောင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လဲထိန်းသိမ်းရမည်။ ထိုစဉ် ကုတင်ခေါင်းရင်းကဘီဒိုတစ်ခုကိုဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ အိုး ပိုဟတ်တွေ ဟုတ်ကဲ့ စာဖတ်သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကိုညီ့ကိုလှည့်ဖက်လိုက်မိသည်ပေါ့။ ချက်ချင်းပြန်ခွာသော်လည်းမ ရတော့ချေ။ ကိုညီကအားကြီးနဲ့ဖက်ထားတာ သီတာ့စနေနှစ်ခိုင်တောင် အိထွက်နေရပြီး စူထွက်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင် ကျင်နေရသည်။ သူ့ နှာခေါင်းကလဲ သီတာနားရွက်နားကပ်နေတာဆိုတော့ သီတာဟိုနေရာမှာ ယားကျိကျိနဲ့ အရည်တွေစိမ့်ထွက်နေပြီ။
အွင် ရပြီလေ ခွင့်လွှတ်တော့ သီတာရယ် ဟင်! မော့လာသောသီတာ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်နမ်းရင်း လက်တွေကလဲ သူသိပ်သဘောကျတဲ့ သီတာဖင်ကြီးပေါ် ပွတ်သပ်စုတ်နယ်ရင်း လက်နက်ကြီးကလဲချက်အောက်ကိုထိုးချိန်နေတော့ သီတာလဲ သူ့ကျောပြင်ကြီးကို ပြန်ပွတ်သတ်ပေးမိတော့သည်။ သီတာ့ဖက် ကမီးစိမ်းပြလာတော့ ကိုညီ ပျော်သွားပြီး ကုတင်ပေါ်အသာလေးလှဲချ သီတာ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုမက်မက်မောမောစုပ်နမ်းရင်း သီတာ့နို့တွေကို စုပ်နယ်သည်။ အိုး ကိုညီ မကောင်းဘူးထင်တယ်နော် အွတ် အင်း.. အင်္ကျီတွေကြေကုန်မယ်နော် ကိုညီဆီကစကားပြန်မရ၊ ပြစ်မှတ်ဆီဒါရိုက်သွားနေသည်။ အင်္ကျီနဲ့ ဘာရာလေးကိုလှန်တင်ပြီး သီတာရဲ့ မာတောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့လိုက်တယ်။ တနေကုန်အလုပ်လုပ်ထားလို့ ချွေးနံကိုယ်နံလေးကိုက သူ့စိတ် တွေကိုပိုထန်စေသည်။ အိမ်ထောင်သည် သဘောင်္သားကိုညီက မြန်တယ်၊ မီးဆိုတာ ပူတုန်းထုရမှန်း သိသူမို့ သီတာ့ထမီနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကို အမြန်ဆွဲ ချွတ်ရင်း ကတင်စောင်းမှာနေရာချလိုက်တယ်။ မသီတာမှ ဘာမှပြောချိန်မရလိုက် သူ့အဖုတ်ကို ကုန်းယက်တော့တာပဲ။
အိုး .. ငရဲတွေကြီးဦးမယ် .. အို့ ဟို့ ပြောသာပြောရတာပါ အာကာ့လိုမနူးမနပ်မဟုတ်၊ အဖိုးကြီးလိုလဲဂမူးရှူးထိုးမဟုတ်။ ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ သဘောင်္သား လျှာဖျားမှာ မသီတာလှိုင်းစီးနေရသလိုဖြစ်မိသည်။ တော်သေးတာပေါ့ ဆိုင်ကပြန်ခါနီး ဆေးလာခဲ့မိလို့။ ကိုညီ့ပါးစပ်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကွာသွားမှာဆိုးသလို မျိုး ဆံပင်တွေဆွဲပြီး ခါးကော့ကာစဖုတ်နဲ့ပွတ်ပေးနေသည်။ အား..စ် ကိုညီကွာ အင်းးး အမွှေးထူထူ၊ နှုတ်ခမ်းသားညိုညိုနဲ့မသီတာစောက်ဖုတ်ကြီးက မ လိုးခင်ယက်တာနဲ့တင် စီး..နေလို့ ကိုညီအရမ်းယက်လို့ကောင်းသွားသည်။ ကစ်ဆင်ဆွဲသလိုနှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေဆွဲစုပ်လိုက်၊ စိကပ်နေတဲ့အတွင်းသား တွေထဲ လျှာနဲ့ထိုးလိုးလိုက်ရင်း အကွဲကြောင်းထိပ်က စောက်စိလေးကို သွားနဲ့ကျိတ်ပေးလိုက်တော့ မသီတာ တွန့်လိန်ပြီး တချီပီးသွားရသည်။ ပီးနေချိန်မှာ ကို သူ့ဖင်ကြီးကိုပင့်ကိုင်ထားရင်း ဆီးခုံစောက်မွှေးတွေကြားလိုက်ယက်နေတဲ့ကိုညီ့ကို အသဲစွဲဖြစ်ရသည်။ ပီးသွားလို့ရွစိရွစိဖြစ်နေသောအတွင်းသားလေး တွေကို ယက်လို့မဝဖြစ်နေသော်လည်း သူတို့မှာအချိန်သိပ်မရကြောင်းသိသဖြင့် အစာပိတ်အနေနဲ့ခရေညိုကြီးပါယက်ပေးပြီးမက်တပ်ထရပ်သည်။ တွင်း အောင်းချင်လွန်းလို့တဇတ်ဇတ်တုန်နေသော သူ့လီးဒစ်ကြီးနဲ့နီရဲနေတဲ့သီတာ့ထိတ်ဖူးလေးကိုနှစ်ချက်လောက်အပေါ်အောက်ဆွဲပွတ်ပြီး စီးကပ်နေတဲ့စောက် ခေါင်းထဲနစ်ချလိုက်တယ်။
အာ အ .. ကိုညီ…. အိုး ရှီး.. သီတာရယ် တရစ်ချင်းလိုးဝင်သွားတဲ့လီးကြီးအဆုံးရောက်တာနဲ့ ထင်ထားတာထက်အဆမတန်ပိုကောင်းနေလို့ ကျေနပ်သံကြီး နဲ့ကိုညီငြီးမိရင်း ဟထားတဲ့သီတာ့နှုတ်ခမ်းကိုအတင်းနမ်းပြီး တချက်ချင်းဆော့လိုးတော့တယ်။ သီတာကလဲ အောက်ကပြန်ကော့ပေးမိတာပေါ့ ခုနကမှပီး နေတာကိုခံစားနေတုန်း စောက်ခေါင်းထဲထိုးခွဲဝင်လာတဲ့ကိုညီ့လီးကိုလဲ အပြည့်ခံစားချင်သည်မို့လား။ သူုဘဝမှာ ခုမှတကယ်လိုးတယ်ဆိုတဲ့အရသာကို အပြည့်အဝခံစားရတယ်လို့ထင်မိသည်။ ကိုညီကလဲစီးရွှဲပြီး ပျားရည်သုတ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလိုးရတာမို့စောင့်ချက်တိုင်တန်ဖိုးထား ဆောင့်သည်။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီးတော့ ကိုညီခနနားတဲ့အနေနဲ့ မသီတာကိုပုံစံပြောင်းပေးတယ်၊ ခုနကသူ့အပေါ်ထပ်ရက်ဖက်ထား ရာက ထပြီး မတ်တပ်ရပ်တော့ကျွတ်သွားတဲ့လီးကြီးကို သီတာနှမြောသလိုခံစားလိုက်ရသေးသည်။ ကုတင်အောက်မတ်တက်ရပ်ပီးတာနဲ့ ပက်လက်လှန် ထားတဲ့ ဘယ်ခြေထောက်ကိုဆွဲမပြီး ညာခြေထောက်ပေါ်ထပ်ကာ လူကိုပါဆွဲလှည့်ပေးလိုက်တော့ အို ကုတင်စောင်းမှာဘေးစောင်းအိပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ ဒီပုံစံတခါမှမကြုံဖူးတဲ့သီတာက ကိုညီလုပ်သမျှကိုသာ ငေးကြည့်အလိုက်သင့်နေပေးရုံ။ ဘေးစောင်းဖြစ်သွားတော့ နဂိုတည်းကဂစ်တောင့်တဲ့သီတာဟာ ရောမခေါတ်ကပန်းချီကားအလားပဲ။
အောက်ပိုင်းကိုတစောင်းထားပေမဲ့အပေါ်ပိုင်းကို ပက်လက်ဆွဲလှန်လိုက်တော့ သီတာ့နိုနို့နှစ်လုံးပိုဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတယ်လေ။ ကောက်ချိတ်နေတဲ့သီတာ့ ကိုကြည့်ပြီးကိုညီသိပ်သဘောကျသွားပြီး လှလိုက်တာသီတာရယ် အို့ ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့သီတာ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုတ်နမ်းရင်း လည်ပင်းတွေကတဆင့် ကော့ချွန်နေတဲ့သီတာ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေပါစုပ်နမ်းတော့တယ်။ အောက်ကတရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့လီးကြီးကိုလဲအအားမထား၊ အသင့်အနေအရကော့ပေး ထားလို့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားက အာနေတဲ့သီတာ့စောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေကြား ပွတ်သပ်ထိုးစွရင်း ဒစ်ကိုသွင်းပြီးနောက် ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆံ့လီးကြီးတစ် ချောင်းလုံး အတင်းထဲခွဲဝင်လာတော့တာပဲ။ ပေါင်နှစ်လုံးထပ်ထားတော့နဂိုတည်းကစေးနေတဲ့ စောကဖုတ်လေးကပိုသေးသွားတာပေါ့။ စောက်ခေါင်းတ လျှောက်ထိုးစွရင်း နှုတ်ခမ်းသားတွေပါအရသာရှိပြီး နောက်ဆုံး သားအိမ်ဝအထိ ထုတ်ထုတ်ထိတော့တာပဲလေ။ ဟွာ…း အအ အာ… ရှီး …..ကိုညီရယ် အင်းးးးးး ဒုတ်ခနဲ သားအိမ်ထောက်သွားတာကိုညီသိတာနဲ့ မျက်တောင်လေးစဉ်း နှခမ်းလေးကိုက်ရင်း ညီးနေတဲ့သီတာ့နို့ကြီးကို ဆွဲညှစ်ရင်းဆောင့်တော့ တာပဲ။ နာသွားလား သီတာ အဆင်ပြေရဲ့လား အင်း… ဘာတွေမေးနေတာလဲကိုညီရယ် သိပ်လုပ်တက်တာပဲ အဲ့လိုဆောင့်စမ်းပါ အူး ရှီး…… သီတာအထဲ ညှစ်ပေးတာအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ
သီတာ့ကိုစွဲသွားဘီကွာ အင်း … ထိတယ်ကိုညီရယ် ကုတင်အောက်ကနေမတ်တက်ရပ်ရင်း ဖူးကောက်ထွက်နေတဲ့သီတာ့ကို ဆယ်မိနစ်လောက်ခါးအားနဲ့ လွှဲဆောင့်လိုးလိုက် သီတာ့အဖုတ်ညှစ်အားလေးကိုခံစားရင်းမြှင်းလိုးလိုက်နဲ့ ကြွရွလှုပ်ရမ်းနေတဲ့သီတာ့နို့နှစ်လုံးကိုပါကိုင်ညှစ်နေပြီး ချွေးဒီးဒီးကျတဲ့အထိ စိတ်တိုင်းကျလိုးဆောင့်နေတယ်။ သူ့ဘဝလိုးဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းလို့ပင်ဆိုချင်သေးသည်။ မသီတာအတွက်လဲ ပုံစံသစ်မို့အဆန်းဖြစ်သလို သူ့လီးကြီး ကစောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုလိုးခွဲထိုးဝင်ရုံသာမက အထဲကအူကလီစာတွေထိလာရောက်ဆော့ကစားနေလိုပင်။ သူ့ကိုထိထိမိမိအလိုးကောင်းတဲ့ကိုညီ့ကို တောင်ချစ်လာသလိုပင်၊ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးချွေးတလုံးလုံးနဲ့လိုးနေတဲ့ကိုညီလက်တွေကို သူ့နို့တွေပေါ်ကနေဆွဲယူဆုတ်ကိုင်ရင်းနဲနဲကြာတော့ ဟင် အ အ သီတာထပ်လာနေဘီ ပီးချင်ပြန်ပြီကိုညီရယ် အင်း…. သူမမောတဲ့အတိုင်းဘဲ အာ သီတာအလှကြီးကိုချစ်နေရတာမမောဘူး သီတာ ဒီဖင်ကြီးကို စိတ်ကူး ယဉ်ရတာကြာနေဘီ ဟူး ဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ် မျက်လုံးလေးစဉ်းနှုတ်ခမ်းလေးဖူးပြီးပြောလာတဲ့သီတာကိုပြန်ဖြေရင်း ပိုထန်လာလို့ခုနကထက်ပိုဆောင့် တယ်။ ပီးချင်သလိုဖြစ်လာတဲ့သီတာလဲ သူဆောင့်တဲ့အတိုင်း ပြန်ခါးလေးနွဲ့ပြီးပြန်ဆောင့်ပေးရတာပေါ့။ သီတာ့ခပ်ဟဟနှုတ်ခမ်းလေးကိုလက်တွေနဲ့စမ်း တော့ စောက်ရမ်းဟော့နေတဲ့သီတာကနှုတ်ခမ်းနားရောက်လာတဲ့ကိုညီ့လက်ညိုးကြီးကိုဖမ်းစုပ်လိုက်တယ်။
ကြံဖူးကြတယ်မဟုတ်လား၊ အောက်ကလီးကလဲသူ့စောက်ပက်ကိုလိုးနေ၊ သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့လျှာကလဲ ကိုယ့်လီးကိုစုတ်ပေးနေတဲ့ပုံမျိုး လီးနှစ်ချောင်းရှိသလိုကို ခံစားလိုက်ရပြီး လက်ညိုးတချောင်းထဲအားမရချင်တော့၊ လက်ခလယ်ပါထည့်လိုက်တော့ သီတာကလဲစိတ်လိုလက်ရ သူ့လက်ချောင်းတွေကြားကိုလျှာနဲ့ ယက်လိုက် လက်ချောင်းတွေကိုလဲ လီးစုတ်သလို စုတ်ပေးရှာတယ်။ ကိုညီလဲအထန်ကြီးထန်ပြီး ခြေတဖက်ကိုကတင်ပေါ်ထောက်ပြီး တဖုန်းဖုန်းမြည် အောင်ဆောင့်တော့တာပေါ့ ချစ်လိုက်တာသီတာရယ် သိပ်လိုးလို့ကောင်းတာပဲ ရှီး . . . အား … ဟုတ်တယ် ကောင်းတယ်ကို ဆောင့်ကိုညီ သီတာ့ကိုမညှာနဲ့ အား အာ ပီးချင်လာပြန်ပြီကွာ အရမ်းထိတာပဲ အင် ပီးပီ အား…… ကောင်းလိုက်တာကွ အူးဟူးဟူး … မရတော့ဘူး ထွက်ပီ … ဟွင် ဟင်း အ အ သူ့လီး နွေးခနဲဖစ်ပီးသီတာပီးသွားမှန်းသိတော့ ဆောင့်နေတဲ့အရှိန်ကိုနဲနဲလျော့လိုက်ပြီး သီတာ့အဖုတ်ညစ်အားလေးတွေကိုခံစားရင်း တစ်ချက်ချင်းလိုးနေပြန်လိုး နေလိုက်တယ် သူလဲသုတ်ထိန်းမှဖြစ်မယ်။ စောက်ဖုတ်နှခမ်းသားတွေကို ညှစ်ညှစ်ပီး အမောပြေသွားတော့ သူ့ကိုမှိန်းလိုးနေလို့ ဒီအတိုင်းဆိုကြာမယ်မှန်း သီတာသတိရလိုက်တယ်၊ သူ့ကိုကောင်းကောင်းလိုးပေးသွားတဲ့ကိုညီ့ကိုလဲကျေးဇူးဆပ်ချင်တာကြောင့် အင်း ကောင်းတယ်ကိုညီရယ် သူ့သိပ်လိုးတက်တပဲ သီတာက အရမ်းလှတာကိုး ကျနော်တော့အရမ်းကိုဆွဲနေဘီ အွင် အပိုတွေိ. သိပ်နောက်ကျလို့မကောင်းဘူး ကိုညီ မပီးသေးဘူးမို့လား ကိုညီပြီး အောင်သီတာလုပ်ပေးမယ်လေ ဒီမှာလာလှဲလိုက် မျက်လုံးလေးလှန်ပြီးကြာပြောလေးနဲ့သီတာ့ကြောင့် ရင်တွေဘာတွေခုန်ပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လှဲ ပေးလိုက်တယ်။ သီတာလဲလှဲနေရာကထပီး ကိုညီ့အပေါ်မခွခင်မှာ မတ်တောင်နေတဲ့ကိုညီ့လီးကိုစုတ်ပေးလိုက်မိသေးသည်။
ပီးမှကိုညီ့ပေါ်သေချာခွပြီး သူ့စောက်ခေါင်းနဲ့ချိန်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ ဒီပုံစံလဲသူကျွမ်းလို့မဟုတ် အာကာနဲ့တုံးကစမ်းဖူးပြီး ခုကိုညီ့ကို ပြုစု ပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။ ဟွား အားအ တစ်ထစ်ချင်းစောက်နှခမ်းသားတွေကိုပွတ်တိုက်သွားတဲ့ လီးဒဏ်ကိုနှစ်ယောက်လုံးခံစားလိုက်ပြီး အဆုံးထိဝင်သွားတာ နဲ့သီတာ ဖင်ပြန်ကြွပြီး ဆောင့်ချပေးရင်း ကိုညီ့ကိုပြန်ပြုစုလိုက်တယ်။ ကိုညီကတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့ အောက်ကနေ သီတာ့ဖင်ကြီးကိုထိန်းကိုင်ထားရင်း အလိုက်ပြန်ဆောင့်ပေးလိုက် ရင်ဘတ်ပေါ်အိကျလာတဲ့ နို့သီခေါင်လေးတွေစို့လိုက်နဲ့ ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ အား အာ ဟွင်း သီတာထပ်ပီးချင်လာပြန်ပီ နော် သူမပီးသေးဘူးလား အင့်အင့်အင့် ပီးခါနီးပြောနော်ကိုညီ အင်း အွတ် ပြောပြီးတာနဲ့ ကိုညီ့နှုတ်ခမ်းတွေကို အာသာပြင်းပြင်းစုတ်နမ်းရင်း သီတာ အားရပါးရဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုညီလဲ အဲ့လောက်ဆောင့်နေတော့ပီးချင်နေပေမဲ့ သီတာပီးတဲ့အထိထိန်းဆောင့်တယ်။ ခနကြာတော့ လီးထိပ်မှပူခနဲဖြ စ်ပီး သီတာပီးကြောင်းသိတာနဲ့ သီတာ့ကိုဆွဲလှဲပြီး အပေါ်ကနေအသကုန်တက်ဆောင့်တော့တာပဲ။ သီတာကလဲ အဲဒါမျိုးကြိုက်တော့ စောက်ခေါင်းထဲပီးနေ ရင်းကို ဖြဲကားပြီးကိုပိုးစိုးပက်စက်ခံပေးလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ချွေးတွေရွှဲ အသက်ရှုသံတွေပြင်းဆူညံပြီး ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကိုညီဆက်မ ထိန်းနိုင်တော့ဘဲ အား…. ကိုပီးတော့မယ် သီတာ အပြင်ထုတ်လိုက်ရမလား အင်း ထုတ်လိုက် ကိုညီလဲ ဗိုက်ပေါ်ပန်းထုတ်ဖို့ထုတ်လိုက်ချိန်မှာပဲ သီတာက အမြန်ကိုညီ့ပေါင်ကြားထဲကနေအောက်ကို ကိုညီ့လီအထိလျောဆင်းပြီး ကိုညီ့လီးအကိုဖမ်းစုပ်လိုက်တယ်။
သူစောက်ဖုတ်ထဲကထုတ်ထုတ်ချင်းမို့ ဒစ်ကလဲနီရဲဖူးယောင်နေပီး လီးတချောင်လုံးလဲစောက်ည်တွေရွှဲနေတဲ့အပြင် အံ့သြသွားတဲ့ကိုညီလဲချက်ချင်းမပီး သေးဘဲ ခနအစုတ်ခံပြီးမှ သီတာ့ပါစပ်နွေးနွေးထဲ အားရပါးရပီးလိုက်တာမို့ လရည်တွေကပါးစပ်နဲ့မဆံ့ လျှံကျလာရတယ်။ ဒါပေမဲ့သီတာကတော့ ရသ လောက်မြိုချရင်း လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ခနကလက်ညိုးတွေကိုစုပ်နေရပုံမျိုးကို စုပ်ပေးတာ။ ကိုညီက သိပ်ချစ်သွားတယ်၊ သူကပါးစပ်ထဲမှာပီးရတာ ကြိုက်ပေမဲ့ မသီတာကိုမပြောရဲသေး။ ခုမသီတာကလဲ သူ့ကိုကောင်းကောင်းထောင်းပေး၊ ယက်ပေးထားတဲ့ကိုညီ့ကိုသဒ္ဒါယိုဖိတ်ပီး လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ် တယ်။ နောက်ဆုံးတစ်စက်ထိအစုပ်မပြတ်တဲ့သီတာ့ပါးစပ်ထဲကလီးကိုဆွဲထုတ်ပီး သီတာကိုဖက် အနားကပ်လှဲရင်း ချစ်သွားပြီသီတာရယ် ကို့ကိုစိတ်မဆိုး ဘူးမဟုတ်လား အွင် လူကိုလိုးပြီးမှ ဘာစိတ်မဆိုးဘူးလားလဲ ခုနကလိုးခဲ့ခံခဲ့ကြပေမဲ့ ခုမှရည်းစားရသလိုသီတာရှက်သွားပီး မျက်လွှာလေးချတယ်။ အသဲ ယားသွားတဲ့ကိုညီက အရမ်းချစ်မိပီးအသဲတွေယားသွားတာသီတာ ခုလဲထပ်လဲလိုးချင်သေးတယ် နှုတ်ခမ်းလေးကိုဆွဲနမ်းရင်းဘေးတစောင်းဖြစ်နေတဲ့သီ တာ့ဖင်ထွားအိအိကြီးကိုကိုင်ညှစ်နေမိတော့ ခုနကမပျော့တပျော့ဖြစ်နေတဲ့လီးကြီး ပြန်မာလာလို့ သီတာက အသာရုန်းထွက်ရင်း ဟိတ် ကိုညီ နောက်ကျ လို့မကောင်းဘူးနော် ပြန်ကြရအောင် နာရီကြည့်တော့၉နာရီခွဲတော့မယ်။
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် တရက်ကွက်ထဲနေတာဆိုတော့ သိပ်နောက်ကျလို့မ ကောင်း အတူပြန်သွားရင်ရှော့ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်အရေးလေးရတုန်းမို့ သီတာ့ကိုဆွဲဖက်လိုက်ပီး နောက်တွေ့ချင်သေးတယ်သီတာ၊ သီတာ့ကို ကိုယ် အရမ်းချစ်မိနေဘီ အို ကိုညီချစ်တာကြီးကလဲ ကြောက်စရာကြီး မကြောက်နဲ့သီတာ ဖြစ်နိုင်ရင်တသက်လုံးချစ်ချင်နေတာ ခုတောင် … ဟိတ် ဟိတ် မ တောင်နဲ့တော့ညီရယ် နောက်ကျနေဘီ နောက်တစ်ခါပေါ့နော် နော် တကယ်နော်သီတာ နောက်လဲခုလိုထပ်ချစ်ချင် လိုးချင်သေးတယ် သီတာလေးရယ် အွ င်း တူတူပဲကိုညီရယ် အ အွင်း အနမ်းရှည်တွေကိုအတင်းရပ်လိုက်ကြပြီး သီတာ့ကို တက်ဆီနဲ့ပြန်ခိုင်းပြီးကိုညီကတော့အဆင်ပြေသလိုပြန်မယ်ဆိုပြီးကျန်ခဲ့ လေရဲ့။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့အားရပါးရရေချိုးပြီးကုတင်ပေါ်လှဲရင်း ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမထင်မှတ်ဘဲကြုံခဲ့ရတဲ့ကာမအတွေ့အကြုံသစ်တွေနဲ့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါပျော်ဝင်ခဲ့ရသလို ခုမှတကယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုခံစားရပြီး အလိုးခံတယ်အရသာကိုတကယ်ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ ကိုညီ့ အယုအယတွေကိုတသိမ့်သိမ့်ပြန် ခံစားရင်း အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာတော့ ကိုညီနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့နောက်တစ်ခါများပေါ့ . . . . . . ပြီးပါပြီ။